ကြိုးစင်ပေါ်မှ မှတ်တမ်းများ | မြတ်နိုင်
မြတ်နိုင်	လူသားတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် မှတ်တမ်းလေးတစ်ခု	ကြိုးစင်ပေါ်မှ မှတ်တမ်းများ
ကြိုးစင်ပေါ်မှ မှတ်တမ်းများ … အခဏ်း (၁)
ချက်အမျိုးသား အာဇာနည်သူရဲကောင်း ဖူးချစ်ရေးသားသော “ကြိုးစင်ပေါ်မှ မှတ်တမ်းများ” စာအုပ်ကား ယုံကြည်ချက်ကြောင့် သေမင်းကိုပြုံးပြုံး ကလေး ရင်ဆိုင်သွားခဲ့သော နာဇီဆန့် ကျင်ရေးသူရဲကောင်း မှတ်တမ်းအဖြစ်၎င်း၊ ဂန္တ၀င်မြောက်သောစာပေအဖြစ်၎င်း ကမ္ဘာတွင် မော်ကွန်းတင် ကျန်ရစ်လောက်အောင် အစွမ်းထက်လှသော စာအုပ်ဖြစ်ပေသည်၊ ကမ္ဘာ အရပ်ရပ်မှ ပြည်သူများသည် ထွန်းပြောင်သော သတင်းစာဆရာတစ်ဦး၏ စာဖတ်သူအသဲ နှလုံးကို ဆွဲကိုင်နိုင်သော ပြောင်မြောက်သည့် အရေးအသားများကို၎င်း၊ သူမတူအောင် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်လှသော ရန်သူများကို ရင်ဆိုင်ရသည့် အချိန်အခါမျိုးတွင် အင်အားတက် ကြွကြံ့ခိုင်စေပြီး တော်လှန်ရေးစိတ်ဓာတ် မြင်မားလာအောင် ဖန်တီးပေးနိုင်စွမ်းရှိသော ထက် မြက် သည့် တော်လှန်ရေးစွမ်းရည်များကို၎င်း၊ တခဲနက်အသိ အမှတ်ပြုကြပေသည်။
“ကြိုးစင် ပေါ်မှ မှတ်တမ်းများ” သည် ဤမျှအစွမ်းထက်လှပေသည်။ နာဇီဆန့်ကျင်ရေး ကာလ၏ “ကြိုးစင်ပေါ်မှ မှတ်တမ်းများ”ကို ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလုပ်သမား လယ်သမား အာဏာပိုင်နိုင်ငံတည်ဆောက်နေသော ယခုလိုအချိန်အခါမျိုး၌ ဘာကြောင့်ထုတ်ဝေရသ နည်းဟု စာဖတ်သူ များစိတ်တွင် မေးခွန်းထုတ်ကောင်း ထုတ်လိုကြပေလိမ့်မည်။ အားလုံးသိ ရှိကြပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်း ချက်အာဇာနည်သူရဲကောင်းဖူးချစ်သည် “ကြိုးစင် ပေါ်မှမှတ်တမ်း များ” ကို ရေးသားခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း (၂၀) ကျော်ပြီဖြစ်သည်။ ထိုအနှစ် (၂၀) အတောအ တွင်း၌ ကမ္ဘာ့အခြေအနေ အရပ်ရပ်သည် အခြေအမြစ်မှ ပြောင်းလဲခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ဆိုရှယ် လစ်စနစ်သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၂၀)တုံးကလို နယ်ချဲ့နာဇီအရင်းရှင်များ၏ တိုက်ခိုက်မှု ကိုအလူး အလဲခံနေရသည့် အနေအထားမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲ၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကြီး ၏ ကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ် ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိလာပြီဖြစ်သည်။ ဤသို့ချီတက်လာသော ခရီး ကြမ်းကို ပြန်လှန်သုံးသပ်ရှုမြင်ခြင်းအားဖြင့် အခြေအနေအသစ်များ ပေါ်ထွန်းပြောင်းလဲနေသည့် ရုပ် ၀တ္ထုအခြေအနေများ ကို တအံ့တသြမြင်နိုင်စွမ်းရှိပြီး၊ ထိုအခြေသစ်အနေသစ်များ၊ ကမ္ဘာ့လုပ် သားပြည်သူတရပ်လုံး၏ အောင်မြင်မှု အသီးအပွင့်များကို ခိုင်မာအောင်ထိန်း သိမ်းပြီး ဆက်လက်ကြီးထွားတိုးပွားအောင် ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သော လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ကြည်ကြည်လင်လင် သိမြင်နိုင်ကြမည်သာဖြစ်သည်။
အခြေသစ် အနေသစ်များ၊ ကမ္ဘာ့လုပ်သား ပြည်သူများ၏ အောင်မြင်မှုအသီးအပွင့်များ၏ အရှိန်သြဇာနှင့် မြန်မာပြည်သူများ၏ ရုန်းကန်တိုက်ပွဲဝင်မှုများ ကြောင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဆိုလျှင် အရင်းရှင်မြေရှင်နိုင်ငံရေးဖြစ် ပေါ်တိုးတက်မှု လမ်း ကြောင်းကို မပြန်လမ်းသို့ပို့ဆောင်ပြီး မြန်မာ့ဆှိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ဖြင့် အလုပ်သမားလယ် သမား အာဏာပိုင်နိုင်ငံ ထူထောင်ရေးအတွက် အရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်နေလေပြီ။ ဤသို့သော ကမ္ဘာ့အခြေ အနေနှင့် မြန်မာ့အခြေအနေ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုများကို မြင်နိုင်စွမ်း မရှိသူများအား ချက်အမျိုးသား အာဇာနည်ဖူးချစ်တို့ ကမ္ဘာ့လက်ဝါးကြီးအုပ် အရင်း ရှင်စနစ်ကို မည်သို့မည်ပုံ ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြသည်ဟူသော ဆိုးဝါး ပြင်းထန်သည့် အလွန်တရာခက်ခဲလှသော အခြေအနေများကို “ကြိုးစင်ပေါ်မှ မှတ်တမ်း များ” တွင် ပြန်လည်တွေ့ မြင်နိုင်ကြပြီး ယနေ့ အခြေအနေသစ်များနှင့် အခြေခံကျသော အပြောင်းအလဲများကိုလည်း ချိန်ထိုးအကဲဖြတ်နိုင် ကြရန် ဤစာ အုပ်အား ထုတ်ဝေလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပေသည်။ ဖူးချစ်ကို သူရဲကောင်းများ ထွန်းညှိညွှန်ပြရာ မီးရှူးတန်ဆောင်အတိုင်း နိုင်ငံအားလုံးမှ လုပ်သားပြည်သူ အင်အား စုများ လိုက်ပါချီတက် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြခြင်း၏ရလဒ်အဖြစ် ကမ္ဘာကြီးပြောင်းလဲကာ အခြေသစ်အနေ သစ်များ ပေါ်ပေါက်လာရခြင်းဖြစ်သည်ကို နှလုံးသွင်းမိကြဖို့လိုအပ်သည်။
ဖက်ဆစ်နာဇီများကို ချေမှုန်းတိုက်ခိုက်ရာတွင် အမာခံဖြစ်သော ဆိုဗီယက်ပြည်သူများနှင့် နိုင်ငံတကာရှိ ဖူးချစ်လို နာဇီ ဖက်ဆစ် ဆန့်ကျင်ရေးသူရဲကောင်းများ၏ အနိုင်မခံအရှုံးမပေးသော တိုက်ပွဲဝင်စိတ်ဓာတ် များ၊ နယ်ချဲ့ အရင်းရှင်များနှင့် ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည့် တိုက်ပွဲတွင် အသဲနှင့်ယှဉ်ပြီး အသက်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကို စတေးခဲ့ကြသော ဆိုရှယ်လစ်ဘက်တော်များ၏ ကျေးဇူး တရားကို လည်း သိတတ်ကြဘို့လိုအပ် ပေသည်။
ဤကျေးဇူးတရားများကို ရင်ဝယ်ပိုက်ထွေးရင်း ချက်အာဇာနည်သူရဲကောင်းဖူးချစ်ကို မွေးထုတ်ခဲ့သော ချက်ကို စလိုဗက်ပြည်သူများနှင့် ဖက်ဆစ်ဂျပန်များကို တော်လှန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည့် မြန်မာပြည်သူများသည် အခြေသစ် အနေသစ်များပေါ်တွင် မိတ်ဆွေဖြစ်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် နှစ်ပြည်ထောင်ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ရေး၏ အမှတ် အသားအဖြစ်လည်းရည်စူးပြီး ဤစာအုပ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းရည်စူးချက်နှင့်တပါတည်း မြန်မာ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအား ချက်ပြည်သူများက ကြည်ညိုချစ်ခင်လေးစားကြသလို ချက် သူရဲကောင်းဖူးချစ်အား မြန်မာ ပြည်သူများက ပိုမိုသိနားလည်ပြီး ပိုမိုကြည်ညို လေးစားကြစေရန် ရည်သန် ချက် အောင်မြင်ပြည့်မြောက်မည်ဆိုလျှင် ဤ “ကြိုးစင်ပေါ်မှ မှတ်တမ်းများ” စာအုပ်ထုတ်ဝေရကျိုး ပိုနပ်လိမ့်မည်သာ ဖြစ်သည်။
သတိအနေအထားနှင့်ထိုင်၊ ကိုယ်ကိုမတ်မတ်တောင့်၊ ဒူးများပေါ်တွင် လက်များကပ်ထား၊ မျက် လုံးများကလည်း ပက်ချက်နန်းတော်ရှိ “အိမ်တွင်းထောင် ” မှ ၀ါကျင့်ကျင့်ထရံကို စူးစူးစိုက် စိုက်ကြည့် နေရမည်ဆိုလျှင် ဤသည်ကား အမှန်အားဖြင့်၊ အတွေးနယ်ချဲ့ရန် သက်တောင့် သက်သာရှိလှသော အနေ အထားမျိုးမဟုတ်ပါပေ။ ဒါပေမယ့် စိတ်ဆိုတာမျိုးကိုတော့ သတိ အနေအထားနဲ့ ထိုင်နေလို့ဘယ်သူက အာဏာပြနိုင်မှာလဲ။ တစုံတယောက်ကမည်သူမည် ၀ါက မည်သည့်အခါတွင် ပြောခဲ့သည်ကိုကား အသေအချာစုံစမ်း၍ ရကောင်းမှ ရတော့မည် ဤပက်ချက်နန်းတော်တွင်းမှ “အိမ်တွင်းထောင်” ကို “ဘိုင်စကုတ်ရုံ” ဟု အမည်ပေးခဲ့လေ သည်။ ထက်သန်သော ပကတိဥာဏ်ပါပေ။ ကျယ်ပြန့်လှသော အခန်းကြီးအတွင်းဝယ် ခုံတန်း ရှည်ကြီးခြောက်လုံးကို တလုံးနောက်တလုံးစီချထားသည်။ ၎င်းခုံများပေါ်၌ကား အစစ်ဆေးခံ အကျဉ်းသမားများသည် ကျောများတောင့်၍ ထိုင်နေ ကြရသည်။ ရှေ့တည့်တည့်မှ ဗလာဟင်း လင်းဖြစ်နေသော ထရံကြီးသည်ကား ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှ ပိတ်ကားသဘွယ် ဖြစ်နေလေသည်။ တခါ ထပ်၍ အစစ်ဆေးခံရလျက်၊ အညှင်းခံလိုခံ၊ သေလိုသေကြရမည့် အကျဥ်းသမားတို့၏ မျက်စိ များက ဤထရံပေါ်တွင် ပြသခဲ့သော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတို့ကား များပြားလှချေသည်။ တကမ္ဘာ လုံးရှိ ရုပ်ရှင်စတူဒီယိုများသည်ပင် ထိုမျှလောက်များမြောင်သော ဇာတ်လမ်းများကို မရိုက်ကူး ခဲ့ကြရသေးပေ။ မိမိတို့၏ တသက်ပတ်လုံး ဖြစ်စေ၊ ထိုတသက်တာမှ အသေးစိတ်တကဏ္ဍ ကလေးများကိုဖြစ်စေ ဖော်ပြသည့် ရုပ်ရှင်ကားများ။ မိခင်၏အကြောင်း၊ ဇနီးအကြောင်း၊ ကလေးများအကြောင်း၊ အဖျက်ဆီးခံရသော အိမ်၏အကြောင်း၊ ဆုံးရှုံးရသောအလုပ်အကိုင် အကြောင်း စသည်တို့ကိုပြသည့် ရုပ်ရှင်ကားများ။ ရဲရင့်သော ရဲဘော်တယောက်အကြောင်းနှင့် သစ္စာဖောက်မှုတမှုအကြာင်း၊ ထိုစာတမ်းတစောင်ကို ကျွန်တော်ကပေးခဲ့သော လူတယောက် ၏အကြောင်း၊ ထပ်လောင်း၍ စီးဆင်းဦးမည့် ရစ်ပတ်မိလောက်အောင် တင်းတင်းကြပ်ကြပ် လက်ချင်းညှစ်၍ နှုတ်ဆက်ပုံအကြောင်း စသည်တို့ကို ဖော်ပြသည့် ရုပ်ရှင် ကားများ။ တုန်လှုပ် ခြင်းနှင့်သန္နိဋ္ဌာန်၊ အမုန်းနှင့်အချစ်၊ သောကနှင့်မျှော်ကိုးချက်၊ ဤသည်တို့ဖြင့် ပြည့်ဝနေသော ရုပ်ရှင် ကားများပါပေ။ ဘ၀ကိုကျောခိုင်းထားကြပြီဖြစ်၍ ဤနေရာဤဌာန၀ယ် လူတိုင်းလူ တိုင်းသည် မိမိတို့၏မျက်စေ့အောက်၌ပင် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ အသက်ပျောက်ကြသည်။ သို့သော် လူတိုင်း ကား အသစ်တဖန် မွေးဖွားလာပြန်သည်မဟုတ်။ ဤအခန်းအတွင်း၌ ကျွန်တော်သည် ကိုယ်ရေးရုပ်ရှင်ကားကို အကြိမ်ပေါင်းရာပေါင်း များစွာကြည့်ခဲ့သည်။ အသေးစိတ်များကိုလည်း အကြိမ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ မြင်ခဲ့သည်။ ယခုထိုရုပ်ရှင်ကားကို တကြိမ်မျှပြန်လည်ပြော စမ်းကြည့် လိုပါသည်။ အဆုံးမသတ်နိုင်မီ၊ ကြိုးကွင်းကို ဆွဲတင်းလိုက်ပြီဆိုလျှင်လည်း၊ ဤ ရုပ်ရှင်၏ “ဟက်ပီ အဲန်းဒ်” ကို ဆက်လက်ရေးသားကြမည့် လူပေါင်းကား သန်းပေါင်းအလီလီ ကျန်ရစ်ဦးမည်ဖြစ်ပေသတည်း။
ကျွန်တော်သည် ခြေလှမ်းသွက်သွက်လေး လှမ်းနေခဲ့သည် – ရုပ်ဖျက်ထားသည့်အတိုင်း၊ ခြေ ထော့နင်းနှင့် အရွယ်ရင့်ရင့်လူကြီးတယောက်၏ ဟန်အမူအရာမပျက်စေရုံမျှ သတိထားကာ ယဲလီနက်တို့ထံ တိုက်တံခါးမပိတ်မီအရောက်၊ သွက်သွက်ကလေး လျှောက်နေခဲ့ပါသည်။ ထိုအိမ်တွင် ကျွန်တော်၏ “လက်ထောက်” မီးရက်တယောက် ဖြင့် စောင့်နေပေလိမ့်မည်။ ဤတခေါက်တွင် သူ့အနေနှင့် ပြောစရာအကြာင်းထူးမရှိမှန်း ကျွန်တော်သိသည်။ ကျွန်တော့ ဘက်ကလည်း သူ့အားမှာကြားစရာဘာမျှမရှိ။ သို့သော် ချိန်းထားလျက်နှင့် ပျက်ကွက်ခဲ့လျှင်၊ အခြားသူများစိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်သွားနိုင်သည် – အထူးသဖြင့် အိမ့်ရှင်သူတော်ကောင်းနှစ် ယောက် အပေါ် အပို စိတ်သောက မရောက်စေလိုပါ။သူတို့က လဘက်ရည် တခွက်နှင့် ဆီးကြိုကြပါသည်။ မီးရက်ကားရောက်နှင့်နေပြီ – သူသာမက ဖရီးဒ်တို့ လင်မယားလည်း စောင့်နေကြသည်။
– ရဲဘော်တို့၊ ခင်ဗျားတို့ကိုတွေရတာတော့ ကောင်းပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် အခုလို တပြုံကြီးစု ပြီးတော့ဖြင့် မတွေ့ချင်ဘူး။ ဒါမျိုးဆိုတာဟာ ထောင်နဲ့သေလမ်းကို တန်းနေတာပဲ။ လျှို့ဝှက် ရေးစည်းကမ်းတွေကို စောင့်ထိန်းယင်ထိန်းကြ၊ မထိန်းနိုင်ဘူးဆိုယင်တော့ အလုပ်မလုပ်ဘဲ နေကြတာကကောင်းလိမ့်မယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီလိုလုပ်ပုံမျိုး ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ရော၊သူများတွေကိုရောအန္တရာယ်ဖြစ်စေတယ်။နားလည်လား။
ရူဒဲပရားဗော – ချက်ကိုစလိုဗားကီးယားပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ၏ သတင်းစာ။ စစ်အတွင်းကစာကူးစက်ဖြင့် လျှို့ဝှက်စွာရိုက်နှိပ်ဖြန့်ချိရသည်။(ရူဒဲပရားဗော – အခွင့် အရေး နီ)
– ဒီလို ဒီလိုပါပဲ၊ ထွေထွေထူးထူးတော့ ဘာမှ မရှိပါဘူး။ အလုပ်ကတော့ ချောချောမောမောပဲ …
– ကဲ၊ ဒါဖြင့်ပြီးရော။ မေဒေးလွန်မှတွေ့ကြသေးတာပေါ့။ ကျွန်တော်အကြောင်းကြား လိုက်ပါ့မယ်။ကိုင်း…သွားတော့မယ်။
– ဟာ၊ မဖြစ်သေးဘူး၊ မစ္စစ် ယဲလီနကောဗား။ ဒီမှာ ကျွန်တော်တို့သိပ်စုနေကြလို့။
ယဲလီနကောဗား – ချက်လူမျိုးတို့၏ အမည်များတွင်၊ ကိုယ်ပိုင်အမည်၊ မျိုးရိုးအမည်ဟု တွဲ၍သုံးကြသည်။ ချက် အမျိုးသမီးများ၏ မျိုးရိုးအမည်များမှာ (ေ –ာဗား) သို့မဟုတ် (-ား) တွင် အဆုံးသတ်သည်။ သို့ဖြင့် ယောက်ျား အမည်များက ဖူးချစ်။ ယလီနက်။ ပလာခီ။ ဟုဆိုလျှင် မိန်းမအမည်များကို ဖူးချစ်ကောဗား၊ ယဲလီနကောဗား၊ ပလာခါ ဟူ၍ ခေါ်ကြသည်။
– တခွက်ထဲပါလေ။ သောက်သွားပါအုံး။ငှဲ့ချလိုက်သော လဘက်ရည်မှအငွေ့တထောင်း ထောင်းထလာသည်။ တစုံတယောက်က တံခါးခေါင်းလောင်းကို နှိပ်သည်။ ညကြီးမင်းကြီး အချိန်မတော် … ဘယ်သူများပါလိမ့်။ ဧည့်သည်တော်များကား စိတ်မရှည်ကြ။ တံခါးကို တ၀ုန်းဝုန်းနှင့်ထုကြလေသည်။
– ဖွင့်ပါတော့လား။ ဒီမှာပုလိပ်တွေကွ။
– ပြူတင်းပေါက်ဆီကို မြန်မြန် … ပြေးကြ။ ကျွန်တော့်မှာ ပစ္စတိုတစ်လက် ပါလာတယ်။ ခင်ဗျားတို့ လွတ်အောင် သူတို့ကိုဟန့်ထားမယ်။ နောက်ကျသွားခဲ့ပြီ။ ပြူတင်း ပေါက် အောက်တွင် ဂက်စတာပိုများရောက်နေကြကာ အခန်းတွင်းသို့ ပစ္စတိုများဖြင့် ချိန်ထားကြသည်။ အရပ် ၀တ်အရပ်စားနှင့် စုံထောက်များသည်လည်း အပြင်စင်္ကြန်မှတံခါးကို ချိုးဖွင့်ဝင်ရောက် လျက်၊ မီးဖိုဆောင်ငယ်ကိုကျော်ကာ အခန်းတွင်းသို့ ရောက်လာကြသည်။
တယောက်၊ နှစ်ယောက်၊ သုံးယောက် … အားလုံးလူကိုးယောက်။ ကျွန်တော်ကား သူတို့ဖွင့်ဝင်လာသော တံခါး၏ အကွယ်သူတို့၏ နောက်တည့်တည့် သို့ ရောက်နေသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော့်ကိုမမြင်ကြ။ ပစ်မည်ဆိုလျှင် သူတို့အား အေးအေးဆေးဆေး ပစ်ချနိုင် သည်။ သို့သော် ပစ္စတိုကိုးလက်က မိန်းမသားနှစ်ယောက်နှင့် လက်နက်မဲ့ယောက်ျားသုံးယောက်ကို ချိန်ထား သည်။ အကယ်၍ ကျွန်တော်က စတင်ပစ်ခတ်လိုက်လျှင်၊ ကျွန်တော်မကျခင် ကျွန်တော့်ရဲဘော်များ ကျဆုံးကြရ တော့မည်။
ကျွန်တော့ကိုသာ ပြန်၍ပစ်ပြီထားဦးတော့ ကျည်ဆံများက ပလူပျံလျက်၊ ကျွန်တော့်ရဲဘော်များသာလျှင် ဓားစာခံကြရပေလိမ့်မည်။ အကယ်၍ကျွန်တော်က မပစ်ဘဲ နေခဲ့လျှင် သူတို့အနေနှင့် နှစ်ဝက်ဖြစ်စေ၊ တနှစ်ဖြစ်စေ ၀င်ထိုင်နေကြရမည်။ နောက် တော်လှန် ရေးက ၎င်းတို့အားအရှင်လတ်လတ် ကယ်တင် လွတ်မြောက် စေလိမ့်မည်။ မီးရက်နှင့် ကျွန်တော်သာ ဤတောင်ကို ကျော်နိုင်ကြမည်မဟုတ်။ ကျွန်တော်တို့အား ညှဉ်းပန်းကြလိမ့်မည်၊ ကျွန်တော့်ထံမှကား ဘာတစ်ခုမျှ ရကြလိမ့်မည် မဟုတ်။ မီးရက်ထံမှကော။ မီးရက်သည် စပိန်ပြည်၌ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သော လူတစ်ယောက်၊ ပြင်သစ်အကျဉ်းစခန်းတွင် နှစ်နှစ်တာမျှနေခဲ့ရ သောသူ၊ စစ်ကာလကြီး အတွင်း၊ ပြင်သစ် ပြည်မှ ပရာဟာမြို့အရောက် လျှို့ဝှက်စွာပြန်လာခဲ့သော သူတစ်ယောက်။ ဤသို့သောသူမျိုးကား ဘာတစ်ခုမျှဖော် လိမ့်မည်မဟုတ်။ ကျွန်တော့် အနေနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန် နှစ်စက္ကန့်မျှသာရှိသည်။ ဒါမှမဟုတ် သုံးစက္ကန့်ပဲလား။ ပစ်ခတ် လိုက်လျှင် ဘာတစ်ခုကိုမျှ ကာကွယ်နိုင်မည်မဟုတ်။ ကျွန်တော့် တစ်ယောက် အနေနှင့်သာ အညှဉ်းပန်းခံရခြင်းမှ လွတ်မြောက်မည်။ သို့သော် ထိုသက်သာမှုအတွက် အကြောင်းမဲ့ သက်သက် ရဲဘော် ငါးယောက် အသက်တို့ကို ယဇ်ပူဇော်လိုက်ရမည်။ ဒီလိုတွက်တာ မှန် သလား၊ မှန်တယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီ။ ပုန်းနေရာမှ အပြင် သို့ထွက်လိုက်သည်။
ဂက်စတာပို – နာဇီများ၏ လျှို့ဝှက်သော ပုလိပ်အဖွဲ့။ ဤဘာသာပြန်စာအုပ်ထဲတွင် အဆိုပါပုလိပ်အဖွဲ့ဝင်များကိုလည်းဂက်စတာပိုဟူ၍ပင်ခေါ်ထားသည်။
-ဟဲန်းဒ်အောက်ဖ်။ဟဲန်းဒ်အောက်ဖ် – (ဂျာမန်စကား = လက်မြှောက်) ဒုတိယတချက်၊ တတိယအချက်။ ဤသို့လျှင် ထင်မိသည်။ တသသနှင့် လှလှပပထားခဲ့သော အိမ်ခန်းကား၊ အိမ်ထောင်ပရိဘောဂများနှင့် ဖရိုဖရဲ၊ မှန်ကွဲများအမွမွဖြစ်ခဲ့ပြီ။ လက်နှင့်အထိုးအကြိတ်၊ ခြေနှင့် အကန်အကျောက်။
မာ့ရ်ရှ် – (ဂျာမန်စကား = ရှေ့ကိုသွား)ကျွန်တော့်အား မော်တော်ကား တစင်းထဲသို့ သွတ်သွင်းလိုက်ကြသည်။ ပစ္စတိုများကား ကျွန်တော့်ကို အမြဲမပြတ် ချိန်နေကြသည်။ လမ်း တွင်ပင်ကျွန်တော့်အားစစ်လားမေးလားပြုကြပါတော့သည်။
ပစ်မည့်အစား လက်သီးမိုးသာ ရွာလာသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ဓာတ်ရထားတစီးကိုကျော် တက်မိကြသည်။ အဖြူရောင်ဖြင့် မွမ်းမံထားသည်ဟု ထင်မိသည်။ ဘဲ့နဲ့ … မင်္ဂလာဆောင် ဓာတ်ရထား အခုလို ညကြီးမင်းကြီးမှာရယ်။ အဖျားတက်စပြုပြီထင်သည်။ပက်ချက် နန်းတော်။ ဤအဆောက်အဦအတွင်းသို့ အသက်နှင့်ခန္ဓာတွဲလျက်သား ၀င်ရလိမ့်မည်ဟု ဘယ်သော အခါကမျှ မထင်မိခဲ့။ ယခုလေးထပ်အပေါ်ထိ ပုံစံအတိုင်း ပြေး၍တက်ရသည်။ သြော် ဒါကနာမည်ကျော် ဒုတိယ (က) – ၁ ဆိုတဲ့ ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေးဌာနကိုး။ ကျွန်တော့အနေ နှင့် စပ်စပ်စုစုသိလိုစိတ်များပင် ပေါ်လာသည် ဟု ထင်ရသည်။ ပက်ချက် – စစ်မဖြစ်မီက အရင်းရှင်ကြီး ပက်ချက်၏ ဘဏ်တိုက်အဆောက်အဦ။ စစ်အတွင်းက ဤဂေဟာတွင် ပရာဟောမြို့ ဂတ်စတာပိုက ဌာနချုပ်ဖွင့်ထားသည်။ ဘမ်းဆီးသောတပ်စိတ်ကို အုပ်ချုပ်သည့် ပုလိပ်အရာရှိ ပိန်ပိန်ရှည်ရှည်သည် ပစ္စတိုကို အိတ်တွင်းသို့ထည့် လိုက်ကာ၊ သူ၏ အခန်းတွင်းသို့ ကျွန်တော့အား ခေါ်သွားသည်။ ၎င်းနောက် စီးကရက်တလိပ်တည်၍ မီးညှိပေး သည်။
-ပုလိပ်မင်းကြီးရုံးက။ပဌမဆုံးအကြိမ် ဒုတ်နှင့်အရိုက်ခံရသည်။ ဒုတိယ၊ တတိယ၊ အချက်ပေါင်း ဘယ်နှစ်ချက်ဆိုတာကို ရေတွက်ပြီး ထားရမှာလည်း။ မောင်ရင် … ဒီအခြေအနေ ရောက်မှ တော့၊ ဒီလိုအချက်အလက်တွေကို ဘယ်နေရာဘယ်အချိန်မှာ သတင်းပြန်ပေးနိုင် တော့မှာလဲ။
– မင်းနာမည် ဘယ်သူလဲ … ပြော … ဘယ်မှာနေသလဲ … ပြောစမ်း … ဘယ်သူတွေနဲ့ အဆက် အသွယ်လုပ် သလဲ။ ပြော … ပြော … ပြောဆို … နို့မို့ မင်းအသက်ထွက်သွားမယ်။ ကျန်းမာတဲ့ လူတယောက်ဟာ အချက်ပေါင်း ဘယ်နှစ်ချက်အထိ ခံနိုင်ပါသလဲ။ ရေဒီယိုမှ သန်းခေါင်ယံရိုက်ဆော် လေပြီ။ ကာဖီဆိုင် များလည်း ပိတ်ကြပြီ။ နောက်ဆုံး ဧည့်သည်များလည်း ပြန်ကြပြီ။ ချစ်သူများကား မခွဲနိုင်မခွါရက် နှင့် တံခါးဝများတွင် ရစ်သီနေကြသည်။ အရာရှိပိန်ပိန်ရှည်ရှည်ကား အခန်းတွင်းသို့ ရွှင်ရွှင်ပြုံးပြုံးကြီး ရယ်မော၍ ပြန်ရောက်လာသည်။
– ဦးအယ်ဒီတာကြီးခင်ဗျား၊ နေသာထိုင်သာ ရှိ်ပါရဲ့နော်။ မည်သူကသူတို့အား ဖွင့်ပြောလိုက် ပြီနည်း။ ယဲလီနက်တို့လင်မယားလော။ ဖရီးဒ်တို့လော။ သူတို့ကား ကျွန်တော်၏ အမည် ကိုပင်မသိကြ။
– မြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေ။ ကျုပ်တို့အားလုံး သိပါတယ်ဗျာ။ ကဲ ဖွင့်ပြောမလား၊ လိမ္မာစမ်း ပါကိုယ့် လူရာ။
– ဗဟိုကော်မတီမှာ ဘယ်သူတွေ ပါသေးသလဲ။ အသံလွှင့်ဌာနတွေ ဘယ်မှာလဲ။ ပုံနှိပ်စက် တွေ ဘယ်မလဲ။ ပြော … ပြော … ပြောလေ။ ယခု ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များကို အေးဆေးစွာ ရေတွက်နိုင်ပြန်ပေပြီ။ ကျွန်တော်ကိုက်ထားမိရာ နှုတ်ခမ်းများတွင် သာ နာရမှန်း၊ ကျင်ရမှန်း သိတတ်ပါတော့သည်။
– ပြော၊ ပြောစမ်း။ပါးစပ်ထဲတွင် လျှာကိုလှည့်ယင်း၊ သွားဘယ်နှစ်ချောင်း ကျိုးခဲ့ပြီကို စမ်းသပ်ကြည့်နေမိပါသည်။ စေ့ငှအောင် မရေ တွက်နိုင်ပါ။ ဆယ့်နှစ်၊ ဆယ့်သုံး၊ ဆယ့်ခုနှစ်။ ဟုတ်သေးပါဘူးလေ၊ ဒါက ကျွန်တော့်ကို “စစ်ဆေးမေးမြန်း” နေကြ တဲ့ ပုလိပ်အရာတွေရဲ့ ဦးရေပဲ။ ထိုသူတို့အနက် အချို့ကား ယခုပင် သိသိသာသာကြီး လက်အံသေနေကြလေပြီ။ သေမင်းကလည်း ယခုထက်ထိ မလာနိုင်သေး။ သုံးနာရီ။ ရောင်နီဦးသည် မြို့ဆင်ခြေဖုန်း ဘက်မှ တွား၍တက်လာလေပြီ။ ဟင်းသီး ဟင်းရွက်သည်များကား ဈေး ဘက်သို့ ဦးတည်နေကြပြီ။ လမ်းတံမြက်လှဲသမားများလည်း လမ်းများပေါ်သို့ ထွက်လာကြပြီ။ ပုံပန်းအားဖြင့် ကျွန်တော်ကား နောက်ထပ် တမိုးသောက်ကို မြင်ရလိမ့်ဦးမည်ထင်သည်။
– ခင်ဗျား ဒီလူကိုသိသလား။ကျွန်တော်၏ ဇနီးကို ခေါ်လာကြသည်။ သူ မမြင်ပါစေရန် ကျွန်တော်သည် သွေးတို့ကို မြိုချခဲ့ သည်။ အမှန်အားဖြင့် ထိုသို့သော အားထုတ်မှုကား အလဿမျှသာဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်၏ မျက်နှာပေါ်တွင် သွေးများတကွက်မလပ် ထွက် နေသည်သာမက၊ လက်ဖျားများမှလည်း သွေးများ ယိုစီး နေသေးသည်။
– မသိဘူး။ဤသို့ပင် ပြောလိုက်သည်။ မျက်ရိပ်ကလေး တရိပ်မျှပင်မပျက်။ ဇမ္ဗူရာဇ် ရွှေစင် ကလေး။ ကျွန်တော့်အားသိသည်ဟူ၍ ဘယ်သောအခါမျှ မပြောပါဟူသော ကတိအတိုင်း တည်ကြည်ရှာပေသည်။ သို့သော် လက်ငင်းအခြေ အနေအရကား ထိုသို့ငြင်းရန်ပင် လုံးဝမလို အပ်တော့။ ကျွန်တော်၏ အမည်ကိုမည်သူက ဖော်ထုတ်ခဲ့လေသနည်း။ သူ့အားအပြင်သို့ခေါ် ထုတ်သွားကြသည်။ ကျွန်တော်လည်း အရွှင်လန်းနိုင်ဆုံးသော မျက်နှာထားဖြင့် သူ့အား နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုမျက်နှာထားကား ရွှင်လန်းကောင်းမှ လန်းပေတော့မည်။ ဒါကိုတော့ ကျွန်တော်မပြောတတ်။
လေးနာရီ။ မိုးလင်းပြီလား၊ ဒါမှမဟုတ် မှောင်နေတုန်းပဲလား။ လိုက်ကာများဆွဲချထားသော ပြူတင်းပေါက်က အဖြေမပေးကြ။ သေမင်းကလည်း လာနိုင်ခဲလှသည်။ သေမင်းကြီးခင်ဗျားဆီကို ကျွန်တော်လာခဲ့ရမလား။ ဘယ့်နဲ့ လာခဲ့ရမှာလဲ။ တစုံတယောက်အား ကျွန်တော်က လှမ်း၍ထိုးလိုက်သည်။ ထို့နောက် ကျွန်တော်လည်း ကြမ်းပေါ်သို့စိုက်၍ ကျ သွားသည်။ သူတို့က ကျွန်တော့်အား ကန်ကြသည်။ နင်းကြဆောင့်ကြသည်။
အဲ … ဟုတ်ပြီ … ဒါမှ ကိစ္စမြန်မြန် ချောမယ်။ ပုလိပ်အရာရှိ မဲတဲတဲသည် ကျွန်တော့်အား မုတ်ဆိတ်မွေးများမှ ကိုင်၍ဆွဲထူသည်။ ထို့နောက် ကျွတ်ထွက်သွားသော မုတ်ဆိတ်မွေးလက်တဆုပ်ကို ကျွန်တော့်အားပြန်၍ပြရင်း ဟက်ဟက်ပက်ပက်ကြီး ရယ်မောလေသည်။ တကယ်တော့လည်း ရယ်စရာပင် ဖြစ်လေသည်။ ကျွန်တော့် အနေနှင့်ကား နာရမှန်းလုံးဝမသိတော့။ ငါးနာရီ၊ ခြောက်နာရီ၊ ခုနှစ်နာရီ၊ ဆယ်နာရီ၊ တမွန်းတည့်လေပြီ။ အလုပ်သမားများလည်း အလုပ်သွား သူသွား၍ အလုပ်ပြန်သူပြန်ကြလေပြီ။ ကလေးများလည်း ကျောင်းတက်သူတက်၍ ကျောင်းဆင်းသူ ဆင်းကြလေပြီ။ ဆိုင်များတွင် ရောင်းဝယ်နေကြသည်။ အိမ်များတွင် ချက်ပြုတ်နေကြသည်။
ယခုအချိန်ဆိုလျှင် မေမေသည် ကျွန်တော့်အား သတိရကောင်းရနေပေလိမ့်မည်။ ရဲဘော်များလည်း ကျွန်တော်အဖမ်းခံရကြောင်း သိကုန်ကြပြီ … မတော် တဆ ကျွန်တော်က များဖွင့်ပြောလိုက်လျှင် … ဤသို့တွက်ကာ ဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ရန် အစီအစဉ်များ ပြုလုပ်ကောင်းပြုလုပ်နေကြပြီ။ မစိုးရိမ်ကြပါနဲ့၊ မပြောပါဘူး၊ ယုံကြပါ။ အမှန်ကိုဆိုရလျှင် အဆုံးသတ်ဟူသည်ကား ဝေးနိုင်တော့မည်မဟုတ်။
အခုအဖြစ်အပျက် အစစအရာရာတို့သည် အိပ်မက်၊ မကောင်းသော ချောက်အိပ်မက် ကြီးသာ ဖြစ်နေတော့ သည်။ အရိုက်အနှက် မိုးရွာ၊ နောက်ကျွန်တော့်အား ရေနှင့်ဖြန်း၊ နောက်တဖန် အထိုးအကြိတ်များ ၀င်လာပြန်၍ … ပြော … ပြော … ပြောဆို … ကျွန်တော်ကဖြင့် သေပဲမသေနိုင်။ မေမေတို့ ဖေဖေတို့၊ ကျွန်တော့် ဒါလောက် အားကောင်းအောင် ဘာဖြစ်လို့ မွေးထားခဲ့ကြတာလဲ။ နေ့လည်ခင်း၊ ညနေငါးနာရီ။ ယခု သူတိ်ု့အားလုံး နွမ်းနယ်နေကြပြီ။ အရိုက်အနှက်များကား ပြတ်တောင်း ပြတ်တောင်းနှင့် တချီနှင့်တချီအကြား အကြာကြီးနားနားနေတတ်သည်။ ယခုတော့ ၀တ်ကြေ၀တ်ကုန်မျှသာ ဖြစ်နေကြပြီ။ ထိုခဏတွင်၊ ခပ်ဝေးဝေးမှ အတော် မသတ်နိုင်သော အဝေးမှ အေးဆေး ငြိမ်သက်သော အသံတစ်သံ ပေါ်လာသည်။ ထိုအသံကား ပွတ်သီးပွတ်သပ်လုပ်သလို နူးညံ့နေသည်။
– အဲရ် ဟတ် ရှုံဂဲနု။ နောက်တကြိမ် ပြန်၍ထိုင်၊ ရှေ့တည့်တည့်မှ စားပွဲကား ပြိုသွားလိုက်၊ ပေါ်လာလိုက်၊ နောက် တစုံတယောက်က ကျွန်တော့်အား သောက်ရေ တစ်ခွက်လာပေး၊ အခြားတယောက်ကလည်း ကျွန်တော့အား ဘိနပ်များစီးပေးရန်ကြိုး စားယင်းကစွပ်မရတော့ ဟုပြော၊ နောက်သူတို့သည် ကျွန်တော့်အား ချီတခါဆွဲတလှည့်ဖြင့် လှေခါးထစ်တ လျှောက် ခေါ်ချသွား၊ ကားထဲထည့်၊ မောင်း၍သွား၊ တစုံတယောက်ကလည်း သေနတ်ဖြင့်ချိန်ထား၊ ရယ်စရာပင် ကောင်းသေးတော့၊ ပန်းဖြူဖြူများဖြင့် မွမ်းမံထားသောမင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ရထား ကိုကျော်တက်၊ သို့သော် ဤကိစ္စအလုံးစုံကား အိပ်မက်မျှသာ ဖြစ်ကောင်းသည်။ အဖျားတက် ခြင်း၊ ဖြစ်နေပေမည်။ သေဇော်ငင်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် သေခြင်းစင်စစ်ပင် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေ ပေမည်။ သေဇောငင်ခြင်းကား ခက်ခဲကြပ်တည်းလှသည် မဟုတ် ပါလော။ သို့ရာတွင် ဤအဖြစ်ကား ပေါ့ပေါ့ကလေးနှင့် သပွတ်အူလိမ်နေသည်။ နောက်တချက် အသာကလေး အသက်ရှူထုတ်လိုက်လျှင်ပင်၊ အစစအရာရာ အဆုံးသတ်သွားချေတော့မည်။
အဲရ် ဟတ် ရှုံဂဲနု – (ဂျာမန်စကား = ဒီလူ နောက်ထပ် ခံနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး။)
အဆုံးသတ်သွားရောတဲ့လား။ မဟုတ်သေးဘူးလေ။ အခုတခါ ထပ်ပြီးမတ်တတ်ရပ် နေရပြန် ပြီကော။ တကယ့်ကို ပင် ရပ်နေရသည်။ တယောက်တည်း အဖေးအမမရှိဘဲ ရပ်နေသည်။ ကျွန်တော့်ရှေ့တွင်လည်း ညစ်ပတ်ဝါကျင့် သော ထရံကြီးကပ်၍နေကာ … ထရံမှာ ဘာတွေ ပေနေပါလိမ့်။ သွေးတွေပေနေသည်ဟူ၍ကား စိတ်ကထင်မိ သည်။ ဟုတ်သည်။ သွေးတွေပင်ဖြစ်သည်။ လက်ညှိုးကို မြှောက်၍ တို့ကြည့် သုတ်ကြည့်သည်။ ဟုတ်တယ်လေ၊ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကြီးကျွန်တော့်သွေးတွေရယ်…။
တစုံတယောက်က နောက်မှနေ၍ ကျွန်တော်၏ခေါင်းကို ရိုက်လိုက်သည်။ လက်နှစ်ဖက်ကို မြှောက်၍ထိုင်ချေ၊ ထချေ လေ့ကျင့်ခဏ်းလုပ်ခိုင်းသည်။ တတိယအကြိမ် တွင် ကျွန်တော် လည်း ခွေကျသွားသည်။အရှည်ရှည်နှင့် အက်ဆက်စမန်း တယောက်သည် ကျွန်တော့် ကိုယ်ပေါ်မိုး၍ရပ်ကာ၊ ကန်လိုက် ကျောက်လိုက်နှင့် အထခိုင်းသည်။ မဖြစ်နိုင်သည်ကိုမှ ခိုင်း လေသည်တကား။ တဖန် တစုံတယောက်က ကျွန်တော့်အားဆေးကျောပေး၊ တဖန် ပြန်၍ ထိုင်မိ၊ မိန်းမတယောက်ကလည်း ကျွန်တော့်အားဆေးများ လှမ်းပေး၍၊ မည်သည့်နေရာ တွင် နာကျင်သနည်းဟု မေးမြန်းသည်။ ထိုခဏ၌ ကျွန်တော့်အနေနှင့် နာသမျှဟူသည်မှာ နှလုံးသားတွင်သာ စုပြုံနေသည်ဟု ထင်မိသည်။အက်ဆက်စမန်း – နာဇီတပ်များအနက် ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်ရာတွင် နာမည်ကြီးလှသည့် အက်ဆက်စ် အဖွဲ့ဝင်။
– မင်းမှာနှလုံးသားဆိုတာမှ မရှိဘဲနဲ့ ဟု အက်ဆက်စမန်း အရပ်ရှည်ရှည်က ပြောလေသည်။
– အိုး ရှိတာပေါ့ကွ ဟု ကျွန်တော်က ပြန်ပြောလိုက်ကာ၊ မိမိ၏ နှလုံးသားဘက်က ခုခံပြောဆိုနိုင်လောက်အောင် အင်အားဖူဖူလုံလုံရှိသေးခြင်းအတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဂုဏ် ယူမိသည်။ နောက် အစစအရာရာ မှုန်ပျောက်သွား ကြပြန်သည်။ ထရံ … ဆေးနှင့် မိန်းမ … အက်ဆက်စမန်း အရပ်ရှည်ရှည် …ကျွန်တော့်ရှေ့တည့်တည့်တွင် အကျဉ်းခန်း၏ ပွင့်လျက် သားတံခါးပေါက်ကို တွေ့ရသည်။ အက်ဆက်စမန်း ၀၀ တုပ်တုပ်တယောက်က ကျွန်တော့်အား အကျဉ်းခန်းအတွင်းသို့ ဆွဲသွင်း၊ အစိပ်စိပ် အမွှာမွှာဖြစ်နေသော ရှပ်အင်္ကျီကိုချွတ်၊ ကောက်ရိုး မွေ့ရာပေါ်သို့ ဆွဲတင်၊ ဖောယောင်ဖုထစ်နေသော ကိုယ်ကိုစမ်းသပ်၍၊ ကျပ်ထုပ်များ ထိုးပေးရန်အမိန့်ပေးသည်။
– ကြည့်စမ်း သူက အခြားတယောက်အား ခေါင်းကိုအသာခါပြရင်း ပြောလေသည် – ကြည့် စမ်း၊ ဒီကောင်တွေ ဘယ်လောက်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတာ … တဖန် ခပ်ဝေးဝေးမှ အတော မသတ်နိုင်သော အဝေးမှ အေးဆေးငြိမ်သက်သော အသံတသံကို ကြားလိုက်ရပြန် သည်။ ထိုအသံကား ပွတ်သီး ပွတ်သပ် လုပ်သလို နူးညံ့နေ သည်။
– မနက်အထိတောင် မခံတော့ပါဘူး။နောက်ငါးမိအကြာတွင် ဆယ်နာရီထိုးပေတော့မည်။ ၁၉၄၂ ခု၊ ဧပြီလ ၂၅ ရက်၊ နွေဦးရာသီ၏ လှလှပပနှင့် မပူ မအေးသော ညဥ့်ဦးအခါ ဖြစ်ပေသည်ကို။
ကြိုးစင်ပေါ်မှ မှတ်တမ်းများ … အခဏ်း (၂)
`… ၀ိဥာဉ်များလည်း နှစ်သိမ့်စဘွယ်
ကောင်းကင်ဘုံ ထိုအဝေးသို့လည်း … ´
`… ထိုဌာနီတွင် ည၏မှောင်မိုက်မှုလည်းကင်း
`… ထာဝစဉ်လက်နေသော ထိုကြယ်ပွင့်ကား
ဤသည်ကား အသုဘ၊ ဟုတ်သည်။ အကယ်ပင် အသုဘဖြစ်လေသည်။ မည်သူ့အား မြှုပ်နှံ နေကြသနည်း။ ဤနေရာတွင် မည်သူရှိသနည်း။ သူတို့နှစ်ယောက်နှင့် ကျွန်တော်သာရှိသည်။ ဟုတ် သည် – ကျွန်တော်သာ ရှိသည်။ ဤသည်ကား ကျွန်တော်၏ အသုဘပင်ဖြစ်ပေသလော။ ဒီမှာ … မိတ်ဆွေတို့ … နားထောင်ကြစမ်းပါ။ မှားနေပြီထင်တယ်။ ကျွန်တော်မသေသေးပါဘူး။ အသက်ရှင်နေ တာ မတွေ့ဘူးလား။ ခင်ဗျားတို့ကိုကြည့်ပြီး ခင်ဗျားတို့ကို စကားပြောနေတာ မြင်တယ်မဟုတ်လား။ တော်ကြပါတော့ဗျာ၊ ကျွန်တော့်ကို မြေမမြှုပ်ကြပါနဲ့အုံး။
`… လျှမ်းလျှမ်းတောက် မျက်လုံးများဖြင့်
ကောင်းကင်ဘုံ ထိုအဝေးသို့တည်း …´
မှတ်မိပါပြီ။ တစုံတဦးက ကျွန်တော့်အား ခဲခဲယဉ်းယဉ်းပင့်မ၍ အ၀တ်များ ၀တ်ပေးခဲ့သည်။ နောက် လူနာတင်ထမ်းစင်ဖြင့် ကျွန်တော့အား သယ်ဆောင်သွားကြသည်။ စင်္ကြန်တလျှောက်တွင် သံခွာသံများ ဟိန်းနေခဲ့သည်။ ထို့နောက် … ထို့ထက်လွန်၍ကား ဘာမျှမသိတော့၊ ထို့ထက်လွန်၍ကား ဘာမျှမသိ၊ ဤသည်ကား ကျွန်တော်၏ အစွမ်းကုန်ပစ်ဖြစ်သည်။
`… ထိုဌာနိအား ထာဝရအလင်းရောင်
အမြဲတစေ ၀င်းနေသည်လည်း … ´
– မောင်ရင်၊ တခုခုဖြင့် စားအုံးမှပေါ့။ နှစ်ရက်ပြီ၊ ရေချည့်ပဲ သောက် … သောက်နေတာ။
တနင်းင်္လာနေ့။ ကျွန်တော်အဖမ်းခံရသည်မှာ သောကြာနေ့ဖြစ်သည်။ ခေါင်းကလည်း လေးလှ ချည့်။ ရေကဖြင့် ရင်ကိုအေးစေလိုက်တာ။ အိပ် … အိပ်ပါရစေ။ ရေတွင်း၏ မှန်သာရင်ပြင်ကို ရေတ ပေါက်က ဆင်းသက်လှုပ်ရှားလိုက်သည်။ ဤသည်ကား တောင်ပေါ်ရှိ မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းကလေးမှ စမ်း ရေဦး။ ကျွန်တော်သိပါသည်၊ ရောကလန်တောင်ခြေရှိ တောစောင့်၏ တဲနံဘေး၌ဖြစ်ပါသည်။ ထင်းရှူး တောထဲတွင်ကား မိုးတစိမ့်စိမ့် တဖျောက်ဖျောက်ရွာနေသည် … အိပ်ရတာ အရသာရှိလိုက်တာလေ …
… နောက်တကြိမ် ပြန်၍နိုးလာသောအခါတွင်ကား အင်္ဂါနေ့ညနေသို့ ရောက်နေလေပြီ။ ခွေး ကြီးတကောင်သည် ကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ်သို့ မိုး၍ရပ်နေသည်။ ခွေးဝံပုလွေမျိုးဖြစ်သည်။ လှပနက်နဲ သော မျက်လုံးများဖြင့် ကျွန်တော့အား စူးစမ်းကြည့်ရှုနေသည်။
– မင်း ဘယ်အိမ်မှာနေခဲ့သလဲ။
အို ဟုတ်သေးပါဘူးလေ။ ခွေးကမေးနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အသံကား တစုံတယောက်၏ အ သံဖြစ်သည်။ မှန်သည် ဤနေရာတွင်အခြားသူတယောက် ရပ်နေသည်။ ဘွတ်ဖိနပ်ှရှည်ကြီးတရံကို မြင် ရသည်။ နောက်ထပ် ဖိနပ်ရှည်တရံနှင့် စစ်သားဘောင်းဘီများ သို့သော် … အထက်သို့ကား မကြည့် နိုင်တော့။ မော့်ကြည့်ရန် ကြိုးစားသည့်အခါဝယ် ခေါင်းဆီက ယစ်၍ယစ်၍မူးလာသည်။ အမယ်လေး … ဂရုစိုက်နေရမှာလား။ အေးအေးဆေးဆေး အိပ်စမ်းပါရစေအုံး …
ဓမ္မသီချင်းများကို သီဆိုခဲ့ကြသည့် လူနှစ်ယောက်ကား ယခုအခါတွင် စားပွဲ၌ထိုင်ကာ မြေပန်း ကန်များထဲမှ တစုံတရာကို နှိုက်၍နှိုက်၍စားနေကြသည်။ ယခုတော့ သူတို့အား ခွဲခွဲခြားခြားမှတ်မိပါပြီ။ တယောက်ကား ခပ်ငယ်ငယ်၊ ဒုတိယတယောက်ကား အရွယ်ပို၍ရင့်သည်။ ယခုမူ ဘုန်းကြီးများနှင့် လည်း မတူကြတော့။ လိုဏ်ဂူသည်လည်း လိုဏ်ဂူမဟုတ်တော့၊ သာမန် အကျဉ်းခန်းတခန်းသာဖြစ် သည်။ ကြမ်းပြင်မှ ပျဉ်ချပ်များကား ကျွန်တော်မျက်စေ့အောက်မှ တပြေးတည်းပြေး၍ စုသွားကာ၊ ၎င်း တို့၏အဆုံးတွင်မူ လေးလံနက်မှိုင်းသော တံခါးကြီး …..
သော့ခလောက်အတွင်းသို့ သော့သွင်းသံကြားရသည်။ လူနှစ်ယောက်လည်း ထိုင်နေရာမှ ခုန် ၍ထကြကာ၊ သတိအနေအထားနှင့် ရပ်လိုက်သည်။ အက်ဆက်စ်ယူနီဖောင်းဝတ် နှစ်ယောက် ၀င်လာ ၍ ကျွန်တော့်ကိုအ၀တ်အစားများဝတ်ပေးရန် အမိန့်ပေးကြသည်။ ထိုအချိန်အထိ – ဘောင်းဘီခြေအိုး တဘက်တဘက်၊ ရှပ်အင်္ကျီလက်အိုး တဘက်တဘက်တွင် နာကျင်မှုများ မည်မျှခိုအောင်းနေသည်ကို ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး – သူတို့သည် ကျွန်တော့်အား လူနာထမ်းစင်ပေါ်သို့ တင်ကာ၊ လှေခါးတလျှောက်မှ နေ၍ အောက်ဘက်သို့ ခေါ်ဆောင်သွားကြသည်။ စင်္ကြန်တလျှောက်လုံး သံခွာသံများ ဟိန်းနေခဲ့သည် … တခါ ကျွန်တော့်ကို သယ်ဆောင်သွားတုန်း သတိလစ်သွားတာတောင် ဆက်ပြီးသယ်သွားကြတဲ့ လမ်းဒီလမ်းကိုး။ ဘယ်ကိုခေါ်သွားကြမလို့လဲ၊ ဘယ်ငရဲမှာ အဆုံးသတ်မှာလဲ။
– မင်း သူ့ကို သိသလား။
ပေါလိစိုင်း၊ ဂဲဖဲန်းဂနစ္စ – (ဂျာမန်စကား – ပုလိပ်အချုပ်ထောင်ကြီး)
– ဒါပေမယ့်သူ့ကိုတော့ မင်းမုချသိရမယ်။
– လိမ္မာစမ်းပါ၊ ကိုယ့်လူရာ။
– ယူးလာ၊ ဖုံးနေလို့လဲမထူးတော့ပါဘူးရှင် – အာညိခ်ျကာက ၀င်၍ပြောလိုက်သည်။ လက်ကိုင်ပုဝါကို ဆုတ်ကိုင်ထားသော လက်ချောင်းများ၏ မသိမသာတုန်ဆက်မှုကလေးကသာ သူ၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို မလုံမလဲဖြစ်စေသည် – မထူးတော့ပါဘူး၊ ကျွန်မကိုဖော်တဲ့ ဖော်ကောင်က ရှိနေပြီပဲ။
– တိတ် – ပေါ်လာမည့်အဖြေကို တစုံတယောက်က ၀င်၍တားလိုက်သည်။ ထို့နောက် သူကကျွန်တော့် အားနှုတ်ဆက်ရန် ငုံ့၍လက်လှမ်းပေးသည့်အခါတွင်၊ သူ့အားကြမ်းတမ်းစွာ တွန်းထုတ်ပစ်လိုက်ကြ သည်။
ယူးလာ – ဗမာအမည်များကို အဖျားဆွတ်ခေါ်ကြသကဲ့သို့ ချက်ကိုယ်ပိုင်အမည်မျာကို ရင်းနှီးသည့်သ ဘော၊ ချစ်စနိုးသဘောဖြင့် တမျိုးပြင်၍ခေါ်လေ့ရှိကြသည်။ သို့ဖြင့် ယူးလိယုစ်အစား ယူးလာ သို့မဟုတ် ယူးလက်။ ဂုစတာအစား ဂုစတီနာ။ စသည်ဖြင့် ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။
– မင်းရဲ့ဇာတ်ကတော့ ပျက်ပါပြီကွာ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကာကွယ်လို့တော့ ရအုံးမယ်၊ ဖွင့်သာပြော ပေတော့။
– မင်း ဘာ့က်စ် တို့အိမ်မှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာနေခဲ့သလဲ။
– ကဲ၊ မြင်တယ်မဟုတ်လား၊ ဒို့ အားလုံးသိတယ်ကွ။ အကုန်သာ ဖွင့်ပြောပေတော့။
– ဒါလောက်တောင် ထိုင်းရသလားကွ။ ဒါအဆုံးသတ်ပဲဟာ။ နားလည်လား။ မင်းတို့ လုံးလုံးကြီးရှုံးပြီပဲ။
– ရှုံးတာက ကျုပ်တယောက်တည်း ရှုံးတာပါ။
– ကွန်မြူးန်တွေ နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံတုန်းပဲလား။
– ခုထက်ထိ ယုံတုန်းပဲတဲ့လား – တာဝန်ခံက ဂျာမန်ဘာသာဖြင့် မေးသည်ကို၊ အရာရှိ အရပ်ရှည်ရှည် က ဘာသာပြန်ပေးသည် – ရုရှတွေ အနိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ ယုံတုန်းပဲတဲ့လား။
– ဒါပေါ့၊ အဆုံးသတ်ဟာ ဒီတလမ်းပဲရှိတာ။
ကျွန်တော်ကား နွမ်းနယ်လျက်ရှိပြီ။ အငိုက်မိမသွားစေရန် ရှိသမျှအင်အားများဖြင့် တောင့်ထား ခဲ့သည်။ ယခုမူ ဒဏ်ရာနက်နက်မှ သွေးဒလဟောထွက်သကဲ့သို့ သတိလည်း ကျွန်တော့်ထံမှ လွတ်စ ပြုလေပြီ။ ကျွန်တော်အား လက်လှမ်းပေး၍ နှုတ်ဆက်သွားကြသည်ကို တွေ့ထိလိုက်သေးသည် – ပုံ ပန်းအားဖြင့် ကျွန်တော်၏ နဖူးပြင်ပေါ်တွင် သေမင်း၏အမှတ်အသားကို ဘတ်ကြားမိကြဟန်တူသည်။ မှန်ပေသည်။ အချို့သော် တိုင်းပြည်များမှ အာဏာပါးကွက်သားတို့သည်၊ အမိန့်အတိုင်း မကွပ်မျက်မီ၊ သေဒဏ်သင့်သူ၏နဖူးကို နမ်းရှုံ့သောဓလေ့မျိုးပင် ထားခဲ့ဘူးကြသည် မဟုတ်လော။
ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ကွယ်ပျောက်ခဲ့သော် …”
အမလေး … ကိုယ့်လူတို့ … ကိုယ့်လူတို့ကလဲဗျာ။ တော်ကြစမ်းပါတော့။ ခင်ဗျားတို့သီချင်းက ကောင်းယင်တော့ ကောင်းမှာပါ၊ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ဟာ မေဒေးအကြိုနေ့ခင်ဗျ။ မေဒေးဆိုတာ လူ့လောက တ၀ှမ်းလုံးမှာ အလှပဆုံး၊ အရွင်ပြဆုံးပွဲတော်မဟုတ်လား။ ကျွန်တော်သည် လန်းဆန်းသော သီချင်း တပုဒ်ကို ဆိုကြည့်သည်။ သို့သော် ကားရလစ်က တဘက်သို့လှည့်သွား၍ အဘခမြာ မျက်ရည်သုတ်ရ သည့်အထိ၊ ပို၍စိတ်မချမ်းမြေ့စရာဖြစ်သွားပုံရသည်။ သို့သော် ကျွန်တော်က အညံ့မခံဘဲ ဆက်၍ဆို သွားသည်တွင်၊ သူတို့လည်း ရော၍၀င်လာကြသည်။ ကျွန်တော်လည်း စိတ်ကျေနပ်စွာ အိပ်ပျော်သွားပါ တော့သည်။
သေမင်းကြီး ခင်ဗျားကို စောင့်နေလိုက်ရတာဗျာ၊ ကြာလှပါပြီကော။ ဒါနဲ့များတောင် ဟိုတ လောတုန်းကဆိုရင် ခင်ဗျားနဲ့တွေ့ဘို့နှစ်တွေ အမြောက်အများလိုသေးတယ်လို့ ထင်နေသေးတယ်။ လွတ်လပ်တဲ့လူ့ရဲ့ဘ၀ကို ပြန်ရောက်လိမ့်အုံးမယ်၊ အလုပ်တွေအများကြီး လုပ်နိုင်အုံးမယ်၊ အချစ်စိတ် တွေအများကြီးမွေး၊ သီချင်းတွေအများကြီးဆို၊ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းလုံးကိုလဲ လျှောက်ပြီးလေလွင့်လိုက်အုံးမယ် လို့တောင် မျှော်လင့်နေခဲ့သေးတယ်၊ အမှန်က ကျွန်တော်ဟာ အခုမှ အတောင်အလက်စုံစပြုရတာပါ။ အားတွေလဲ အများကြီး … အများကြီးရှိနေခဲ့သေးတယ်။ အခုတော့ ဒီအားတွေ ဘာမှမရှိတော့ဘူး။ ကုန်လုပါပြီ။
သို့သော် သေဇောင်နေခြင်းကား မကောင်း။ မွန်း၍နေသည်။ အသက်မရှူနိုင်။ လည်ချောင်းထဲ တွင်လည်း ဂလိုင်ခြစ်သံကို ကြားရသည်။ ဒီအသံကြောင့် ထောင်ကျဘော် ထောင်ကျဘက်များ နိုးသွား မည်ကို စိုးရသေးသည်။ အကယ်၍ ရေအနည်းငယ်နှင့် ဆွတ်လိုက်ရမည်ဆိုလျှင် … သို့သော် ခရား တွင်းမှရေကား ကုန်နေလေပြီ။ ကျွန်တော်နှင့် ခြေလှမ်းခြောက်လှမ်းမျှအကွာ၊ အကျဉ်းခန်းထောင့်ရှိ ကမုတ်ထဲတွင်ကား ရေလိုချင်သလောက်ရနိုင်မည်။ သို့သော် ထိုနေရာသို့ အရောက်သွားရန် အားရှိမှ ရှိပါမည်လော။
– အဘ၊ အဘ၊ ကြားလားဗျို့၊ ဒီလူ့ခမျာ တည်းတည်းကလေးပဲ ကျန်တော့တယ်။
– သန်လိုက်တဲ့ ဖြစ်ခြင်း၊ မြင်းနဲ့တောင် နင်လားငါလားပဲ။
နဲရုဒါရဲ့ ယေရှုကလေး – ချက်ကဗျာဆရာကြီး ယန်နဲရုဒါသည် `ခရစ္စမတ်စ် ကလေးချော့သီချင်း´ ဟူသော ကဗျာထဲတွင် `လူ့ လောကကြီးတခုလုံး အလင်းကိုရောက်အောင် ချီတဲ့လမ်းဟာ ဆုံးကိုပဲ မဆုံးနိုင်သေးဘူး။ ဒီလမ်းတလျှောက်မှာ လုပ်စရာအ လုပ်တွေ အများကြီးရှိသေးတယ်၊ ဒါကြောင့် အားပြည့်သွားအောင် အိပ်လိုက်ပါအုံး၊ ယေရှုကလေး၊ အိပ်လိုက်ပါကလေး´ ဟု ရေးစပ်ခဲ့ဖူးသည်။
အသွားခုနှစ်လှမ်း၊ အပြန်ခုနှစ်လှမ်း၊ တဘက်နံရံတွင် ခေါက်၍ရသော အိပ်စင်တလုံး၍၊ တဘက်တွင်ကား စိတ်ပျက် စရာအညိုရောင်ကြီး သုတ်ထားသည့် စင်ကလေးတစင်ရှိသည်။ ဟုတ်သည် ဤသည်ကို ကျနော်ကြုံဖူးပြီ။ ယခုသာ အနည်း ငယ်ပို၍ စက်ဆံလာသည်။ (ဆောင်းရာသီတွင် အခန်းလိုက်မီးမဖိုရတော့ဘဲ) ဗဟိုဌာနမှ အနွေးငွေ့ပေးသော ရေနွေးပိုက်များ တပ်ဆင်ထားသည်။ ဂံဖုလား၏နေရာတွင် ရေဆွဲအိမ်သာကမုတ်ရောက်နေသည် – အထူးခြားဆုံးကား လူများပင်ဖြစ်လေ သည်။ အထူးသဖြင့် လူများကိုယ်၌ စက်ကိရိယာဆန်နေကြသည်။ အော်တိုမစ်တစ် စက်ကရိယာများကဲ့သို့ ဖြစ်နေကြသည်။ ခလုပ်တစ်ခု နှိပ်လိုက်သည်နှင့် ဆိုလိုသည်မှာ သော့အိမ်အတွင်း သော့သွင်းလိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ တံခါးမှ ချောင်းကြည့်ပေါက် ကလေးကို ဖွင့်လိုက်သည်ဖြစ်စေ – အကျဉ်းသမားများသည် ဘာလုပ်နေရာမှမဆို ဗြုံးကနဲ ခုန်ထကြလျက်၊ တယောက်နောက် တယောက် စီတန်း၍ရပ်လိုက်ကြသည်။ တံခါးဖွင့်လိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက်လည်း၊ အကျဉ်းခန်းအတွင်းရှိ အကြီးအကဲ လုပ်သူက အသက်မရှူ၊ မရပ်မနားဘဲ (ဂျာမန်ဘာသာဖြင့်) ဟစ်အော်လိုက်သည်။
– “သတိ။ ။ အကျဉ်းခန်း နှစ်ရာခြောက်ဆယ့်ခွန် လူသုံးယောက် အားလုံးကောင်းပါသည်ခင်ဗျား။”
ဤသည်ပင်လျှင် – ၂၆၇။ ဤသည်ကား ကျွန်တော်တို့၏ အကျဉ်းခန်းဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ဤအကျဉ်းခန်းတွင်းရှိ အော်တိုမစ်တစ် စက်ကရိယာများကား ကျကျနန မလည်။ လူနှစ်ယောက်သာ ခုန်၍ထသည်။ ကျွန်တော်ကား ထိုအချိန်ကာလ တွင် ပြူတင်းပေါက်အောက် ကောက်ရိုးမွေ့ရာပေါ်တွင် အလျားလိုက် ဆန့်ခဲ့သည်။ မှောက်လျက်သား လဲနေခဲ့သည်။ တပတ်၊ ဆယ့်လေးရက်၊ တလ၊ ခြောက်သီတင်း – ပြီးတော့ ကျွန်တော်သည် အသစ်တဖန်ပြန်လည် မွေးဖွားလာသည်။ ခေါင်းကိုလည်း လှုပ်နိုင်ပြီ။ လက်ကိုလည်း မနိုင်ပြီ။ ကိုယ်ကိုလည်း တံတောင်များဖြင့် ထောက်ကာ ပင့်နိုင်။ မှောက်ရာမှ ပက်လက်လှန်ရန်ပင် ကြိုးစားခဲ့ဘူးပြီ … ယခု ရေးပြရခြင်းကား ထိုစဉ်အခါ လက်တွေ့လုပ်ရသည်ထက် ပို၍မြန်ဆန်လှသည်။
အကျဉ်းခန်းအတွင်း၌လည်း ပြောင်းလဲ၍နေသည်။ အကျဉ်းခန်းတံခါးပေါ်တွင် ဂဏန်း ၃ အစား ၂ ကို ပြင်၍တပ် လိုက်ကြပြီ။ ယခုအခန်းထဲတွင် လူနှစ်ယောက် တည်းသာ ရှိတော့သည်။ ကျွန်တော့အား စိတ်မချမ်းမြေ့စရာ သီချင်းတပုဒ်ဖြင့် မြှုပ်နှံခဲ့ကြသော လူနှစ်ယောက်အနက်မှ အငယ်ဖြစ်သူ ကားရလစ်ကား ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ သူ၏ သဘောထား ကောင်းပုံများသာ တငွေ့ငွေ့ ကျန်ရစ်တော့သည်။ အမှန်ဆိုရလျှင်၊ ကျွန်တော့်အနေနှင့် သူ့အား အိပ်မက်လိုလို၊ တကယ်လိုလို သာ မြင်နိုင်မှတ်မိနိုင်တော့်သည်။ သူသည် မိမိ၏ အဖြစ်အပျက်များကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်နှင့် ထပ်ကာထပ်ကာ ပြောပြနေ တတ်သည်။ ကျွန်တော်ကလည်း ဇာတ်လမ်းတ၀က်သို့ရောက်တိုင်း ရောက်တိုင်း အိပ်ပျော်သွားလေ့ရှိသည်။
သူသည် ကျွန်တော့်ဘေးတွင်ထိုင်ကာ ကျွန်တော့်အား အတင်းအကြပ် အစာစားခိုင်းသည်။ ကျွန်တော်က လည်း မစားနိုင်။ စနေနေ့တွင် – အလို ဒီရောက်တာ ရှစ်ရက်တောင် ရှိပြီလား – သူသည် အကြမ်းဆုံးသောလမ်းစဉ်ကို လိုက် တော့သည်။ ပေါလိစိုင်းမိုင်စတဲရ်အား ကျွန်တော်ရောက်ကတည်းက ဘာတခုမှ မစားသေးကြောင်းဖြင့် ပြောပြလိုက်လေသည်။ ပေါလိစိုင်းမိုင်စတဲရ်ကား အမြဲတမ်းအစိုးရိမ်ကြီးနေတတ်သည့် ပန်ကရာ့စ်ထောင်မှ အက်ဆက်စ် ယူနီဖောင်းဝတ် ဗိန္ဓော ဆရာဖြစ်သည်။ သူ့ကိုအသ်ိမပေးပဲ ချက်အမျိုးသားဆရာဝန်သည် အက်စပရင်ကလေးတစ်ခဲမျှပင် ဆေးညွှန်းရေးမပေးနိုင်ပေ။ သူသည် လူမမာများ သောက်သည့် ဟင်းချိုတခွက်ကို ကိုယ်တိုင်ယူလာ၍ ကျွန်တော် အကုန်သောက်ပြီးသည်အထိ စောင့် ကြည့်နေလေသည်။
ကားရလစ်ကား မိမိ၏အောင်မြင်မှုကြောင့် ကျေနပ်သွားလေသည်။ နောက်နေ့တွင် ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ သို့ တနင်္ဂနွေနေ့ ဟင်းချိုတခွက်ကို သူကိုယ်တိုင် လောင်းထည့် ပေးသည်။
နောက်ထပ်ကား ဘာမျှစား၍မရတော့။ ကျွန်တော်၏ သွားဖုံးများမှာကျေနေသဖြင့် တနင်္ဂနွေနေ့ ဂူးလာ့ရ်ှထဲမှ ပျော့ပြဲပြဲအာလူးဖတ်များကိုပင် မ၀ါးနိုင် မချေနိုင် ဖြစ်နေ ခဲ့သည်။ ကျဉ်းနေသော လည်ချောင်းကလည်း အသေးဆုံးသော အဖတ် တိုင်းကိုပင် ပိတ်ဆို့နေပါတော့သည်။
– ဂူးလာ့ရှ် … ဂူးလာ့ရ်ှတောင်မှ မစားချင်ဘူးတဲ့ … ကားရလစ်က ကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ်မိုးလျက် ညီးညူယင်း၊ ခေါင်းကိုလည်း ၀မ်းနည်းစွာခါ၍နေလေသည်။
သြော် – ခင်ဗျားတို့က ၁၉၄၂ ခုနှစ်၊ ပန်းကရာ့စ်ထောင်ထဲမှာမှ မနေခဲ့ရဘဲကိုး။ ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့တော့ အဲဒီတုန်းက ဂူးလာ့ရ်ှဆိုတဲ့ ဟင်းဟာ ဘယ်လောက် တာသွားတယ်ဆိုတာ သိမှာမဟုတ်ဘူး။ သိလဲ ဘယ်သိနိုင်မလဲ လေ။ ဆာလွန်းသဖြင့် ၀မ်းထဲမှ တကြုတ်ကြုတ်မြည်နေသည့် အခါမျိုး။ ရေချိုးထွက်ကြသည့် အခါများတွင် အကျဉ်းသမားများသည် လူ့အရေများဖုံး ထားသည့် အရိုးကောင်များအဖြစ် သရုပ်ပေါ်လာသည့် အခါမျိုး။ ရဲဘော်တိုင်းသည် မိမိ၏ရဲဘော်ထံမှ ပုံစံအချို့ကို ယုတ်စွအ ဆုံးမျက်စိများဖြင့် ခိုးယူလေ့ရှိကြသည့်အခါမျိုး။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခြောက်ကို၊ ခရမ်းချဉ်သီးရည်ကျဲကျဲနှင့် ရောနှောမွှေထား လျှင်ပင် အလွန်မက်စရာကောင်းသော ဇိမ်ခံအစားအစာဟု ထင်နေကြရသည့်အခါမျိုး။
ဂူးလာ့ရှ် – သာမန်ချက်ပြုတ်သော ဂူးလာ့ရ်ှမှာ အမဲသားနှင့် အာလူးဟင်းမျိုးဖြစ်သည်။ အရည်ကျဲကျဲနှင့် ဂူးလာ့ရှ် ဟင်းချိုလည်း ချက်ကြသည်။
ယင်းသို့သော်အခါမျိုးတွင်၊ ဘာကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ ကြာသာပတေးနှင့် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း တပတ်လျှင် နှစ်ကြိမ်မှန်မှန်ဂူးလာ့ရှ် ဟင်းချက်သည်။ ဟောက်ဆာရ် ဘိုင်တာရ် တို့သည် ပန်းကန်ထဲသို့ အာလူးများမကို ယောက်မတကော်စာထည်၍ မဖြစ်စ လောက်သော အသားဖတ်အနည်းပါသည့် ဂူးလာ့ရ်ှဟင်းရည်တဇွန်းကို အပေါ်ကဆမ်းနေသည်။ ထိုအစာကား အရသာရှိလှပါ ဘိတောင်း။ မှန်သည် အရသာရှိမျှမကသေး၊ လူ့လောကကို ထိထိတွေ့တွေ့ကြီးအမှတ်ရစေသည့် အရာ ဖြစ်သည်။ ဂက်စ်တာ ပိုထောင်၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်လှသည့် မူမမှန်လောကကြီးတွင် ဤအစားအစာကား ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့မှု၏ အထိမ်းအမှတ် ဖြစ်သည်။ နေရိုး ထိုင်ရိုး လူ့ဘ၀၏ အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်နေသည် – အိုလေ အမြဲမပြတ်ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ သေဘေးအန္တရာယ်ကြီး က ဟင်းမွှေးခတ်ထားတဲ့အတွက်၊ ဒီဟင်းရည်ကောင်းတဇွန်းဟာ ဘယ်လောက်တာသွားတယ် ဆိုတာကို ဘယ်သူခန့်မှန်း နိုင်ပါ့မလဲ။
နှစ်လမျှကြာခဲ့ပြီ။ ယခုသော ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပင် ကားရလစ် အံ့အားသင့်မှုကို သဘောပေါက်ပါပြီ။ ကျွန်တော် ကား ဂူးလာ့ရ်ှကိုမစားချင်ခဲ့ – ကားရလစ်အတွက် ဆိုလျှင်၊ ကျွန်တော်၏သေနေ့စေ့ပုံကို အခြားအခြားသော အချက်များထက် ဤတချက်တည်းက အခိုင်အမာသက်သေ ထူခဲ့ပြီးဖြစ်လေသည်။
နောက်တနေ့ည နှစ်နာရီအချိန်တွင် သူတို့သည် ကားရလစ်အား နှိုးကြသည်။ ငါးမိနစ်အတွင်းခရီးထွက်ရန် အသင့် ပြင်ဆင်ထားရမည်ဟု ဆိုသည်။ လာပြောပုံမှာ ခဏတဖြုတ်မျှအပြင်ထွက်၍ လည်ရမည့်ပုံမျိုးဖြစ်လေသည်။ လမ်းခရီး၏ အဆုံးတွင် လူတယောက်၏ဘ၀ အဆုံးသတ်ချင်သတ်တော့မည် မဟုတ်သကဲ့သို့ပင် ဖြစ်သည်။ ထောင်သစ်၊ အကျဉ်းစခန်း၊ ကွပ်မျက်ရာနေရာ၊ မည်သို့သွားရမည်ကို မည်သူမျှမသိ။ ကားရလစ်သည် ကျွန်တော်၏ ကောက်ရိုးမွေ့ရာဘေး၌ ဒူးထောက် ကာ ကျွန်တော့်ခေါင်းကိုပွေ့လျက် နမ်းသွားပါသေးသည် – ထိုခဏ၌ စင်္ကြံဘက်ဆီမှ ယူနီဖောင်းဝတ် ထောင်စောင့်၏ ငေါက် ငမ်းသံကား၊ ပန်းကရာ့စ်သည် နူးညံ့သောစိတ်မျိုးမွေးထားရမည့် နေရာမဟုတ်ကြောင်းကို ဖော်ပြသလိုပေါ်ထွက်လာခဲ့သည် – ကားရလစ်လည်း တံခါးပေါက်မှ အပြေးကလေးထွက်သွားရှာသည်။ ၎င်းနောက် သော့ခလောက်ပိတ်သံလည်းပေါ်လာလျက် …
ဟောက်ဆာရ်ဘိုင်တာရ် – ထောင်ဘာယာ။ ပန်းကရာ့စ်ထောင်တွင် စင်္ကြံအလိုက် ထောင်ဘာယာများတာဝန်ချထားသည်။ နိုင်ငံရေးသမားများလည်း ထောင်ဘယာများအဖြစ် အလုပ်လုပ်ကြသည်။ အခဏ်း ၇ အဆုံးပိုင်းတွင် ဘာယာများအကြောင်း တွေ့နိုင်သည်။
… အကျဉ်းခန်းတွင်းဝယ် ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တည်း ကျန်ရစ်ခဲ့ကြပါတော့သည်။
ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်း ပြန်၍တွေ့ကြဦးမည်လော။ ဘယ်သောအခါတွင် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ခွဲခွာပွဲပြုလုပ်ရဦး မည်နည်း။ ကျန်ခဲ့သော ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက် အနက် မည်သူက အလျင်ထွက်ခွာ သွားရမည်နည်း။ မည်သည့်အရပ်သို့သွား ရမည်နည်း။ သွားရမည့်သူကို မည်သူက လာ၍ခေါ်မည်နည်း။ အက်ဆက်စ် ယူနီဖောင်း ၀တ်ထားသည့် ထောင်စောင့်လော။ သို့မဟုတ် ယူနီဖောင်းမ၀တ်ထားသည့် သေမင်းလော။
ကျွန်တော်ဤစာများကို ရေးနေသည်မှာ၊ ထိုပထမဆုံးအကြိမ် ခွဲခွာရခြင်း၏နောက်ပိုင်း ကျွန်တော်တို့ထံ၌ကျန်ရစ်ခဲ့သော အတွေးများ၏ ပဲ့တင်သံများဖြင့်သာ ရေးနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍တွက်လျှင် တစ်နှစ်လုံးလုံး ရွေ့ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ခွဲ ထွက်သွားရသော မိတ်ဆွေအား လိုက်၍ပို့လိုသည့် စိတ်ကူးစိတ်သန်းများသည် ကြီးတစ်ခါ ငယ်တလှည့်ဖြင့် ပြန်ပြန်၍ လည်နေပါသည်။ အကျဉ်းခန်းတံခါးပေါ်တွင် ချိတ်ထားသည့် နှစ်ဂဏန်းမှာလည်း သုံးသို့တဖန်ပြောင်းသွား၍၊ တဖန် နှစ်၊ တဖန် သုံး၊ နှစ်၊ သုံး၊ နှစ် အကျဉ်းကျ ဖေါ်ကျဘက် လူသစ်များ ရောက်လာ၍၊ တဖန်ပြန်ထွက်သွားကြပြန်ကာ – ထိုယခင် တနေ့က အ ကျဉ်းခန်း ၂၆၇ တွင် ကျန်ရစ်ခဲ့သော လူနှစ်ယောက်သာ၊ သံယောဇဉ်ကြီးစွာဖြင့်၊ အတူတကွ၊ ထိုင်မြဲထိုင်လျက် ကျန်ရစ် ကြသည်။
“အဘ” ကား ကျောင်းဆရာများ၏ နာယက၊ အသက်ခြောက်ဆယ်အရွယ်ရှိ ယိုးဇက်၊ ပက်ရှက်ခေါ် ကျောင်းဆရာ တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်အလျင်၊ ရှစ်ဆယ့်ငါး ရက်စော၍ အဖမ်းခံရသည်။ လွတ်လပ်သော ချက်စာသင်ကျောင်းများ ပြု ပြင်ပြောင်းလဲရေးစီမံကိန်းကို ရေးဆွဲခြင်းအားဖြင့် (ဂျာမန်) အင်ပါယာကြီးအား ဆန့်ကျင် ကြံစည်သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့ကြသည်။
“အဘ” ထိုသူကား …
ဒါပေမယ့် သူ့အကြောင်းကို မင်းဘယ်လိုလုပ်ရေးမှာလဲ မောင်ရင် ဒါကတော့ အတော်ခက်လိမ့်မယ်။ လူနှစ်ယောက်၊ အကျဉ်းခန်း တစ်ခန်းနှင့် တစ်နှစ်တာသောအချိန်။ ထိုအချိန်၏ နောက်ပိုင်းဝယ် “အဘ” ဟူသော အမည်မှာ စကားအရဖြင့် တင်စားခေါ်ဝေါ်ခြင်းသာ မဟုတ်တော့။ ထိုအချိန်အတွင်းဝယ်၊ အသက်အရွယ်ကွာခြားသော အကျဉ်းသမား နှစ်ယောက်တို့သည်၊ တကယ်ပင် အဖေနှင့်သား ဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။ ထိုအချိန်အတွင်းဝယ် ကိုယ်စွဲဗီဇ၊ နှုတ်စွဲစကားလုံးများအပြင် အသံနေအသံထား ပါ ရောနှော ဖလှယ်မိကြသည် – ဒီနေ့မတော့ ဘယ်ဟာက ကျွန်တော့်မူရင်း၊ ဘယ်ဟာက အဖေရဲ့ပါရင်းစွဲ၊ အကျဉ်းခန်းထဲကို သူက ဘာယူခဲ့တယ်၊ ကျွန်တော်က ဘာ ပါခဲ့တယ် ဆိုတာကို ခွဲနိုင်ယင် ခွဲခြားကြည့်လိုက် ပါအုံး။
အဘသည် ကျွန်တော့်အား တညပြီးတည စောင့်ရှောက်ပြုစုခဲ့သည်။ သေမင်းကြီးနီးလာတိုင်း ဖြူဖွေးသော ပတ်တီး ရေစိုများဖြင့် သေမင်းအား ခြောက်လှန့် မောင်းထုတ် နေခဲ့သည်။ အနွံအတာခံလျက် ကျွန်တော်၏ဒဏ်ရာများမှပြည်များကို ဆေးကျောပေးသည်။ ကျွန်တော်၏ကောက်ရိုးမွေ့ရာတ၀ိုက် ပျံ့နှံ့ထွက်ပေါ် နေသော ပြည်ပုပ်နံ့ စိမ်းရွှေရွှေကြီးကိုပင် နှာခေါင်းရှုံ့ မပြခဲ့ပါ။ ပထမဆုံးအကြိမ် အစစ်ခံခဲ့စဉ်က ဒဏ်ထိသွားသော ရှပ်အင်္ကျီအစုတ်စုတ် အမွှာအမွှာကို လျှော်လည်း လျှော်ပေးသည်။ ချုပ်ဖာ၍လည်း ပေးသည်။
နောက်ထိုအင်္ကျီကိုအဖတ်ဆည်၍မရသောအခါ သူ့အ၀တ်အစားများ ဆင်ပေးပါသည်။ ပန်းကရာ့စ်ထောင်တွင်း မြေကွက်လပ်တွင် နံနက်နာရီဝက်မျှ ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားရေး ပြုလုပ်ကြစဉ် ဒေစီပန်းတပွင့်နှင့် မြက်တပင်ကို ကျွန်တော့်အတွက် အသက်ဆံဖျား စွန့်စား၍ ခူးယူလာသည်။ အစစ်ခံရန် ထွက်သွားရတိုင်း သူသည် ကြင်နာသော မျက် လုံးများဖြင့် ကျွန်တော့်အားကြည့်ရင်း ကျန်ရစ်သည်။ ပြန်လာသောအခါ ဒဏ်ရာအသစ်များကို ပတ်တီးအသစ်များဖြင့် စည်းပေးသည်။ ညဘက်တွင် ကျွန်တော့်အား ခေါ်ထုတ်သွားကြလျှင် မအိပ်ဘဲ စောင့်နေ၍ ကျွန်တော်ပြန်လာသော် ကျွန်တော့်အား ကောက်ရိုးမွေ့ရာပေါ်ချ စောင်လုံလုံခြုံပေးပြီးမှ ကိုယ်တိုင်လည်း အိပ်ရာဝင်လေသည်။
ဤသည်တို့ကား နှစ်ယောက်သား တွေ့ဆုံစက အဖြစ်အပျက်များဖြစ်သည်။ နောင် ကျွန်တော့်အနေနှင့် မိုးတိုးမတ် တတ်လည်း ရပ်နိုင်၊ သားပီပီမွေးကျေးဇူးလည်း ဆပ်နိုင်လာသည် အထိ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် ဆက်ဆံပုံမှာ မပြောင်းမလဲ ရှိနေခဲ့ပါသည်။
ဒါပေမယ့် တအောင့်ကလေးအတွင်းမှာ စုံစုံလင်လင်ပါသွားအောင် မင်းနှယ့်လုပ်ရေးမှာလဲ မောင်ရင်။ ထိုနှစ်အတွင်း အကျဉ်းခန်း ၂၆၇ မှာ အထူးတလည် အသက်ဝင် နေခဲ့သည်။ ထိုလှုပ်ရှားမှုများတွင် ဘလည်း သူ့အခန်းမှနေ၍ သူ့သဘာဝအတိုင်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ ဤအချက်ကိုထည့်၍ ပြောရပေမည်။ ထိုမျှမကသေး ဇာတ်ကြောင်း သည်လည်း ဤနေရာတွင် အဆုံးသတ်မည်မဟုတ်သေး (ဒီလိုဆိုလိုက်တော့ဖြင့် မြှော်လင့်ချက် အသံကလေးတွေတောင် မြည်သွားလေရော့သလား။)
– “ရဲရဲသာအုပ်ပါ ကိုရင်ရ။ ပက်ချက်နန်းတော်မှာ စစ်ကြဆေးကြတာတွေကိုတောင် ခံနိုင်ခဲ့သေးတာ၊ ကိုယ့်လူမုတ်ဆိတ် ရိတ် တာလောက်တော့ သိပ်ဖြုံမယ် မထင်ဘူး။” သို့သော် သူရောကျွန်တော်ပါ အားမရှိကြသဖြင့် နှစ်ယောက်လုံး အနားယူကြရသည်။
နောက်နှစ်ရက် ကြာသောအခါ အကျဉ်းသမားများအနက်မှ နောက်နှစ်ဦးကိုသိကျွမ်းလာရပြန်သည်။ ပက်ချက်နန်း တော်ရှိ အရာရှိမင်းများကား စိတ်မရှည်ကြ။ သူတို့က အခေါ်လွှတ်လိုက်တိုင်း ပေါလိစိုင်းမိုင်စတဲရ်က နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ဆင့်စာ ပေါ်တွင် တရန်စပေါ့ရ်တွန်ပဟီးဂိ ဟူ၍ချည့် ရေးရေးလွှတ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် အရောက်ပို့မည်ဟု အမိန့်ချမှတ် တော်မူကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဟောက်ဆာရ်ဘိုင်တာရ် သို့မဟုတ် ထောင်ဘာယာ ယူနီဖောင်းများဝတ်ထားသော အကျဉ်း သမားနှစ်ယောက်လည်း ကျွန်တော်တို့အခန်းတွင်းအရောက် လူနာထမ်းစင်ဖြင့် ပေါက်လာကြသည်။
ဘက ကျွန်တော့်အား ပင်ပန်းကြီးစွာဖြင့် အ၀တ်ဝတ်ပေးသည်။ မိတ်ဆွေနှစ်ဦးကလည်း ကျွန်တော့်အား ထမ်းစင်ပေါ်သို့တင်၍ ခေါ်ဆောင်သွားကြ သည်။ ထိုသူနှစ်ယောက်အနက် တယောက်ကား နောင်တချိန်တွင် စင်္ကြံတလျှောက်လုံးရှိ အကျဉ်းသားများအပေါ် ဂရုစိုက် မည့် အဖေကြီးရဲဘော် စကော်ယျက်ပါ ဖြစ်၍ အခြားတယောက်ကား – – – – ဖြစ်သည်။ လှေခါးမှအဆင်းတွင် ကျွန်တော်သည် နိမ့်လျောကြီးဖြစ်နေသော ထမ်းစင်ပေါ်မှ လျှောကျသွားမည်ကဲ့သို့ဖြစ်ရာ ဒုတိယလူက ကျွန်တော့်ကိုပေါ်သို့ ကိုင်းငုံ့ယင်း
-“ ထိန်းထား” ဟုပြောလေသည်။ နောက်အသံခပ်အုပ်အုပ်ဖြင့် တီးတိုးပြောဆိုလိုက်သေးသည်။
– “ဒီမှာရော၊ ဟိုမှာရော”
ဤတခေါက်တွင်ကား ထောင်ရုံးခန်းသို့ မ၀င်ကြတော့။ ကျွန်တော့်အား ရှည်လျားသော စင်္ကြံကြီးတလျှောက်မှနေ၍ ထောင်ဘူးဝအထိ သယ်ဆောင်သွားကြသည်။ စင်္ကြံကား လူများဖြင့် ပြည့်နေသည် – ကြာသပတေးနေ့ဖြစ်၍ လူတို့သည် ထောင်ကျနေသော ဆွေမျိုးသားချင်းများ၏ အ၀တ်ဟောင်းများကို လာယူနေကြသည် – အားလုံးတို့သည် ကျွန်တော်တို့၏ စိတ်မချမ်းမြေ့ဘွယ်ရာ လှည့်လည်ပွဲကို ကြည့်ရှုယင်း မျက်လုံးများတွင် ၀မ်းနည်းခြင်း အရိပ်အရောင်များ ပြလာကြသည်။
ဤသည်ကို ကျွန်တော့်အနေနှင့် များစွာအားမလိုအားမရကြီး ဖြစ်မိသည်။ ထိုကြောင့် လက်ကို ခေါင်းဆီသို့ပင့်ကာ၊ လက်သီးကို ဆုပ်၍ပြလိုက်သည်။ မြင်ကောင်း မြင်ကြ ပေလိမ့်မည်။ သူတို့အား နှုတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်သည်ကိုလည်း နားလည်ကောင်း နားလည် ကြပေလိမ့်မည်။ ကြောင်တက်သော အမူအရာတခုလည်း ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နေမည်။ သို့သော် ကျွန်တော်ကား ထို့ထက်ပို၍ မတတ်နိုင်၊ ယခုထက်ထိ အင်အားဆို၍ ကောင်းစွာမရှိသေးပေ။
တရန်စပေါ့ရ်တွန်ပဟီးဂိ – သယ်ယူပို့ဆောင်ရန် မသင့်။
ပန်းကရာ့စ်ဝင်းတွင်းရှိ မြေကွက်လပ်တွင်၊ လူနာတင်ထမ်းစင်ကို လော်လီကြီတစီးပေါ်သို့ တင်လိုက်ကြသည်။ အက် ဆက်နှစ်ယောက်က ကားမောင်းသူ၏ဘေးတွင် ထိုက်လိုက်ကြသည်။ အခြားအက်ဆက်နှစ်ယောက်က ဖွင့်ထားသော ခြောက် လုံးပြူးအိတ်များပေါ် လက်တင်လျက် ကျွန်တော်၏ ဦးခေါင်းအနီးတွင် ကားကားရားရား ရပ်ကြသည်။ ဤသို့လျှင် ခရီးထွက် သွားခဲ့ကြပါသည်။ လမ်းကား ပြေပျစ်ပုံမရ၊ ဟုတ်သည်၊ တကယ်ကိုပင် မပြေပျစ်။ ချိုင့်တချိုင့်၊ နောက်ချိုင့်တချိုင့် – ဂိုက်နှစ်ရာ မျှ မသွားရသေးမီ ကျွန်တော်လည်း သတိလစ်သွားပါတော့သည်။ ပရာဟာမြို့တော်ရှိ လမ်းမကြီးများပေါ်၌ ယင်းသို့ ခရီးသွားခဲ့ ရသည်ကား ရယ်စရာကြီးပင် ဖြစ်နေသည်။ အကျဉ်းသားသုံးဆယ်အတွက် သတ်မှတ်ထားသော ငါးတန်မော်တော်ကားကြီးကို အကျဉ်းသမားတယောက်တည်းအတွက် ဓာတ်ဆီဖြုန်းယင်း၊ ရှေ့တွင်လည်း အက်ဆက်စမန်းနှစ်ယောက်၊ နောက်တွင်လည်း နှစ်ယောက်၊ ပြူးပြူးပြဲပြဲ အစိမ်းစားတော့မည့် ဟန်များဖြင့် လူသေကောင်တကောင် ထွက်မပြေးရန် စောင့်ကြပ်နေခဲ့ကြသ တည်း။
အကျဉ်းခန်း ၂၆၇ ကား သီချင်းဆိုနေလေသည်။ ကျွန်တော်သည် တသက်လုံး သီချင်းဆိုခဲ့သည်။ ဘ၀၏ အဆုံး သတ်ချိန်၊ ဤမျှအသက်ပြင်းသောအခါတွင်မှ အဘယ့်ကြောင့် သီချင်းမဆိုရမည်ကို နားမလည်ပါ။ အဘပက်ရှက်ကကော ဘယ့်နဲ့လဲ။ အလိုလေး … သူကတော့ ထူးဆန်းပေသည်။ သီချင်းဆိုခြင်းကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကြီး ၀ါသနာပါသည်။ သို့သော် ဂီတဆန်သည့် နားလည်းမရှိ၊ အသံလည်းမကောင်း၊ ဂီတမှတ်ဥာဏ်လည်း ဝေလာဝေး။ သို့သော်သီချင်းကို မြတ်နိုးတွယ်တာ စွာ ကြိုက်တတ်၍ သီချင်းသံဝယ် စိတ်ချမ်းသာနေတတ်ရကား နားက ၇ သံကို တမက်တမော တောင့်တနေချိန်ဝယ် ခေါင်းမာ မာနှင့် ငါးပေါက်ကြီးချ၍ ဆိုလိုဆို၊ တသံမှတသံပြောင်းလိုပြောင်း၊ စသည်ဖြင့် လျှောက်လုပ်သည်ကိုပင် ကျွန်တော်က ဂရုမ ထားမိတော့သည်အထိ ဖြစ်လာသည်။ သို့နှင့် လွမ်းစပျိုးလာသော အချိန်များတွင် သီချင်းဆိုကြသည်။ နေပွင့်သော အချိန်များ တွင် သီချင်းဆိုကြသည်။ နောက်ပြန်၍ တွေ့ကောင်းတွေ့ရတော့မည့် ရဲဘော်တယောက် ခွဲထွက်သွားရတော့မည့်အခါ သီချင်း နှင့်လိုက်ပို့ကြသည်။ အရှေ့ဘက် စစ်မြေပြင်များမှသတင်းကောင်းများ ကို သီချင်းနှင့် ကြိုဆိုကြသည်။ စိတ်သက်သာမှုအတွက် လည်း သီချင်းဆိုသည်။ ပျော်ရွှင်မှုအတွက်လည်း သီချင်းဆိုသည်။ ဤဓလေ့အတိုင်း လူတို့သည် တခေတ်ပြီးတခေတ် သီချင်း ဆိုခဲ့ကြသည်။ လူသတ္တ၀ါဟူ၍ တည်မြဲနေသမျှကာလပတ်လုံးလည်း သီချင်းဆိုနေကြမည်သာ ဖြစ်ပေသည်။
သီချင်းမပါသော အသက်ဟူသည်မရှိ၊ အသက်ဟူသည်လည်း နေမင်းကြီးမပါဘဲနှင့် မတည်ရှိနိုင်ပေ။ ကျွန်တော်တို့ ကား သီချင်းကိုနှစ်ဆတိုး၍ တောင့်တကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော နေရာင်သည် ကျွန်တော်တို့ထံ မရောက်တတ်သော ကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။ အမှတ် ၂၆၇ သည် မြောက်ဘက်ကို မျက်နှာပြုထားသည်။ နွေလများ၌သာ ညနေစောင်းနေရောင်သည် ပြူတင်းပေါက်သံတိုင်အရိပ်တို့ကို အရှေ့ဘက်ထရံပေါ်၌ ခဏတဖြုတ်ထင်စေသည်။ ထိုအခါ ဘသည် အိပ်ရာစင်ကိုမှီ၍ မတ် တတ်ရပ်ယင်း လာလာသွားသွား ထွက်ခွာသွားသည့် ဧည့်သည်ရောင်ခြည်တန်းကို ကြည့်ရှုရှာလေသည် … ဤကား၊ ဤ နေရာတွင် တွေ့နိုင်သမျှအနက် ကြေကွဲဘွယ်ရာ အကောင်းဆုံးသော ရှုခင်းတရပ်ဖြစ်လေသည်။
နေမင်းသူရိယာ… ၀ိုင်းစက်သော မျက်လှည့်ဆရာသည် ရက်ရောစွာထွန်းတောက်ယင်း အံ့သြစရာအမြောက်အများ ကို လူတို့၏ မျက်စိအောက်၌ပင် ဖန်ဆင်းပြတတ်သည်။ နေရောင်အောက်တွင် နေရသောလူတို့ကား နည်းပါးလှစွာသည်။ နောင်သော် နေမင်းကြီးသည် အပြည့်အ၀ထွန်းလင်းတောက်ပ လာပေလိမ့်မည်။ ဟုတ်သည်၊ လူများသည်လည်း နေရောင် ခြည်များအောက်တွင် နေကြရပေတော့မည်။ ဤအချက်ကို သိရခြင်းကား ၀မ်းမြောက်ဖွယ်ရာပင်ဖြစ်သည်။ သို့စဉ်လျက် ခင်ဗျားသည် ထိုအချက်နှင့် မနှိုင်းသာ မယှဉ်သာလောက်အောင် သေးမွှားလှသော အချက်ကလေးတချက်ကိုလည်း အလွန် အမင်းသိလိုလှသေးသည် – ငါတို့အတွက်ကော၊ နေမင်းကြီးထွန်းလင်းပါလိမ့်အုံးမလား။
ကျွန်တော်တို့၏ အကျဉ်းခန်းကား မြောက်ဘက်သို့ မျက်နှာမူသည်။ နွေရာသီအချိန်၊ နေသာသောနေ့များတွင်သာ နေ၀င်သည်ကို ခဏတဖြုတ်တွေ့ကြရသည်။ ဘရယ် … ကျွန်တော်လေ၊ နောက်တခါကလေးလောက်တော့ နေထွက်တာကို မြင်ချင်စမ်းပါဘိတော့တယ်ဗျာ ….
ကြိုးစင်ပေါ်မှ မှတ်တမ်းများ … အခဏ်း (၄)
နံပါတ် လေးရာသေရာမှ ပြန်၍ထခြင်းကား အတော်ပင်ထူးခြားသော ကိစ္စတရပ်ဖြစ်ပေသည်။ ဖော်ပြရန်မစွမ်းလောက်အောင် ထူးခြားလှသည်။ အိပ်ရေးဝခဲ့သည့် နေ့ တနေ့တွင်နေကလည်း သာနေမည်ဆိုက ကမ္ဘာကြီးမှာ လှပနေတတ်သည်။ သို့သော် သေရွာမှပြန်လာခြင်းကား နေက လည်းခါတိုင်းထက်ပို၍သာယာနေကာ၊ ခင်ဗျားကလည်း ခါတိုင်းထက်ပို၍ နှစ်ခြိုက်စွာအိပ်ခဲ့ ရသည်နှင့် တူလေသည်။ ခင်ဗျားက ဘ၀၏ဇာတ်ခုံကို သိကျွမ်းလှပြီဟုထင်သည်။ သို့သော် အသက်ပြန်ရှင် ခြင်းသည်ကား၊ မီးမောင်းထိုးသူတဦးက မီးလုံးကြည်ကြည်များကို ဖွင့်လိုက် ကာ၊ လင်းသွားသောဇာတ်စင်တခုလုံးကို ခင်ဗျားအား ပြလိုက်သည်နှင့်တူသည်။ ခင်ဗျားက ဘ၀ဇာတ်ခုံကို ကောင်းစွာမြင်ခဲ့ပြီဟု ယူဆသည်။
သြို့သော် အသက်ပြန်ရှင်ခြင်းသည်ကား မျက်လုံးများဆီသို့ မှန်ပြောင်းများပင့်၍ ကြည့်ရှုရုံမျှသာမက၊ ဓာတ်မှန်ဘီလူး ထပ်၍ဆင့်လိုက် သည်နှင့်လည်း တူလေသည်။ သေရာမှ ပြန်၍ထခြင်းသည် နွေဦးအဖြစ်အပျက်တမျိုးပင်ဖြစ် သည်။ နွေဦးရာသီ၏ ဗီဇအတိုင်း မမြှော်လင့်သော မျက်လှည့်အကွက်များကို ခင်ဗျားအား ခင်း ကျင်းပြသလာလေသည်။
အသက်ပြန်၍ ရှင်ရသည်မှာ ယာယီမျှသာဖြစ်သည်ဟု ခင်ဗျားအနေနှင့် သိထားစေဦးတော့ ဤသို့ပင် သရုပ်ပေါ်လေသည်။ ခင်ဗျား၏ ပတ်ဝန်းကျင်သည် ပန်းကရာ့စ်ထောင်ရှိ အကျဉ်း ခန်းတခန်းကဲ့သို့ ကြည်နူးဝေဖြိုးနေစေကာမူ ဤသို့ပင်သရုပ်ပေါ်လေသည်။ တနေ့သော အခါတွင်ကား ခင်ဗျားကို ကမ္ဘာကြီးအတွင်းသို့ပင် ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ကြလေသည်။ တနေ့ တွင် သူတို့ကလူနာတင်ထမ်းစင်မသုံးဘဲနှင့်ပင် ခင်ဗျားအား အစစ်ခံရန် ခေါ်ကြည်သည်ခင်ဗျား က မဖြစ်နိုင်ဟု ထင်သည့်တိုင်အောင် တနည်းနည်းနှင့်ကား အထမြောက်သွားသည်။ စင်္ကြံထဲ တွင် လက်ရန်းများရှိသည်။ လှေခါးများတွင်လည်း လက်ရန်းများရှိသည်။ လမ်း လျှောက် သွားသည်ဟု ဆိုခြင်းထက် လေးဘက်ထောက်သွားရသည်ဟု ဆိုလျှင် ပို၍မှန်ပေလိမ့် မည်။ အောက်သို့ ရောက်သော် ထောင်ကျဘော်ထောင်ကျဘက်များက ခင်ဗျားထောင်လော်လီ အတွင်းရောက်သွားရန် တာဝန်ယူကြသည်။ နောက် … တနေရာတွင် ထိုင်မိသည်။ ဘီးတပ် ထားသော အကျဉ်းခန်းမှောင်မဲမဲတွင်၊ လူဆယ်ယောက်ဆယ့်နှစ်ယောက်။ လူသစ်မျက်နှာ သစ်များက ခင်ဗျားအား ပြုံးပြကြရာ ခင်ဗျားကလည်း ပြန်၍ပြုံးသည်။ တစုံတယောက်က ခင်ဗျားအား တစုံတရာကို တီးတိုးပြောဆိုလာသည်။ သူဘယ်သူမှန်း ခင်ဗျားကမသိ။ ခင်ဗျား က လူတယောက်၏ လက်ကို ညှစ်၍ နှုတ်ဆက်သည်။ သို့သော် မည်သူ၏လက်ဖြစ်သည်ကို မသိ – နောက်လော်လီသည် ပက်ချက်နန်းတော် ဆင်ဝင်အတွင်းသို့ ဆောင့်ဝင်သွားသည်။ မိတ်ဆွေများက ခင်ဗျားအား သယ်ယူသွားကြသည်။ ခင်ဗျားလည်း ထရံပြောင်တလင်းများ ၀န်းရံသော အခန်းတွင်းသို့ ရောက်သွားသည်။ အခန်းတွင်း၌ကား ခုံတန်းလျားရှည်ငါးလုံး၊ တလုံးနောက် တလုံးစီ၍ ချထားသည်။ ၎င်းခုံများပေါ်တွင် လူများသည် သတိအနေအထား နှင့်ထိုင်၊ ဒူးများပေါ်တွင် လက်များကပ်လျက်၊ ရှေ့တည့်တည့်မှ ထရံဟာလာဟင်းလင်းကို မလှုပ်မယှက်ကြည့်ရှုနေကြသည် … အဲဒါကတော့ မောင်ရင်ရေ၊ မင်းကမ္ဘာသစ်ရဲ့ တစိတ်တပိုင်း၊ဘိုင်စကုပ်ရုံလို့ခေါ်သတဲ့။
(၁၉၄၃ ခုနှစ်၊ မေဒေးနေ့ ကြားဖြတ်တူရိယာသံ) ယနေ့ကား ၁၉၄၃ ခုနှစ် မေဒေးနေ့ဖြစ်သည်။ ကံကောင်းချင်တော့ ထောင်စောင့်ကလည်း သူစောင့်ချိန်အတွင်း စာရေး၍ဖြစ်နိုင်သော ထောင်စောင့်ဖြစ်နေသည်။ ဤသို့သောနေ့မျိုးတွင် ကွန်မြူနစ်သတင်းစာဆရာဘ၀သို့ ပြန် ရောက်လျက် ကမ္ဘာသစ်မှ တိုက်ခိုက်ရေး အင်အားစုတို့၏ မေဒေးပွဲသဘင်အကြောင်း သတင်း ရေးနိုင်သည်မှာ ကံကောင်းလေစွတကား။ ဝေ့၍ဝေ့၍နေသော အလံမှားအကြောင်းကို ကြားရ လိမ့်မည် ဟူ၍ကား မမြှော်လင့်လေနှင့်။ ထိုကိစ္စမျိုးကား မဟုတ်။ နားထောင်ကောင်းလှသော ကြွကြွရွရွလှုပ်ရှားမှုအကြောင်းကိုပင် ခင်ဗျားအားပြောမပြနိုင်။ ယနေ့ဘို့ အစစအရာရာကား ရိုးရိုးကလေးမျှသာဖြစ်လေသည်။ အခြားနှစ်များတွင် ပရာဟာမြို့၏ လမ်းမများမပေါ်၌ ကျွန်တော် မြင်ဘူးသကဲ့သို့ ထောင်သောင်းချီသော လူထုကြီး၏ ပေါက်ကွဲအံ့ဆဲဆဲဖြစ်နေသော လှိုင်းများလည်းမဟုတ်။ ကျွန်တော်မြင်ဘူးသည့်အတိုင်း မော်စကိုမြို့၏ ရင်ပြင်နီကိုလွှမ်းကြ သော သန်းပေါင်းများစွာတို့၏ ပင်လယ်မျိုးလည်းမဟုတ်။ ဤနေရာတွင်ကား လူများကို သန်းချီ၍လည်းမမြင်ရ။ ရာ လိုက်လည်း မမြင်ရ။ ဤနေရာတွင်ကား ယောက်ျားမိန်းမရဲဘော် တချို့တို့ကိုသာ မြင်ရသည်။ သို့စဉ်လျက် သေးနုတ်ကား မသေးနှတ်ဟုထင်မိသည်။ တကယ် လည်း မသေးငယ်ပေ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဤသည်လည်းအင်အားပြပွဲ တရပ်ပင်ဖြစ် သည်။ အဟုန်အပြင်းထန်ဆုံးသော မီးပုံအတွင်းသို့ ဖြတ်ဝင်ယင်းက၊ ပြာအဖြစ်သို့ မကြွေ သွားမူ၍ သံမဏိအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲနေသော အင်အားများ ဖြစ်လေသည်။ စစ်မြေကတုတ်များ အတွင်း၌ ပြုလုပ်သော ဗိုလ်ရှုသဘင်ဖြစ်သည်။ ကတုတ်ရင်တားများတွင်ကား စစ်မြေမှ မီးခိုးရောင်ညို့ညို့မှိုင်းကိုဝတ်ဆင်ကြသည်။
အစစအရာရာဟာ အသေးအမွှားကိစ္စကလေး တွေသာ ဖြစ်နေလို့ တနေ့ဒီဘ၀မျိုးမှာမနေခဲ့ ရဘဲ ဒီစာကိုသာဖတ်ရမဲ့ ခင်ဗျားလိုလူမျိုးဟာ ဒီစာကိုနား လည်ပါ့မလား။ ဒါပေမယ့် နားလည် ဘို့ကြိုးစားပါ။ ဒီအသေးအဖွဲကလေးတွေမှာ အင်အားရှိတယ်ဆိုတာ ယုံပါ။ ဘဲထောဗ်န် ၏ ဂီတသံနှစ်ကြောင်းကို ထရံတွင် ခေါက်လျက်တဘက်အကျဉ်းခန်းမှ နှုတ်ဆက်လိုက်ပုံကား ယနေ့အဘို့ပိုမို၍ ခန်းနားလေးနက်သည်။ ထရံများလည်း အသံလှိုင်းများကိုမြှင့်၍ ပြန်ကြား ကြလေသည်။
ကျွန်တော်တို့သည် အ၀တ်အစားရှိစုမဲ့စုမှ အကောင်းဆုံးတို့ကို ရွေး၍၀တ်ဆင်ကြသည်။ အကျဉ်းခန်းတိုင်းတွင်လည်း ဤသို့ပင် ပြုလုပ်ကြသည်။ နံနက်စာလာ၍ ပို့ကြသောအခါတွင် ကျွန်တော်တို့ကား ကျော့ကျော့မော့မော့ကြီး ဖြစ်နေကြလေပြီ။ ဖွင့်ထားသော တံခါးပေါက်တွင် ပေါင်မုန့် ကာဖီ အမြည်းနှင့် ရေတို့ကိုဆောင်ယူလာသည့်ထောင်ဘာယာများပေါ်လာကြသည်။ ရဲဘော် စကော်ယျှက်ပါသည်၊ ပေါင်မုန့်ကလေးနှစ်လုံးအစား သုံးလုံးထုတ်ပေး သည်။ ဤကား သူ၏ မေဒေးနေ့နှုတ်ခွန်းဆက်ပင်ဖြစ်လေသည်။ ဂရုစိုက်တတ်သော သူတဦး၏ အသက်ဝင် သော နှုတ်ဆက်နည်းဖြစ်လေသည်။ ပေါင်မုန့်များ၏ အောက်တွင် တယောက်လည်းချောင်း များက တယောက်လက်ချောင်းများကို ဖိနှိပ်လိုက်သည်။ စကားမပြောရဘူးလို့ ပိတ်ပင်ထား ကြတယ်။ မျက်လုံးတွေကို တောင် အလစ်မပေးကြဘူး ဒါပေမယ့် ဆွံ့အနေတဲ့လူတွေတောင် လက်ချောင်းတွေနဲ့ ပြတ်ပြတ်သားသား စကားပြောနိုင်ကြတယ်မဟုတ်လား။ အမျိုးသမီးများ သည် နံနက်ခင်းနာရီဝက် ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ရန် ကျွန်တော်တို့ အကျဉ်းခန်း ပြူတင်းပေါက်အောက်တည့်တည့်ရှိ ကွက်လပ်ထဲသို့ပြေးထွက်နေကြသည်။ ကျွန်တော်သည် စားပွဲပေါ်သို့တက်ကာ၊ သံတိုင်များအကြားမှနေ၍ အောက်သို့ငုံ့ကြည့်သည်။ ကျွန်တော့်အား မြင်ကောင်း မြင်ကြမည်။ မြင်လည်း မြင်ကြပေသည်။ သူတို့သည် နှုတ်ဆက်သည့်အနေဖြင့် လက်သီးဆုပ်များကို မြှောက်နေကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း ထို့အတူ ပြန်လည်နှုတ် ဆက်သည်။ ယနေ့သော်ကား အောက်ဘက်ရှိ ကွက်လပ်တွင် အစစအရာရမှာ အသက်ဝင် လှုပ်ရှားနေသည် အခြားနေ့များနှင့် လုံးဝကွာခြားနေ သည်။ ပိုမိုရွှင်မြူးလန်းဆန်းနေသည်။ ထောင်စောင့်ပုလိပ်မကား ဘာကိုမျှမမြင် သို့မဟုတ် ဘာကိုမျှမမြင်လိုသည်လည်း ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်ပေမည်။ ဤသည်ပင်လျှင် ယခုနှစ်မေဒေးပွဲသဘင်အတွင်းသို့ အကြုံးဝင်လေသည်။
ယခု ကျွန်တော်တို့၏ နာရီဝက်လေ့ကျင့်ခန်း။ ကျွန်တော်က လေ့ကျင့်ခန်းများကို ခေါင်းဆောင် သည်။ ဒို့လူတို့ ဒီနေ့ဟာ မေဒေးနေ့။ ထောင်စောင့်တွေ အံ့အားသင့်ချင်သင့်ကြပါစေ။ ငါတို့ကတော့ လေ့ကျင့်ခန်းကို တမျိုးတဖုံစကြစို့။ ပဌမလေ့ကျင့်ခန်း တစ် … နှစ် … တစ် … နှစ်၊ တူနှင့်ထုချက်၊ ရိုက်ချက်များ။ နောက် ဒုတိယလေ့ကျင့်ခန်း ကောက်ရိတ်ဟန်။ တူနှင့် ကောက်ရိတ်တံဇဉ် … အနည်းငယ်ကလေး နက်သွားအောင်တွေးလိုက်လျှင် ရဲဘော်များနား လည်လောက် ကြပေသည်။ တူနှင့် တံဇဉ်။ ဘေးပတ်လည်သို့ အကဲခတ်ကြည့်လိုက်သည်။ သူတို့သည် ပြုံးလျက် လေ့ကျင့်ခန်းကို အားတိုက်အင်တိုက် ထပ်၍လုပ်ကြသည်။ ရိပ်မိကြ လေသည်။ ဒါပဲ … ဒို့လူတို့ … ဒါဟာ ငါတို့ရဲ့ မေဒေးအစည်းအဝေးကြီးပဲ၊ ဒီပန်တော်မိမာ ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က ဘာလဲ။ ငါတို့ဟာ သေမင်းခံတွင်းထဲ ဆင်းနေကြရတာတောင် သစ္စာကိုစောင့် ထိန်းကြမယ်ဆိုတဲ့ မေဒေးနေ့ကျမ်းကျိန်ပွဲပဲ။ပန်တော်မိမာ – မူရာပြ ပြဇာတ်။ စကားမပြောဘဲ ခြေပြလက်ပြ အမူအရာပြယင်း ဇာတ်ကြောင်းခင်းသွားသော ပြဇာတ်တို။အကျဉ်းခန်းသို့ ပြန်ရောက်ကြပြီ။ ကိုးနာရီ။ ယခု ကရဲမလင် မှ နာရီစင်သည် ဆယ်ချက်မျှ ရိုက်ဆော်လိုက် ပြီဖြစ်သည်။ ယင်ပြင်နီတွင် ဗိုလ်ရှုသဘင်ကြီး စပေပြီ။ ကရဲမလင် – မော်စကိုမြို့လည်ရှိ နန်းတော်မြို့။ ဆိုဗိယက်အစိုးရ၏ ဗဟိုဌာနဖြစ်သည်။ ဘရေ … သူတို့နဲ့ လိုက်ကြရ အောင်လေ။ အခုဆိုရင် အင်တာနေရှင်နယ် သီချင်းကြီးကို ဆိုနေကြပြီ။ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းလုံးမှာလဲ ဒီအင်တာနေရှင်နယ် သီချင်းသံ ၀ဲပျံပြီးနေတာမို့ ကျွန်တော်တို့ အကျဉ်းခန်းထဲမှာလဲ ဒီသီချင်း သံ ပြည့်နက်သွားပစေ။ ကျွန်တော်တို့ကား သီချင်းဆိုကြသည်။ ၎င်းနောက် တော်လှန်ရေး သီချင်း တပုဒ်ပြီးတပုဒ် ပေါ်လာသည်။ ကျွန်တော်တို့ကား အဖော်ကွဲ၍မနေလိုကြ။ အမှန်အား ဖြင့် ကျွန်တော်တို့သည် အဖော်ကင်းမဲ့နေကြသည်မဟုတ်။ စင်စစ်အားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ကား ယခုအချိန်တွင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေထိုင်ယင်း အချုပ်အချယ်မရှိဘဲ သီချင်းဆိုနေယင်းက၊ ကျွန်တော်ကဲ့သို့ပင် တိုက်ပွဲဝင်နေကြသူများနှင့် တဂိုဏ်းတည်း တဖွဲ့တည်း ဖြစ်ကြပေသည်…
အင်တာနေရှင်နယ် – ကမ္ဘာ့ ပစ္စည်းမဲ့တို့၏ သီချင်း၊ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းလုံးရှိ ကွန်မြူနစ်များ တော်လှန်ရေးသမားများ၏ သီချင်းဖြစ်သည်။ စာသားကိုရေးစပ်သူမှာ အဲဇဲန် ပေါ်တယဲ ခေါ် ပြင်သစ်အလုပ်သမား၊ တော်လှန်ရေးသမားဖြစ်၍ ပါရီကွန်မြူးန်တွင် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ဂီတကိုဖွဲ့နွဲ့သူမှာ ပီယဲရ်ဒဂေတဲရ် ခေါ် ပြင်သစ်အလုပ် သမား၊ သီချင်းရေးဆရာတဦးဖြစ်သည်။
(တဗားရစ်ရ်ှချဖှ ကျူးရ်မာ့ခ်၊ဗဇာစကျဲန်းကာ့ခ် ခါလော့ဒ်နီးခ်၊ ဗီ ဆနားမီ၊ ဗီ ဆနားမီ၊
ခို့ခ်ျညိ့တ်ဗာ့စ်ဖှ ကလောနာ့ခ် … )“ဒါး … မီ ဆဗားမီ။”
ကျွန်တော်တို့သည် ၁၉၄၃ ခုနှစ် မေဒေးနေ့ပွဲသဘင်ကို အကျဉ်းခန်း ၂၆၇ ၌ ဤသို့လျှင် အဆုံးသတ်ရန် ကြံစည်ခဲ့ကြပါသည်။ သို့သော် အမှန်အားဖြင့် ထိုသို့အဆုံးသတ်ခဲ့ပါသလော။ အကျဉ်းခန်းများရှိ ယောက်ျားများအားတက်ကြစေရန် တပ်နီတော် စစ်သီချင်းကို လေချွန်ရင်း၊ ပြောက်ကျားတပ်သားသီချင်းကို လေချွန်ရင်း၊ အခြားဆိုဗိယက်သီချင်းများကို လေချွန်ရင်း ယခုနေ့လည်ပိုင်းတွင် မြေကွက်လပ်တလျှောက် လမ်းလျှောက်နေသော ထောင်ဘာယာအမျိုး သမီးအကြောင်းအကိုလည်း ထည့်ပြောရန် မလိုတော့ပြီလော။ ကျွန်တော့်ထံ စက္ကူနှင့် ခဲတံယူလာကာ ယခုလည်း တစုံတယောက်က ရုတ်တရက်ဝင်လာ၍ ကျွန်တော်စာရေးနေ သည်ကို အလစ်မဖမ်းနိုင်ရန် စင်္ကြံတွင် စောင့်ကြပ်ပေးနေသောသူ၊ ချက်အမျိုးသား ထောင်စောင့်တို့၏ ယူနီဖောင်းကို ၀တ်ဆင်ထားသည့် ယောက်ျားတယောက်၏ အကြောင်း ကိုလည်း မပြော၍ဖြစ်ပါ့မည်လော။ ဤစာရေးခြင်းကို အကယ်ပင် အစပျိုးပေးလိုက်ကာ၊ ဤစာရွက်ကလေးများကိုလည်း ယူထုတ်သွားလျက် အချိန်ကျသောအခါတွင် အလင်းသို့ပေါ် ထွက်လာအောင် စေ့စေ့စပ်စပ်သိမ်းဝှက်ပေးနေသော အခြားယောက်ျားတယောက်၏အကြာင်း ကိုလည်း မကျန်တော့သလော။ ဤစာရွက်ကလေး တပိုင်းတစကြောင့်ပင်၊ သူတို့ ခေါင်းပြုတ်သွားနိုင်သည်။ တဗားရစ်ရ်ှချဖှ ကျူးရ်မာ့ခ်၊ဗဇာစကျဲန်းကာ့ခ် ခါလော့ဒ်နီးခ်၊ ဗီ ဆနားမီ၊ ဗီ ဆနားမီ၊ခို့ခ်ျညိ့တ်ဗာ့စ်ဖှ ကလောနာ့ခ် … – ဖူးချစ်သည် ဤသီချင်းကို မူရင်းရုရှား အသံထွက်ဖြင့် ရေးခဲ့သည်။“ထောင်များအတွင်းက ရဲဘော်တို့ရယ်အေးစက်လှတဲ့ တံတိုင်းများ နောက်ဝယ်ငါတို့နဲ့အတူတူ မချီတက်နိုင်ပေမယ့်လဲမင်းတို့ဟာ ငါတို့နဲ့အတူတကွပဲ၊ မင်းတို့ဟာ ငါတို့နဲ့အတူတကွပဲ။
“ဒါး … မီ ဆဗားမီ။” – (ရုရှားစကား) အေး … ငါတို့ဟာ မင်းတို့နဲ့ အတူတကွပဲ။
သူတို့ကား သံတိုင်များကာထားသော ယနေ့နှင့် လွတ်လပ်သော မနက်ဖြနအကြား ပေါင်းကူးတံတားများ ဖြစ်ကြရန် စွန့်စားနေကြသည်။ သူတို့ကား တိုက်ပွဲဝင်နေ ကြသည်။ မြေ၏ အနေအထားအလိုက်၊ ရှိသမျှသောနည်းလမ်းများကိုသုံးကာ ရောက်နေရာ၌ ရပ်တည်ရင်း သစ္စာရှိစွာတိုက်ခိုက်နေကြသည်။ ကြောက်စိတ်ကင်းမဲ့စွာ တိုက်ပွဲဝင်နေကြ သည်။ သူတို့တွင် ဟိတ်ဟန်ဟူ၍မရှိ၊ မသင်္ကာစရာလည်း မပေါ်၊ ဂရုဏာပြသော အမူအရာမျိုးပင် လုံးဝကင်းမဲ့နေသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း အသက်နှင့်သေဘေးတို့၏ ရင်ဆိုင် တိုက်ပွဲတွင် ထိုသူများကား မိတ်ဆွေများဘက်မှ ရပ်တည်နေကြသည်၊ တိုက်ပွဲအတွင်း ကျဆုံး ရန်အလားအလာနှင့် အောင်မြင် ရန်အလားအလာများ သူတို့တွင် ဆတူရှိနေကြသည်ဟူသော အချက်တို့ကို ခင်ဗျားအနေနှင့် လုံးဝရိပ်မိနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ မေဒေးဗိုလ်ရှုသဘင်များ၌ တော်လှန်ရေးတပ်မတော်သားများ ချီတက်ကြသည်ကို ခင်ဗျားဆယ်ကြိမ် အကြိမ်နှစ်ဆယ်မျှ မြင်ခဲ့ရသည်။ ခမ်းနားပေစွ တကား။ သို့သော် တကယ့်တိုက်ပွဲအတွင်းသို့ ရောက်ခါမှ ဤတပ်မတော်ကြီး၏ အင်အားအစစ်အမှန်ကို တန်ဘိုးဖြတ်နိုင်တော့သည်။ သေခြင်းဟူသည် ကား ခင်ဗျားထင်ခဲ့သည့်ထက် ပို၍ရိုးနေသေးသည်။ သတ္တိရှိခြင်း၏ မျက်နှာမှလည်း ရောင်ခြည် များဖြာထွက်သည်ထက်ပင် ပိုမို၍ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သည်။ တိုက်ပွဲအတွင်း ကြန့်ကြန့် ခံလျက် အောင်ပွဲအထိ ချီတက်သွားရန်အလို့ငှာ အတိုင်းမသိသော အင်အားများရှိရန် လိုပေသည်။ ယင်းသို့သော အင်အားများ လှုပ်ရှားနေသည်ကို နေ့စဉ်နှင့်အမျှ မျက်မှောက်ပြု နေရသော်လည်း အမြဲတစေအားဖြင့်သော်ကား ထိုအင်အားတို့ကို ခင်ဗျားအနေနှင့်အပြည့် အ၀သတိပြုမိသည် မဟုတ်ပေ။ အစစအရာရာကား ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်အတိုင်း ဖြစ်ပေါ်နေ ကြသည် ဟု ထင်ခဲ့သည်။ ယနေ့ ၁၉၄၃ ခုနှစ်၊ မေဒေးနေ့ ဗိုလ်ရှုသဘင်တွင် …အဆိုပါ အင်အားစိုတို့ကို ခင်ဗျားသတိပြုမိပြန်လေပြီ။
၁၉၄၃ ခုနှစ်၊ မေဒေးနေ့သည် ဤဇာတ်ကြောင်းကို ခေတ္တမျှဝင်၍ဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ သို့ဖြစ်သည် ကား ကောင်းပင်ကောင်းနေသေးသည်။ ပွဲလမ်းသဘင် ကျင်းပသောနေ့များဝယ်၊ လူတို့သည် အတိတ်မှ အဖြစ်အပျက်တို့ကို တမျိုးတဖုံ လှီးလွှဲ၍ သတိရတတ်ကြသည်။ ယနေ့လွှမ်းမိုး နေသော ပျော်ရွှင်မှုသည်လည်း ကျွန်တော်၏ စမြုံ့ပြန်ခြင်းတို့ကို အရောင်တမျိုး ချယ်ကောင်း ချယ်ပေလိမ့်မည်။
ပက်ချက်နန်းတော်ရှိ “ဘိုင်စကုပ်ရုံ” သည်ကား၊ မည်သည့် ရှုထောင့်မှကြည့်ကြည့် ရွှင်မြူးဘွယ်ရာ အကယ်ပင် ကင်းမဲ့နေသော နေရာတနေရာဖြစ် လေသည်။ ဤသည်ကား ညှဉ်းပမ်းရာ အခန်းတွင်းသို့မ၀င်မီ စောင့်နေရသည့် အရှေ့ခန်းဖြစ်သည်။ ထိုနေရာမှနေ၍ အခြားသူများ၏ ညီးတွားသံများ၊ တုန်လှုပ်စွာ အော်ဟစ်သံများကို ကြားရသည်။ ခင်ဗျားကို ဘာလုပ်ကြမည်မသိ။ လူတို့သည် ဤအခန်းမှ ကျန်းမာသန်စွမ်း၊ သွက်လက်စွာ ထွက်ခွာသွား သည်ကို ခင်ဗျားတွေ့ လိုက်ရသည်။ နှစ်နာရီ၊ သုံးနာရီမျှ အစစ်ခံရပြီးသည့်နောက်ပိုင်းတွင်ကား ပေါက်ပြဲကျိုးပဲ့လျက် ပြန်လာကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ အစစ်ခံရန် နာမည်ကို ခေါ်လိုက် သည်တွင် ပြတ်ပြတ်သားသား ထူးလိုက်သောအသံကို ကြားရသည် တနာရီအကြာတွင် နာကျင်ခြင်း၊ အဖျားတက်ခြင်းတို့ဖြင့် ဖျော့နေသော အသံသဲ့သဲ့သည် အသံရှင်၏ ပြန်ထွက်လာခြင်းကို ကျေညာလေသည်။ ထို့ထက်ဆိုးသော အရာတရပ်ရှိသေးသည်။ လူတို့သည် ငြိမ်သက်ဖြောင့်မတ်သော မျက်နှာထားဖြင့် ၀င်သွား ကြသည်ကို တွေ့လိုက်ရလျက်၊ ၎င်းတို့ပြန်လာကြသောအခါတွင်ကား ခင်ဗျားနှင့်မျက်လုံးချင်း မဆိုင်ကြ တော့ပေ။ အပေါ်ထပ်တနေရာ၊ စစ်ဆေးသောအခန်းတခန်းဝယ် ပျော့သွားသောအချိန် ကလေးတချိန် ယုတ်စွအဆုံး မဆုံးဖြတ်နိုင်သော အခိုက်ကလေးတခိုက်၊ ကြောက်စိတ်လွှမ်း ခဲ့သော တဒင်္ဂ၊ သို့မဟုတ် ငါတည်းဟူ သော ကိုယ်ကာယကို ကာကွယ်လိုစိတ်ကြောင့် ယနေ့ ဖြစ်စေ၊ နက်ဖြန်ဖြစ်စေ၊ ဤနေရာသို့ လူသစ်များရောက်လာကြတော့မည်။ တုန်လှုပ်ဘွယ် ရာများကို အစမှ နေ၍ ခံစားကြရတော့မည်။ ထိုလူသစ်များကား တိုက်ပွဲအတွင်း ရဲဘော် ရဲဘက်တယောက်က၊ ရန်သူ့လက်တွင်း ထိုးအပ်ခြင်းကို ခံလိုက်ရသော သူများပင်ဖြစ်လေ သည်။
စိတ်ဓာတ် အချိုးခံလိုက်ရသောသူများကို ကြည့်ရခြင်းသည်၊ ကိုယ်ကာယထုထောင်းနှိပ်စက် ခြင်းခံသော သူများအား မြင်ရခြင်းထက် ပို၍ဆိုးဝါးလေ သည်။ အနီးအပါး၌ရစ်ဝဲနေသော သေခြင်းသဘောတရားဖြင့် ဆေးကျောထားသည့် မျက်လုံးများလည်းရှိ၍၊ သေရာမှပြန်ထလာ ခြင်းကြောင့် ခါးနေသောခံစားမှု လည်းရှိမည်ဟုဆိုက၊ မည်သူသည်ယိုင်သွားခဲ့ပြီ၊ မည်သူသည် မိမိ၏၀ိဉာဉ်တနေရာကလေးတွင် ငါ၏တိုက်ပွဲဝင်ဘက်တော်သားများအနက် အရေးမကြီးဆုံး သော ဖော်ထိုက်လိုက်ရလျှင်၊ ငါ၏ကိုယ်အတွက် သက်သာမှုအနည်းငယ်ရစေလိမ့်မည်ဟု စိတ်ကူးမိခဲ့ပြီ၊ စသောအကြောင်းတို့ကို ခင်ဗျားအားမည်သူက မပြောဘဲ နှင့် စိတ်တွင်းကသိရှိနိုင်သည်။ အသဲကြောင်လိုက်တဲ့ သတ္တ၀ါတွေ။ ရဲဘော်ရဲဘက်တယောက်ရဲ့ အသက်ကိုပေးပြီး ၀ယ်ခဲ့ရတဲ့နောက်၊ မင်းတို့ရဲ့ဘ၀ဟာ သတီစရာ ရှိပါတော့မလား။
ဤသည်ကား “ဘိုင်စကုတ်ရုံ”တွင်ပဌမဆုံးအချိန်ထိုင်ခဲ့စဉ်က ဦးဦးဖျားဖျားပေါ်ပေါက်လာသော စိတ်ကူးများ ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မည်။ သို့သော်လည်း ထို စိတ်ကူးများသည် ဤနေရာတွင် ထပ်ခါထပ်ခါပေးလာတတ်သည်။ ထိုနေ့နံနက်တွင် ရောက်သွားသည့်အခြားနေရာ တနေရာ ၌ကား ထိုစိတ်ကူးသည် အကယ်ပင် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ထိုနေရာကား “ဘိုင်စကုတ်ရုံ” နှင့်အနည်းငယ်ကွာခြားသည်။ ထိုနေရာကားသိမြင်မှုတို့၏ အကြွယ်ဝဆုံးရေသောက် မြစ်ဖြစ် လျက်၊ နံပါတ် “လေးရာ” ဟု အမည်တွင်လေသည်။ကျွန်တော်သည် “ဘိုင်စကုတ်ရုံ” ထဲတွင် ကြာမြင်စွာထိုင်မနေခဲ့ရ၊ တနာရီသို့မဟုတ် တနာရီခွဲသာကြာမည်။ နောက်ကျွန်တော်၏ ကျောဘက်မှ ကျွန်တော်၏အမည်ကို ခေါ်သံပေါ်လာကာ၊ အရပ်ဝတ်အရပ်စားနှင့် ချက်စကား ပြောတတ်သူ ပုလိပ်နှစ်ယောက်က ကျွန်တော့်အားဓာတ်လှေခါးသို့ ခေါ်ဆောင်သွား သည်။ လေးထပ်ပေါ်အထိတက်၍ ကျယ်ပြန့်သော အခန်းကြီးတခန်းအတွင်းသို့ ခေါ်သွားကြသည်။ ထိုအခန်း၏ တံခါးပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသည့် ဂဏန်းကား …၄၀၀ ဟူ၍ဖြစ်ပသည်။
ရောက်စက သူတို့၏မျက်စေ့အောက်တွင် ကျွန်တော်တယောက်ထီးတည်းသာ ထိုင်နေရ သည်။ နောက်ဆုံးထရံမှာ သီးသန့်၍ချထားသော ကုလား ထိုင်တလုံးတွင် ထိုင်နေရသည်။ ထိုနေယင်းက၊ ယခုဖြစ်ပျက်နေသော အတွေ့အကြုံကို ယခင်တခါ ကြုံတွေ့ခဲ့ရဘူးသည်ဟူ သောခံစားမှုဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်ရှုမိသည်။ ဒီနေရာကို ငါရောက်ခဲ့ဘူးသလား၊ မရောက်ဘူးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီအခန်းကိုငါသိပါတယ်။ ဤအခန်းကို ကျွန်တော်မှတ်မိသည်။ အိပ်မက်ထဲ၌မက်ဘူး သည်။ ဤနေရာအကြောင်း ကြမ်းကြုတ်လှသော ချောက်အိပ်မက်ကြီး မက်ဘူးသည်။ ချောက်အိပ်မက်ကြောင့် အသွင်အပြင်လည်း ရွဲ့စောင်း၊ အနေအထားလည်း စက်ဆုတ်စရာကောင်းနေခဲ့သည့်တိုင်အောင် ထိုနေရာကို မမှတ်မိနိုင်သည့် အထိကားမ ရောက်။ ယခုသော် ဤအခန်းသည် ဖော်ဖော်ရွေရွေဖြစ်နေသည်။ နေ့၏ အလင်းရောင်နှင့် ကြည်လင်သောရောင်စုံများ သန်းနေကြသည်။ သံတိုင်များ ခပ်ကြဲကြဲတပ်ထားသော ပြူတင်း ပေါက် ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းများ၏အလွန်တွင်၊ တင်း ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ စိမ်းစိုသော လဲ့တနာ နှင့် ဟရာ့ဒချန်နီ ရဲတိုက်တို့ကို မြင်နိုင်ပေသည်။ ကျွန်တော်၏ အိပ်မက်ထဲတွင်ကား၊ အဆိုပါ အခန်းတွင် ပြူတင်း ပေါက်များမရှိ၊ မှုန်မှုန်သိုးသိုးဖြစ်နေသည်။ ညစ်ပတ်သော အလင်းရောင်ဝါ ကျင့်ကျင့်သာ ပက်ဖြန်းထားသည်။ လူများသည်လည်း အရိပ်များနှင့် တူနေခဲ့သည်။ ဟုတ် သည်၊ ဤနေရာတွင် လူများရှိခဲ့သည်။ ယခုသော် တခန်းလုံး ဗလာဟင်းလင်းဖြစ်နေလျက်၊ တလုံးနောက်တလုံး စီ၍ချထားသော ခုံတန်းရှည်ခြောက်လုံး ကား၊ ပန်းဝါ၀ါ၊ ပန်းဖြူဖြူကလေး များပေါက်နေသည့် မြက်ခင်းကလေးနှင့်တူနေလေသည်။ အိပ်မက်ထဲတွင်မူ၊ ခုံတန်းများမှာ တယောက်ဘေးတယောက်ကပ်၍ ထိုင်နေရသော လူများဖြင့် ပြည့်နေခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏ မျက်နှာများမှာလည်း ဖျော့ရော့နေသည်၊ သွေးများစွန်းနေသည်။ ထို့နောက် တံခါးဘေး ထိုတနေရာဝယ် အလုပ်သမားဝတ်စုံအပြာရောင်ကို ၀တ်ထားသော လူတယောက်။ သူသည် ရေ … ရေကို တောင့်တယင်းရပ်နေကာ၊ လျှောကျလာသော ကုလားကာကဲ့သို့ မြေ ပေါ်သို့ ဖြည်းညင်းစွာ ခွေကျသွားလေသည်။ဟုတ်သည်။ ဤသို့ပင်ဖြစ်သည်။ အိပ်မက်ကားမဟုတ်။ ယခုအကြောင်းမှန်ကို သိပြီ။ ထိုရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော အဖြစ်အပျက်၊ အဖျားသွေးများ တက်စေသည့် အဖြစ်အပျက်ကား၊ အကယ်ပင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ကျွန်တော်အဖမ်းခံရ၍ ပဌမဆုံးအကြိမ် အစစ်ဆေးခံရသော ညက ဖြစ်လေသည်။ သူတို့အနားယူလိုသော အချိန်၊ သို့မဟုတ် အခြားသူများအား ကိုင် တွယ်လိုကြသည့် အချိန်များတွင် ကျွန်တော့အား ဤနေရာသို့ခေါ်၍ ခေါ်၍လာကြသည် – သုံးကြိမ်လား၊ ဆယ်ကြိမ်လားမသိ၊ သိနိုင်ပါဘူးလေ။ ကျွန်တော့တွင် ဘိနပ်များမပါ။ အကွက်ရိုက်ထားသော အုပ်ကျွတ်ကြမ်းခင်းများက၊ ပွန်းပဲ့နေ သော ခြေဖ၀ါးများကို၊ နူးနူးညံ့ညံ့အေးမြ စေခဲ့သည်ကို သတိရပါသည်။ ထိုစဉ်အခါက ခံတန်းလျားများမှာ ယွန်ကားစ် လက်နက်စက်ရုံများမှာ အလုပ်သမားတို့ဖြင့်ပြည့်လျှံနေခဲ့သည်။ ဂက်စတာပိုက တညနေခင်းပိုက်ဆွဲရာတွင် ပါလာသူများဖြစ်သည်။ အလုပ်သမား အ၀တ်ပြာ ကို ၀တ်ထားသည့် တံခါးနားမှလူကား ယွန်ကားစ် စက်ရုံအတွင်းရှိ စက်ရုံကလာပ်စည်းမှ ရဲဘော် ဘာရတော် ည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်အဖမ်းခံရသည့်အကြောင်းမှာ သူနှင့်တနည်းအား ဖြင့် ဆက်စပ်နေသည်။ ဤအချက်ကိုရေးသည်မှာ ကျွန်တော်၏ကိစ္စတွင် တစုံတယောက် ၏ သစ္စာဖောက်ခြင်း၊ သူရဲဘော်ကြောင်ခြင်းတို့မပါဝင်၊ သတိလစ်ဟင်းမှုနှင့် ကံမကောင်း အကြောင်းမလှခြင်းတို့ကြောင့်သာ ဖြစ်ရသည်ကို ရှင်းလင်းစွာသိကြစေ ရန်ဖြစ်သည်။ ရဲဘော် ဘာရတော်ည်သည် မိမိ၏ကလာပ်စည်းနှင့် ပါတီခေါင်းဆောင်မှုအကြား အဆက်အသွယ်များ ရရန် ရှာဖွေနေခဲ့သည်။ သူ၏ မိတ်ဆွေဖြစ်သူ ရဲဘော် ယဲလီနက် က အဆက်အသွယ်ရအောင် စီစဉ်ပေးပါမည်ဟု ကတိပြုလိုက်လေသည်။ ရဲဘော် ယဲလီနက်သည် ရှေးဦးပဌမ ကျွန်တော်နှင့် တိုင်ပင်သင့် သည်။ သူနှင့် လုံးဝမပတ်သက်စေပဲ၊ ကိစ္စကို ပြီးမြောက်အောင်လုပ်သင့်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရမည့်အစား လျှို့ဝှက်မှုစည်းကမ်းကို တနည်းအားဖြင့် ဂရုမမူဘဲ ဖွင့်ဟ ၍ ကတိပေးလိုက်ခြင်းကား အမှားတရပ်ဖြစ်လေသည်။ ဒုတိယ – ပို၍ ကြမ္မာငင်သော အမှားကား ရဲဘော်ဘာရတော်ည်သည် ထိုအကြောင်းကို လူတယောက်အားယုံစား၍ ဖွင့်ပြောမိခြင်းဖြစ် သည်။ ထိုသူကား ရန်သူ့တလျှိုတယောက်ဖြစ်လျက် ဒဗောယျတ် ဟုခေါ်သည်။ ရဲဘော် ဘာရတော်ည်က၊ ယဲလီနက်၏အမည်ကို ထိုသူ့အား ဖွင့်ပြောမိသည့်အတွက် ယဲလီနက်တို့၏ အကြောင်းသည် ဂက်စတာပိုထံသို့ ရောက်သွားလေသည်။ နှစ်နှစ်ကြာမျှ ကောင်းမွန်စွာထမ်း ဆောင်ခဲ့သော တာဝန်လုပ်ငန်းများကြောင့်ကား ဘာမျှမဖြစ် တနေရာတွင်အကူအညီကလေး တခုပေးပါရန်၊ လျှို့ဝှက်မှုစည်းကမ်းများမှ ခြေလှမ်းကလေးတကွက်မှား၍ နင်းလိုက်မိသော ကြောင့် ဤသို့ဖြစ်သွားရပေမည်။ ကျွန်တော်လာမည်ဟု ချိန်းထားသောညတွင်မှ ပက်ချက် နန်းတော်မှ ဂက်စတာပိုများက၊ ယဲလီနက်တို့လင်မယားအား ဖမ်းဆီး ရန်ဆုံးဖြတ်ကြခြင်း၊ ဤမျှလောက် အင်တိုက်အားတိုက် တပ်ချီလာခြင်းတို့ကား၊ ထန်းသီးကြွေခိုက် ကျီးနင်းခိုက်မျှ သာ ဖြစ်သည်။ အမှန်အားဖြင့် အစီအစဉ်အတိုင်း ဆိုလျှင် ယဲလီနက်တို့အား နောက်တနေ့မှ ဖမ်းဆီးကြရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယွန်ကားစ်များအတွင်းရှိ ကလာပ်စည်းကိုအောင်မြင်စွာ မြေလှန်လိုက်မိကြသဖြင့်၊ သွေးတကြွကြွဖြစ်နေကြကာ၊ ယဲလီနင်တို့ထံမတော်တဆ “လေကောင်း လေသန့်ရှာရန်” ထွက်လာကြသည်ဟူ၍ပင်ဆိုနိုင်သည်။ပုလိပ်များဝင်လာသဖြင့် ကျွန်တော်တို့အံ့အားသင့်သွားခဲ့သည်မှာ သူတို့အနေနှင့် ကျွန်တော့်အားတွေ့ရသောကြောင့် အံ့အားသင့်သွားထက်မပိုပါပေ။ သူတို့ကား မည်သူ့ကိုဖမ်းကြောင်း ပင်မသိ။ စင်စစ်အားဖြင့် ကျွန်တော်မည်သူဖြစ်သည်ကို နောင်တွင်လည်း သိနိုင်စရာအကြောင်းမရှိ။ သို့သော် ကျွန်တော်နှင့် တချိန်တည်း …သို့သော်လည်း အခန်းနံပါတ်လေးရာမှ၊ ပထမစိတ်ကူးများနှင့် ဆက်သွယ်နေသော ဤအချက်ဆီသို့ နောက်အတော်ကလေးကြာတော့မှ ဆိုက်ရောက် လာပါသည်။ ထိုအချိန်တွင်ကျွန်တော်ကား တယောက်ထီးတည်းလည်းမဟုတ်တော့။ ခုံတန်း ရှည်များပေါ်တွင်သာမက၊ အခန်းပတ်လည်ရှိ နံရံများတွင် လည်း လူများပြည့်နေသည်။ နာရီများရွေ့လျားသွားတိုင်း အံ့သြဖွယ်ရာအချက်အလက်များလည်း တိုး၍တိုး၍လာပါသည်။ ကျွန်တော်နားမလည်နိုင်လောက်အောင် ထူးခြားသောအံ့အားသင့်စရာများကိုလည်း တွေ့ရ သည်။ နားလည်နိုင်လွန်းလောက်အောင် ဆိုးဝါးသော အံအားသင့်စရာများကိုလည်း တွေ့ရသည်။
ပထမဦးစွာ ကြုံတွေ့ရသော အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာ အဖြစ်အပျက်ကား အထက်ပါနှစ်မျိုးနှစ်စား အနက် မည်သည့်အမျိုးအစားသို့မှ အကြုံးမ၀င်ပါ။ လူ့ စိတ်ကို ကြည်နူးစေသော အသေးအဖွဲ ကိစ္စကလေးတရပ်မျှသာဖြစ်လျက် မည်သူ့အတွက်မျှ အရေးကြီးသော ကိစ္စမဟုတ်ပါပေ။
ရက်သတ္တသုံးပတ်အတွင်း ပထမစီးကရက် … ကမ္ဘာမြေပေါ်သို့ ဒုတိယအကြိမ်ပြန်ရောက် လာသူအတွက် ပထမစီးကရက် … ကောက်ယူလိုက်ရမ လား၊ ဒါမှမဟုတ် စီးကရက်တလိပ်နဲ့ ကျွန်တော့်ကိုဝယ်လို့ရပြီးဆိုပြီး ယူဆမှာလား။ သို့ရာတွင် စီးကရက်နှင့်အတူပါလာသည့် သူ၏ အကြံတွင် ဤသဘောမျိုးကို လုံးဝမတွေ့ရ။ သူကား မည်သူ့ကိုမျှ ၀ယ်ယူလိုပုံမပေါ်ချေ။ သို့သော်ကျွန်တော်ကား စီးကရက်တလိပ်လုံးကုန်သည်အထိ မသောက်နိုင်၊ မွေးကာစ ကလေးများကား စီးကရက် အသောက်ကြူးသူများ မဟုတ်ပေ။ ဒုတိယအံအားသင့်စရာ ကိစ္စကား ဤသို့တည်း။ လူလေးယောက်သည် တယောက်နောက် တယောက်စီတန်းလျက်ဝင် လာကြကာ စောင့်ကြပ်နေကြ သော အရပ်ဝတ်အရပ်စားပုလိပ်များကိုသာမက ကျွန်တော့်ကိုပါ ချက်စကားဖြင့် နှုတ်ဆက်ကြသည်။ ၎င်းနောက်စားပွဲများတွင် ထိုင်၊ စာရွက်ဖိုင်တွဲများဖွင့်၊ စီးက ရက်များသောက်၊ ရုံးအလုပ်သမားများကဲ့သို့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်မှ တကယ့်ကိုလွတ်လွတ် လပ်လပ်ကြီး ပြုမူကြသည်။ ဟာ … ဒီလူတွေကို ငါအသိသားပဲ၊ အနည်းဆုံး သုံးယောက်ကို ဖြင့် သိပါတယ်။ ဂက်စတာပို ဘက်တော်သားတွေတော့ ဖြစ်မသွားနိုင်ပါဘူး။ ဒါမှမဟုတ် ရန်သူတွေများ ဖြစ်ကုန်ကြပြီလား။ သူတို့လိုလူတွေ တောင် ဒီလိုဖြစ်ကုန်ကြပြီလား။ ကြည့်စမ်းပါလား ဟိုလူဟာ ၇ … ပါ။ တခါတုန်းက ပါတီနဲ့အလုပ်သမားသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူး။ လူက အရိုင်းလိုလို၊ ဒါပေမယ့် သစ္စာ ရှိတယ် မဟုတ်ပါဘူး။ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒီဘက်က အန်ကာဗိကောဗား၊ ခါတိုင်းလိုပဲ ကိုယ်က ခပ်တောင့်တောင့်လှတုန်း၊ ပတုန်း၊ ဆံပင်ကတော့ လုံးလုံးဖြူနေပြီ။ ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲနဲ့ တိုက်ပွဲထဲခေါင်းမာမာနဲ့ဝင်ခဲ့တဲ့ မိန်းမတယောက် မဟုတ်သေး ပါဘူး၊ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ နောက်ပြီးတော့ ဗားရှက်၊ မြောက်ပိုင်း ဘောဟီးမီးယား၊ မီးသွေးတွင်း တွေက ပန်းရံသမားတယောက်၊ ခရိုင်ပါတီအတွင်းရေးမှူးလဲ လုပ်ခဲ့သေးတယ်။ သူ့ကိုဘယ်နဲ့ လုပ်ပြီး မသိဘဲနေနိုင်ပါ့မလဲ။ သူနဲ့ငါနဲ့ တူတူတွဲပြီး ခါးကျိုး မတတ် အလုပ်လုပ်ယင်း၊ မြောက်ပိုင်းဒေသ တိုက်ပွဲတွေကို မျက်နှာချင်းဆိုင်ခဲ့ကြတယ် မဟုတ်လား။ မဟုတ်သေးပါဘူး၊ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီမှာဘာလာ လုပ်နေကြတာလဲ၊ ဘာတွေလုပ်နေကြသလဲ။
ဘာတွေလုပ်နေကြသလဲ။ – ဂက်စတာပိုများသည် နံပါတ်လေးရာ၌ အကျဉ်းသမားများအား ဘာသာပြန်အလုပ် စသည်တို့ကို လုပ်ခိုင်းကြသည်။ အကျဉ်းသမားများ ကလည်း ထိုအခွင့်အရေးကိုသုံး၍ ရန်သူဆန့်ကျင်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကြသည်။ နံပါတ်လေးရာတွင် ပုလိပ်အချို့တို့ကိုပင် စည်းရုံးထားနိုင်သဖြင့် အချို့သော အချိန်များတွင် ကွန်မြူနစ်အကျဉ်း သမားများကို ချုပ်နှောင်ထားရာအခန်းနှင့် မတူတောဘဲ၊ တော်လှန်ရေးသမားများ၏ ဌာနချုပ်သဖွယ် ဖြစ်နေတတ်သည်။ ထိုမေးခွန်းများအတွက် အဖြေရှာ၍ မရသေးမီပင်၊ အခြားသူများတစုတဝေးကြီး ပေါက်လာကြသည်။ မီးရက်အပြင်၊ ယဲနီလက်တို့ လင်မယားနှင့် ဖရီးဒ်တို့လင်မယားကိုလည်း ခေါ်သွင်းလာကြသည် ဟုတ်သည်။ ဤသည်ကိုကား ကျွန်တော် သိသည်။ ဤသူများကား ကျွန်တော်နှင့်အတူ အဖမ်းခံရသည်။ သို့သော် ပညာတတ်များ အကြား အလုပ်လုပ်ရန် မီးရက်အား အကူအညီပေးခဲ့သော အနုပညာသမိုင်းဆရာ ပါဗ်လ် ကရောပါးချက်တယောက် အဘယ့်ကြောင့် ပါလာရ သနည်း။ သူ့အကြောင်းကို ကျွန်တော်နှင့် မီးရက်မှတပါး အခြားဘယ်သူမျှ မသိကြ။ ၎င်းပြင် မျက်နှာတခုလုံး ကွဲပြဲနေသော အရပ်ရှည်ရှည် လူငယ်တယောက်က၊ ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်း မသိဟန်ဆောင်နေဟူ၍ ကျွန်တော့်အား အဘယ့်ကြောင့် လက်ဟန်ခြေဟန်ပြနေသနည်း။ အမှန်စင်စစ် သူ့အား ကျွန်တော်မသိ။ နေစမ်း … ဘယ်သူများပါလိမ့်။ ရှတစ်ခ်လား။ ဒေါက်တာရှတစ်ခ်။ ဇဒိညက်ပါလား။ ဘုရား … ဘုရား … ဒါဆိုယင် ဆရာဝန်တွေရဲ့ အုပ်စုပါလား။ ဒီအုပ်အကြောင်းကိုကော ကျွန်တော်နဲ့မီးရက်ကလွဲယင် ဘယ်သူသိလို့လဲ။ အကျဉ်းခန်းထဲကို လာပြီး စစ်ကြတုန်းက ကျွန်တော့်ကို ချက်ပညာတ်တွေအကြောင်း ဘာဖြစ်လို့မေးခဲ့တာလဲ။ ကျွန်တော်နဲ့ ပညာတတ်တွေရဲ့လုပ်ငန်းကို ဘယ်လိုဆက်သွယ်မိကြသလဲ။ ဒီကိစ္စကိုကော ကျွန်တော်နဲ့ မီးရက်ကလွဲယင် ဘယ်သူသိလို့လဲ။ အဖြေပေးရန်ကားမခက်၊ သို့သော် ထိုအဖြေ ကား ကြမ်းတမ်းလှသည် ရက်စက်လှသည်။ မီးရက်ကား ယောင်းမမြင်းစီး၍ ထွက်ခဲ့လေပြီ။ ဖွင့်၍ပြော ခဲ့ပြီ။ အကုန်လုံးကို ဖွင့်၍မပြေတန်ရာဟု ခေတ္တခဏမျှမြှော်လင့်နေခဲ့သေးသည်။ သို့သော် အပေါ်ထပ်သို့ အခြားအကျဉ်းသမားများကို ထပ်မံခေါ်ဆောင်လာကြသည်။ ကျွန်တော်မြင်လိုက်ရသော သူများကား …ဗလာဂျီလော့ဗ်၊ ဗန်ချူးရား၊ ပါမောက္ခ ဖဲလဘာနှင့် ၎င်း၏သား။ မမှတ်မိနိုင်လောက်အောင် ရုပ်ပြောင်းထားသည့် ဘက်ဒရစ်၊ ဗားစလာဗက်။ ဘောဇဲနာ၊ ပူလပါနောဗား။ ယင်းဒရစ်အဲလ်ဘလ်။ ပန်းပုဆရာ ဒဗောယျတ် – ချက်ပညာ တတ်များ၏ အမျိုးသားတော်လှန်ရေးကော်မတီကိုဖွဲ့ခဲ့သြူ သို့မဟုတ် ထိုအဖွဲ့တွင် ပါဝင် ကြမည့်သူ အားလုံးကား ဤနေရာသို့ ရောက်လာကြပြီ။ ပညာတတ်များအကြား လုပ်ငန်းဟူသ၍ကို မီးရက်သည်အလုံးစုံ ဖွင့်ပြောလိုက်လေပြီတကား။ပက်ချက်နန်းတော်သို့ ရောက်ခါစနေ့များတွင် ကျွန်တော်ကား သက်တောင့်သက်သာမနေခဲ့ရ။ သို့သော် ယခုကဲ့သို့ မြင်လိုက်ရခြင်းသည်ကား ဤနေရာတွင်ခံခဲ့ရသော ဒဏ်ချက်များအနက်၊ အပြင်းထန်ဆုံးသော ဒဏ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်ကား သေဘေးကိုမြင်ခဲ့သည်၊ သစ္စာဖောက်မှုကိုကား မမြှော် လင့်ခဲ့။ မည်မျှပင် ငဲ့ငဲ့ညှာညှာဆန်းစစ်စေကာမူ သက်သာစေသည့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ များကို မည်မျှပင်ထည့်တွက်စေကာမူ၊ မီးရက်အနေနှင့် ဖော်မထုတ်ပဲ ထိန် ၀ှက်ထားခဲ့သော အချက်များကို မည်မျှပင်ပြန်လည်တွေးတောစေကာမူ သစ္စာဖောက်ခြင်းတည်းဟူသော စကား မှလွဲ၍ အခြားစကားအသုံးအနှုန်းကို ရှာမတွေ့ခဲ့ပါ။ ယိမ်းယိုင်မှုကလေးတချက်မျှသာမဟုတ်၊ နုနယ်ပျော့ရော့မှုမဟုတ်၊ သေလုအညှဉ်းခံရသဖြင့် ဂယောင်ဂတန်း သက်သာမှုရှာဖွေမိသော သူ၏ပြိုဆင်းမှုမဟုတ်။ သူ့အား ခွင့်လွှတ်နိုင်စရာ အကွက်ကလေးတကွက်မျှမရှိ။ ရောက် ရောက်ချင်း ပထမညကတည်းက ကျွန်တော့်နာမည်မည်သို့သိသွားကြသည်ကို ယခုနားလည် ပါပြီ။ အာညိခ်ျကာ၊ ယီရားစကောဗား ဤနေရာသို့ အဘယ်ကြောင့် ရောက်လာသည်ကို ယခုနားလည်ပါပြီ။ သူ၏အိမ်တွင် ကျွန်တော်သည် မီးရက်နှင့်အကြိမ်ကြိမ်အခါခါတွေ့ဆုံခဲ့ဘူး သည်။ ကရောပါးချက်နှင့် ဒေါက်တာ ရှတစ်ခ် တို့ အဘယ့်ကြောင့်ဤသို့ရောက်လာကြရသည် ကိုလည်း ယခုသဘောပေါက်ပါပြီ။ နောက်ကျွန်တော်သည် နေ့စဉ်နှင့်အမျှလိုလို နံပါတ်လေး ရာသို့သွားရသည်။ နေ့စဉ်နှင့်အမျှလိုလိုပင် အသေးစိတ်အချက်အလက်တို့ကို ထပ်မံသိရှိလာ ရသည်။ ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာလည်း ကောင်းသည်။ တုန်လှုပ်ဘွယ်လည်းကောင်းသည်။ ကြည့်စမ်း … အရင်တုန်းက သိပ်ပြီးသတ္တိကောင်းခဲ့တဲ့လူတယောက်။ စပိန်ပြည်စစ်မျက်နှာတွင် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့စဉ်ကကျည်ဆံများကို မရွံ့မကြောက်ခဲ့သောသူ။ ပြင်သစ်ပြည်အကျဉ်းစခန်းမှကြမ်း ကြုတ်လှသော အတွေ့အကြုံများအောက် ဒူးမထောက်ခဲ့သူတယောက်။ ယခုဂက်စတာပို၏ လက်တွင်းမှ ကြိမ်လုံးကိုမြင်သည်နှင့်တပြိုင်နက် မျက်နှာတွင်သွေးများဆုတ်ယုတ်သွားကာ၊ မိမိ၏ သွားတချောင်း မကျိုးအောင် ဖော်ကောင်လုပ်ခဲ့လေပြီ။ အရိုက်အပုတ်ကလေး အနည်း ငယ်ခံရသည်နှင့်တပြိုင်နက် ပျက်ပျယ်သွားနိုင်သော သူ၏သတ္တိအား စကောလေက်ပင် စောက်မနက်သည်တကား။ သူ၏ယုံကြည်မှုသည်လည်း ဤသို့အပေါ်ယံကြောမျိုးဖြစ်လေ သည်။ ယုံကြည်ချက်ချင်းတူသော ရဲဘော်များ၏အလယ်၊ လူအုပ်ကြီး အတွင်း၌ကား ကြံ့ခိုင် ခြင်းဖြစ်လေသည်။ ယခုအဖော်ကင်း၍ တယောက်တည်းဖြစ်သွားကာ၊ ထိုးနှက်လျက်ရှိသော ရန်သူများက ၀ိုင်းလိုက်သည်နှင့် ရှိသမျှအား အင်တို့လည်း ကုန်ခန်းသွားလေသည်။ တကိုယ် ကောင်းကိစ္စများကို စ၍တွေးလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်အစစအရာရာကို ဆုံးရှုံးသွားလေ သည်။ ကိုယ့်အသား မနာစေရန် ရဲဘော် ရဲဘက်များကို ယဇ်ပူဇော်လိုက်သည်။ သူရဲဘောကြောင်စိတ် ၀င်လာကာ၊ ကြောက်စိတ်နှင့်သစ္စာဖောက်ခဲ့လေသည်။ သူနှင့်အတူ မိသွားသော လျှို့ဝှက်ရေးစာလုံးများ၏ အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြမည့်အစား အသေခံရသည်ဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နားမချ လျှို့ဝှက်သော စာဖတ် နည်းကိုဖွင့်ထုတ်လိုက်သည်။ လျှို့ဝှက်သော အိမ်တအိမ်ကို ဖော်ပြလိုက်သည်။ ရှတစ်ခ်နှင့်ချိန်း၍ ထိုနေရာသို့ ဂက်စတာပိုစုံထောက်များကို ခေါ်သွားကာ မျက်နှာ ချင်းဆိုင်ပေးလိုက်သည်။ ဗားစကာဗက်နှင့် ကရောပါ့ခ်တို့ကိုတွေ့ရန် ရန်သူများအား ဒဗောယျတ်ို့၏အိမ်သို့ လွှတ်လိုက်သည်။ အာညိခ်ျကာကို ထိုးအပ်လိုက်သည်။ ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲနှင့် သတ္တိကောင်းလှသော လီဒါ၊ သူ့အား ချစ်ခဲ့ရှာသည့် ကလေးမလေးလီဒါကိုပင် ထိုးအပ်လိုက်လေသည်။ အနည်းငယ်မျှ အရိုက်အနှက်ခံရလျှင်ပင် သိသမျှအနက်တ၀က်ကို ဖွင့်ပြောလိုက်သည်။ ကျွန်တော်သေပြီဟု ယုံကြည်သွားသောအခါဝယ်၊ ဖြေရှင်းမည့်လူမရှိ တော့ပြီဟု သဘောပိုက်ကာ၊ ကျန်သမျှ အချက်အလက်အလုံးစုံကို ဖော်ထုတ်လိုက်လေသ တည်း။
ဤသို့ ပြုလုပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော့အပေါ်အန္တရာယ်မရောက်စေခဲ့။ ကျွန်တော်ကား ဂက်စတာပိုလက်တွင်းသို့ ရောက်ပြီးသားဖြစ်သည် – ထို့ ထက်ပို၍ ဆိုးစရာအကြောင်းမရှိ။ အန္တရာယ်မရောက်စေသည်သာမက အကျိုးပင်တမျိုးရှိနေသေးသည်။ သူ၏ ဖြောင့်ချက်များ ကား အမှုတခုလုံးတွင် သက်သေခံ အထောက်အထားများအဖြစ် အကောင်အထည်အပေါ်ဆုံး လည်း ဖြစ်လာသည်။ ထိုအချက်အလက်များသည် သံကြိုး၏ အစွန်းအစများနှင့်လည်း တူလေသည်။ သင်းတို့သိလိုက်သော အခြားကွင်းဆက်အားလုံးတို့ကား ကျွန်တော်၏ လက်တွင်း၌သာ ရှိနေခဲ့လေသည်။ ထို့ကြောင့် မာရှယ်လေ ကျေညာပြီးသည့်နောက်တွင် ပင် ကျွန်တော့်မှာ အသက်နှင့်ခန္ဓာမြဲနေခဲ့ရလေသည်။ ကျွန်တော်သာမက ကျွန်တော်တို့လူစုမှာ လူအတော်များများလည်း အသက်ရှင်၍ကျန်ရစ်ကြလေသည်။ သို့သော် မီးရက်ကသာ ကိုယ့် တာဝန်ကိုကျေပြွန်ခဲ့လျှင် ဤနေရာတွင် ဤသို့သော်လူစုဟူ၍ပင် ပေါ်ပေါက်လာရန်အကြောင်း မရှိ။ သူရောကျွန်တော်ပါ အသက်ပျောက်ခဲ့သည်မှာ ကြာလှတော့မည်။ သို့သော် အခြားသူများ ကား ကျွန်တော်တို့ ကျဆုံးပြီးသည့်နောက်တွင်ပင် ဆက်လက်နေထိုင်ယင်း လုပ်စရာအလုပ် များကိုလည်း ဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားကြမည် ဖြစ်လေသည်။ လူကြောက်ဟူသည်ကား မိမိ၏အသက်တချောင်းကိုသာ ဆုံးရှုံးသည်မဟုတ်။ အစစအရာရာ အဘက်ဘက်တွင် ဆုံးရှုံး လေသည်။ ဂုဏ်သတင်း ပြောင်ဝင်းသော တပ်မတော်ကြီးမှ ထွက်ပြေးရာတွင် အညစ်ပတ် ဆုံးသော ရန်သူ၏ နှာခေါင်းရှုံ့ခြင်းကိုလည်း ခံယူရလေသည်။ အသက်ရှင်နေသေးသည်ဆိုဦး တော့ လူ့လောကတွင် မနေနိုင်တော့။ မိမိကိုယ်ကိုယ် အစုအဝေးအတွင်းမှ မိမိဖာသာ ထုတ်ပစ်ခဲ့သောကြောင့် ဤသို့ဖြစ်ရလေသည်။ နောင်သော် မီးရက်သည် သူ၏နေပုံထိုင်ပုံကို ပြုပြင်ရန်အနည်းအပါး ကြိုးစားသေးသည်။ သို့သော်သူ့အား ဘယ်တော့မျှပြန်၍ လက်မခံကြတော့။ ဤသို့သောဘ၀မျိုးကား အခြားနေရာ များတွင်ပင် ဆိုးဝါးလှသည်။ ထောင် ထဲ၌ကားပို၍ပင်ဆိုးဝါးနေပေသည်။
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
အကျဉ်းသမားနှင့်အဖော်မဲ့ခြင်း – ဤအမှတ်သညာနှစ်ရပ်တို့ကို လူတို့သည်တွဲ၍စဉ်းစား လေ့ရှိကြသည်။ သို့သော် ထိုအယူအဆကား မဟာအမှားတော်ပုံကြီး ဖြစ်လေသည်။ အကျဉ်း သမားသည် အပေါင်းအဖော်ကင်းမဲ့နေသည်မဟုတ်။ ထောင်သည် ကြီးမားသော အစုအပေါင်း ကြီးဖြစ်သည်။ ကြပ်တည်းစွာ တိုက်ပိတ်ခြင်းခံရစေဦးတော့၊ မိမိကိုယ်တိုင်က ဂိုဏ်းခွဲမထွက် သမျှ ကာလပတ်လုံး၊ မည်သူတဦးတယောက်မျှ ထိုအစုအဝေး၏ အပြင်သို့ ပဲ့ထွက်မသွားနိုင် ပေ။ အဖိနှိပ်ခံရသူတို့၏ သွေးသောက်စိတ်ဓာတ်သည် ဤနေရာတွင် ဖိနှိပ်ခြင်းဒဏ်ကို ခံရ သည်။ ယင်းဖိနှိပ်ခြင်းသည်ပင် ထိုစိတ်ဓာတ်ကို အနယ်ထိုင်စေသည်၊ ခိုင်မြဲစေသည်၊ ထက် သန်လာစေသည်။ ထရံများတွင် အသက်ရှိသည်။ ထရံများသည် စကားလည်း ပြောသည်၊ အချက်ပေးချက်များကိုလည်း ပြန်ကြားသည်။ ဤထရံများကို သွေးသောက်စိတ်ဓာတ်က ဖောက်ထွင်းဆက်သွယ်ထားသည်။ ဤစိတ်ဓာတ်သည် စင်္ကြံတလျှောက်ရှိ အကျဉ်းခန်းအား လုံးတို့ကို ထွေးပိုက်ထားသည်။ ဤအကျဉ်းခန်းများကား ဒုက္ခများကို ညီတူညီမျှခံစားကြရ သည်။ ရစရာရှိသမျှကိုလည်း ထပ်တူဆင်တူရရှိကြသည်။ စင်္ကြံအတွင်းရှိ အကျဉ်းခန်းတခန်း နှင့် ဆက်ဆံရသော ထောင်ဘာယာများသည် ထိုစင်္ကြံအတွင်းရှိ အခြားအကျဉ်းခန်းများနှင့် လည်း ဆက်ဆံရသည်။ ထို့ပြင် စင်္ကြံအလိုက် အပြင်ဘက်တွင် စုဝေးကာ၊ ကျန်းမာရေးလေ့ ကျင့်ခန်းများကို နာရီဝက်မျှ ပြုလုပ်ရသည်။ ထိုအချိန်မျိုးတွင် စကားလုံးကလေးတလုံးဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ် အမူအရာကလေးတခုဖြစ်စေ အသုံးပြု လျက် သတင်းပေးလို ပေးနိုင်သည်။ လူတယောက်၏အသက်ကို ကယ်ကောင်း ကယ်နိုင်သည်။ ထိုမျှသာမကသေး အစစ်ခံရာသို့ အတူယှဉ်တွဲ၍ခရီးသွားရခြင်း “ဘိုင်စကုပ်ရုံ” တွင် အတူယှဉ်၍ ပြန်လာရခြင်းစသည်တို့ဖြင့် ဆက်စပ်နေသောအခါဝယ် ဆိုခဲ့သောသွေးသောက်စိတ်ဓာတ်သည် တထောင်လုံးကို စုစည်း ထားလေသည်။ စကားလုံးနည်းသော်လည်း အကျိုးကျေးဇူးများ ကြီးစွာပြုတတ်သည့် သွေး သောက်စိတ်ဓာတ်ဖြစ်လေသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် လက်လက်ချင်း တချက်ကလေးမျှ ညှစ်လိုက်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် စီးကရက်တလိပ်ကို တိတ်တဆိတ်လှမ်းလိုက်ခြင်းသည်ပင် ခင်ဗျား အားသွတ်သွင်းထားသော လှောင်အိမ်ကို ချိုးဖောက်ပစ်လိုက်သည်။ ခင်ဗျားဒူးထောက်သွား လောက်အောင် ဖိစီးနေသည့် အဖော်မဲ့စိတ်ဓာတ်မှ ခင်ဗျားအားလွတ်မြောက်သွားစေသည်။ အကျဉ်းခန်းများတွင် လက်များရှိကြသည်။ အစစ်ခံရာမှ နာကျင်တုန်ရီစွာပြန်၍အလာ ခွေကျမ သွားအောင် ဖေးပေးနေကြသည့် လက်များကို ခံစားထိတွေ့ရသည်။ ရန်သူက ခင်ဗျားအစာ ပြတ်၍ ငတ်သေအောင် တွန်းနေစဉ် ထိုလက်များက ခွန့်ကျွေးသော အစားအစာများကို စားသောက်ရသည်။ အကျဉ်းခန်းများတွင် မျက်လုံးများရှိကြသည်။ သေဒဏ်အပေးခံရာသို့ အသွား ထိုမျက်လုံးများက ခင်ဗျားအားဝိုင်း၍ကြည့်ကြသည်။ ထိုအခါမျိုးတွင် ခြေလှမ်းဖြောင့် ဖြောင့်လှမ်း၍ ထွက်သွားရန်လိုသည်ကို ခင်ဗျားသိသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ခင်ဗျား သည်သူတို့နှင့် ညီအကိုတော်သည်။ သူတို့စိတ်ဓာတ်ပြော့သွားအောင် ခြေလှမ်းတလှမ်းမျှပင် တွန့်မပြစကောင်း ပေ။ ဤသည်ကား သွေးပေါက်ပေါက်ယိုစီးနေသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အနိုင်မခံသည့် စိတ်ဓာတ်က စုစည်းထားသည်။ ဤစိတ်ဓာတ်၏ အကူ အညီကိုသာမရပါက ခင်ဗျားသည် မိမိကံကြမ္မာ၏ ဆယ်ပုံတပုံကိုပင် ခံနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်။ ခင်ဗျားသာမက၊ မည်သူတဦးတယောက်မျှလည်း ခံနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ ဤဇာတ်ကြောင်း ကို ကျွန်တော်သည် ဆက်၍ ပြောနိုင်မည်ဆိုပါက (ဘယ်နေ့သေမယ် ဘယ်နှစ်နာရီသေမယ် ဆိုတာကိုမှ မပြောနိုင်ကြဘဲဟာ) ဤ အခန်း၏ ခေါင်းစဉ်တွင်ရေးထားသော “နံပါတ်လေးရာ” ဟူသော ဂဏန်းအမှတ်အသားသည် မကြာခဏပေါ်ပေါက်လာပေလိမ့်မည်။ အစ ပထမတွင် “နံပါတ် လေးရာ” ကိုအခန်းတခန်းအဖြစ် သိနားလည်ခဲ့သည်။ ထိုအခန်းထဲတွင်နေခဲ့ရသော ပထမနာရီများ၊ ထိုအခန်းထဲတွင် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သော ပထမအယူအဆများ၊ ဤသည်တို့ ကား စိတ်ချမ်းမြေ့ဖွယ်ရာတကွက်မျှမရှိခဲ့။ သို့သော် “နံပါတ်လေးရာ” ကား အခန်းတခန်း မဟုတ် အစုအပေါင်းတရပ် ဖြစ်လေသည်။ ရွှင်လန်းသော အစုအဝေးတခု၊ ရဲရဲတောက်သော အစုအပေါင်းတရပ်ဖြစ်လေသည်။
၁၉၄၀ ခုနှစ်အတွင်း ကန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေးဌာန၏ လုပ်ငန်းများကျယ်ပျံ့လာသောအခါတွင် “နံပါတ်လေးရာ” ပေါ်ပေါက်လာရလေသည်။ “နံပါတ် လေးရာ” မှာ “ဘိုင်စကုတ်ရုံ” ဟူသော အိမ်တွင်းထောင်၏ ဌာနခွဲဖြစ်သည်။ အစစ်ခံရမည့်လူများ ကိုယ့်အလှည့်ကို စောင့်ရာအခန်းခွဲ။ ကွန်မြူနစ်များအတွက် သီးသန့်ထားသောနေရာဖြစ်သည်။ မေးစရာအချက်တချက်ပေါ်လာ တိုင်း အောက်ဆုံးအထပ်မှ လေးထပ်ပေါ်အထိခေါ်၍ ခေါ်၍မနေရန်၊ အမှုစစ်ဆေးသူ ဂက်စတာပို အရာရှိများ၏ လက်လှမ်းမီရာတွင် အမြဲမပြတ်ရှိကြေရန် ပြုလုပ်ထားသော အခန်း တခန်းဖြစ်လေသည်။ ထိုသို့ ထွင်လိုက်သဖြင့် သူတို့အဖို့ အလုပ်သက်သာစေ မည်ဟု တွက်ဆ ကြလေသည်။
သို့သော် အကျဉ်းသမားနှစ်ယောက်ကိုတွဲထား အထူးသဖြင့်ကွန်မြူနစ်အကျဉ်းသမား နှစ် ယောက်ကိုတွဲထားလိုက်လျှင် ငါးမိနစ်အတွင်းရန်သူ၏ အကြံအစည်ဟူသမျှကို နှောင့်ယှက် ဖျက်ဆီးနေသော အစုအပေါင်းတရပ် ထိုနေရာ၌ ပေါ်ပေါက်လာတော့သည်။ ၁၉၄၂ ခုနှစ်သို့ ရောက်သည့်အခါတွင်ကား “နံပါတ် လေးရာ” ကို “ကွန်မြူနစ်ဗဟို” ဟူသော အမည်ဖြင့်သာ ခေါ်ဝေါ်ကြတော့သည်။ ဤနေရာတွင် အပြောင်းအလဲကား များပြားလှသည်။ ခုံတန်းလျားများ ပေါ်တွင် ယောက်ျား မိန်းမရဲဘော်ပေါင်း ရာလိုက်ထောင်လိုက်ချီ၍ တယောက်နေရာ တယောက်ယူကြရသည်။ သို့သော် အချက်တချက်ကားမပြောင်း။ အရေးတော်ပုံကို သစ္စာ စောင့်လျက်၊ အဆုံးသတ်၌ အောင်ပွဲခံရမည်ဟု ယုံကြည်နေသော အစုအပေါင်းဝိဉာဉ်ကား ပြောင်းမသွားပေ။
“နံပါတ်လေးရာ” ဤသည်ကား အဝေးသို့ ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ထားသော ကတုတ်ရင်တား ဖြစ်သည်။ အဘက်ဘက်မှလည်း ရန်သူများဝိုင်းထား သည်။ သဲသဲမဲမဲပစ်ခတ်ခြင်းကိုလည်း အလူးအလဲခံနေရသည်။ သို့သော် လက်နက်ချရမည်ဟု ခေတ္တခဏလေးပင်မတွေးတောခဲ့ပေ။ ဤကတုတ်ရင်တား၏ အထက်တွင်နီရဲသော အလံသည် တဝေ့ဝေ့လွင့်နေခဲ့သည်။ သို့သော် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေသော တမျိုးသားလုံး၏ ယိုင်းပင်းညီညာစိတ်လည်း ဤနေရာတွင်ပေါ်လွင်နေလေသည်။
အောက်ထပ်ရှိ “ဘိုင်စကုတ်ရုံ” တွင် အက်ဆက်စ်ထောင်စောင့်များသည် ဖိနပ်ရှည်များဖြင့် လမ်းသလားယင်း၊ ခင်ဗျားမျက်စောင်းတချက်ခတ်တိုင်း ခင်ဗျားအား ငေါက်ငန်းအော်ဟစ်ေ နသည်။ ဤနေရာ “နံပါတ်လေးရာ” တွင်ကားချက်လူမျိုး ပုလိပ်အင်စပိတ်တော်များ၊ ပုလိပ် မင်းကြီးရုံးမှ စုံထောက်များက အကျဉ်းသားများကို စောင့်ကြပ်ရသည်။ ဤအရာရှိများ၏ အမိန့်အရဖြစ်စေ၊ စကားပြန်များအဖြစ် ဂက်စတာပိုဝန်ထန်းများ ဖြစ်လာကြသည်။ ၎င်းတို့သည် ဤ နေရာ၌ အလုပ်လုပ်ရာတွင် ဂက်စတာပိုဝန်ထမ်းပီပီ အမှုထမ်းသူကထမ်းကြသည်။ သို့မဟုတ် ချက်အမျိုးသားပီပီ အမှုထမ်းသူကထမ်းကြသည်။ လှေနံနှစ်ဖက် နင်းသူက နင်းကြသည်။ ဤနေရာတွင်ကား လက်များကိုဒူးပေါ်တင်၊ မျက်လုံးများကိုရှေ့တည့်တည့် စိုက်လျက် သတိအနေအထားနှင့် ထိုင်နေရန်မလိုပေ။ ဤနေရာ တွင် အနည်းငယ်ပို၍ လွတ်လပ်စွာထိုင်နေနိုင်သည်။ ဘေးပတ်လည်ကိုလည်း ကြည့်နိုင်သည်။ လက်ဟန်ခြေဟန် တောင် ပြနိုင်သည် – အရာရှိ သုံးမျိုးအနက် မည်သည့်အရာရှိမျိုး တာဝန်ကျသည်နေသည် ဟူသည့် အပေါ်၌တည်၍ ထို့ထက်ပင် အများကြီးပို၍ လုပ်နိုင်သေးသည်။“နံပါတ်လေးရာ” ဤနေရာကား လူဟူသော သတ္တ၀ါကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကြီး သိနားလည်နိုင်သည့် နေရာဖြစ် သည်။ သေဘေး၏ နီးကပ်မှုသည် မည် သူ့ကိုမဆို ကိုယ်တုံးလုံးဖြစ်သည့်အထိ အဖုံးအကာ များဆွဲချွတ်လိုက်သည်။ လက်ပတ်အနီရောင်များကို ပတ်ထားရသော ကွန်မြူနစ်တရားခံများ၊ သို့မဟုတ် ကွန် မြူနစ်များနှင့် ဆက်သွယ်သည်ဟု သင်္ကာမကင်း အဖြစ်ခံရသူများလည်း သရုပ်ပေါ်လာသည်။ ထိုတရားခံများကို ဤနေရာ၌ စောင့်ကြပ်ရသူများအပြင် မနီးမဝေးရှိ အခန်းတခန်းတွင်း၌ တရားခံများစစ်ဆေးရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သူများလည်းသရုပ်ပေါ်လာသည်။ အစစ်ခံသည့်နေရာတွင် စကားလုံးများသည် ဒိုင်းလဲဖြစ်နိုင်သည်။ လက်နက်လည်းဖြစ်နိုင် သည်။ သို့သော် “နံပါတ်လေးရာ” တွင်ကား စကားလုံး၏နောက်တွင် ပုန်းကွယ်၍မရ။ ဤနေရာတွင်ကား ခင်ဗျားပြောသော စကားထက် ခင်ဗျား ၀မ်းတွင်း၌ရှိသော သဘ၀ကပို၍ တာသွားသည်။ ခင်ဗျား၏ ဗီဇအရင်းခံကို ဖျော့စေ၊ လျော့စေ၊ သို့မဟုတ် မွန်းမံစေသော ဘေးပန်းအချက်အလက် အားလုံးတို့ကား ကွယ်ပျောက်သွားသည်။ သေမင်း၏ ရှေ့တော်ပြေး မုန်တိုင်းက ထိုအချက်တို့ကို တိုက်ထုတ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် ၀ိသေတနမပါသော ကတ္တားနှင့် ကြိယာသာကျန်တော့သည်။ သစ္စာရှိသူ ကြံ့ကြံ့ခံ၏။ သစ္စာမဲ့သူဖော်ကောင်လုပ်၏။ အသဲကြောင်သူ စိတ်ဓာတ်ကျ၏။ သူရဲကောင်းတိုက်ပွဲဝင်၏။ လူတိုင်းတွင် အင်အားနှင့်ပျော့ ရော့မှု၊ သတ္တိနှင့် ကြောက်စိတ်၊ ခိုင်မြဲမှုနှင့် ယိမ်းယိုင်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းမှုနှင့်အညစ်အထေးဟူ၍ ရှိသည်။ သို့သော် ဤနေရာတွင်ကား တခုမဟုတ် တခုသာ ကျန်နိုင်တော့သည်။ ဟိုယောင် ယောင် သည်ယောင်ယောင်လုပ်ရန် ကြိုးစားသူက ကြိုးစားသည်။ သို့သော် ထိုသို့သော်မသာ မျိုးကား မသာချလာသောအခါ၌ ဦးထုပ်တွင် ငှက်မွှေးအ၀ါရောင်ကိုထိုး၊ လက်ထဲတွင်လဲရ ကွင်းများကိုင်ကာ ကခုန်သောထက်ပင် ထင်ထင်ရှားရှားမြင်သာ သိသာလေသည်။
ဤသို့သော သူများကား အကျဉ်းသမားများအကြား၌လဲရှိသည်။ ချက်လူမျိုး ပုလိပ်အင်စပတ် တော်များနှင့် စုံထောက်များအကြား၌လည်း ရှိပေ သည်။ စစ်ဆေးမေးမြန်းနေသည့်နေရာတွင် ဤသို့သောသူမျိုးသည် ဂျာမန်အင်ပါယာ ဘုရားသခင်အတွက် ဖယောင်းတိုင်ပူဇော်သည်။ နံပါတ်လေးရာတွင်မူ ဘော်လရှီဗစ်တစ္ဆေအတွက် ဖယောင်းတိုင်နောက်တတိုင် ထွန်းညှိလေ သည်။ ဂျာမန်အရာရှိ၏ မျက်စိအောက်တွင် ခင်ဗျားနှင့်ဆက်သွယ်သော သူ၏အမည်ကို ညှစ် ထုတ်ရန်၊ ခင်ဗျား၏သွားများကို ရိုက်ချိုးသည်။ နံပါလေးရာတွင်ကား ရင်းနှီးသောအမူအရာပြ၍ ခင်ဗျားအားအဆာပြေရန် ပေါင်မုန့်တချပ်လာပေးသည်။ ခင်ဗျား၏ အိမ်တွင်းသို့ဝင်ရောက် ရှာဖွေကြသည့်အခါတွင် ခင်ဗျား၏ပစ္စည်းများကို လုယူသယ်ဆောင်သွားသည်။ နံပါတ်လေးရာ တွင်ကား ခင်ဗျားအပေါ် မည်မျှကိုယ်ချင်း စာကြောင်းကိုဖော်ပြရန် တိုက်ခိုက်လာသော ပစ္စည်းများအနက်မှ စီးကရက်တပိုင်းကို တိတ်တိတ်လာ၍ပေးသည်။ ဤသို့သော အမျိုးအစား အတွင်း သေးစိတ်အားဖြင့် အနည်းငယ်သာမူကွဲသော လူတစုလည်းရှိသေးသည်။ ဤသူများ ကား မိမိတို့အလျောက်ဆိုလျှင် ခင်ဗျားဒုက္ခရောက်အောင် ဘယ်တော့မျှလုပ်ကြ။ ကူညီရ မည်ဆိုလျှင်လည်း သာ၍ပင်ဝေးသေးသည်။ သူတို့ကား ငတေမာလျှင်ပြီးသည့် သူများဖြစ် သည်။ ၎င်းတို့သည် ကိုယ်ကျိုးကို ထက်မြက်စွာကြည့်တတ်ကြသဖြင့် နိုင်ငံရေးရာသီတိုင်း သည့် ပြဒါးတိုင်များဖြစ်လာကြသည်။ ကြည့်စမ်း ခပ်တင်းတင်းနဲ့ အရာရှိစတိုင်ဖမ်းနေကြ သလား။ ဒါဆိုရင် ဂျာမန်တွေ စတာလင်ဂရက်မြို့ကို ချီတက်နေကြပြီဆိုတာ သေချာတယ်။ ဖော်ဖော်ရွေရွေဖြစ်လာပြီး အကျဉ်းသမားတွေနဲ့တောင် စကားပြောဖော်ရလာသလား။ ဒါဆိုရင် တို့အခြေအနေကောင်းလို့ပဲ။ ဂျာမန်တွေ စတာလင်ဂရက်က တပ်လန်သွားပြီထင်တယ်။ ကျုပ်တို့ဟာ ချက်အမျိုးအနွယ်ပါ၊ ဇွတ်အတင်းခိုင်းလို့သာ ဂက်စတာပိုထဲဝင်ပြီး အလုပ်လုပ်နေ ရပါတယ်လို့ ပြောလာကြပြီလား။ ဒါဆိုရင် လက်ခမောင်းခတ်ပေတော့။ တပ်နီတော်ဟာ ရော့စတော့ဗ်မြို့ကိုတောင် ကျော်တက်လာပြီဆိုတာ သေချာတယ် – ဤ အမျိုးအစားအတွင်း သို့ပင် အကြုံးဝင်သော အခြားသူတချို့ကား ခင်ဗျားရေနစ်နေသည် ကိုတွေ့လျှင် လက်ပိုက်၍ ကြည့်နေတတ်သည်။ ခင်ဗျားဖာသာ ခင်ဗျား ကမ်းပေါ်သို့တက်လာ သောအခါတွင်ကား ပြာပြာသလဲနှင့်လက်ကိုလှမ်း၍ဆွဲကြသည်။
ဤအမျိုးအစားသည် နံပါတ်လေးရာမှ အစုအပေါင်းအကြောင်းကို အကဲခတ်မိကြ၍ ၎င်းနံပါတ် လေးရာကိုလည်း သိနားလည်လာကြသည်။ ထို့ကြောင့်ထိုအစုအဝေးကိုချဉ်းကပ်ရန် ကြိုးစား ကြသည်။ သို့သော်ထိုအစုအပေါင်း၏ အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်သို့ကား ဘယ်သောအခါမျှရောက်လာ ကြ။ နံပါတ်လေးရာတွင် ယင်းသို့သော အစုအပေါင်းတရပ်ရှိနေသည်ကို အနည်းငယ်ကလေးမျှ မရိပ်မိသော အမျိုးအစားတမျိုးလည်း ရှိသေးသည်။ ၎င်းတို့အား လူသတ်သမားဟု ခေါ်နိုင် သည် – သို့သော် လူသတ်သမားဟူသည်ကား မနုဿလူသားများပင် ဖြစ်နေသေးသည်။ အမှန်အားဖြင့် ၎င်းတို့ကား ချက်စကားပြောတတ်သော အဟိတ်တိရိစ္ဆာန် များသာ ဖြစ်ကြ သည်။ လက်ထဲ၌ကြိမ်လုံးများ၊ သံဒုတ်များကိုင်ထားကြသည်။ချက်အကျဉ်းသမားများကို နှိပ်စက် ညှဉ်းပမ်းကြပြီဆိုလျှင် ဂျာမန်အရာရှိအများအပြား ပင် မကြည့်ရဲသဖြင့် ထွက်ပြေးကြ ရသည်။ သင်းတို့ကား ကိုယ့်အမျိုးကိုချစ်သည် သို့မဟုတ် ဂျာမန်အင်ပါကြီးကိုချစ်သည်ဟူ၍ အပြင်ပန်းအားဖြင့် ဟန်မဆောင်နိုင် ကြ။ ညှဉ်းပမ်းခြင်း၊ သတ်ဖြတ်ခြင်းသက်သက်တွင် အရသာခံတတ်ကြသည်။ သွားများကို ရိုက်ချိုးကြသည်။ နားအုံများကို ရိုက်ခွဲကြသည်။ မျက်လုံးများကို ညှစ် ထုတ်ကြသည်။ အင်္ဂါဇာတ်များကို ကန်ကျောက်ကြသည်။ ဥဏှောက်အရေခွံများကိုလှန်ကာ လူသေသည့်အထိ ရိုက်ကြနှက်ကြသည်။ အကြောင်းရှိ၍ ရက်စက် သည်မဟုတ်၊ ရက်စက်လို၍ ရက်စက်ကြခြင်းဖြစ်လေသည်။ ခင်ဗျားသည်နေ့စဉ် နှင့်အမျှ သူတို့နှင့်ဆက်ဆံရသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်တခုလုံးသွေးများ၊ အော်ဟစ်သံများဖြင့် ဖုံးလွှမ်းသွားစေသော သူတို့၏အရှိန်အ၀ါကို ခင်ဗျားခံစားရသည်။ ခင်ဗျားအတွက် ဖြေစရာတကွက်သာရှိသည်။ ထိုအချက်ကား ၎င်းတို့၏ ရာဇ၀တ်ပြစ်မှု များကို မြင်ခဲ့ကြသည့် သက်သေဟူသ၍ရွေ့ကို သတ်ပစ်လိုက်ကြသည်ဆိုဦးတော့၊ တနေ့တွင် တရားစီရင်ချက်မှ သင်းတို့တတွေ ပြေး၍လွတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟူ သောခိုင်မြဲသည့် ယုံကြည်ချက်ပင်ဖြစ်လေ သည်။
သင်းတို့နှင့် တစားပွဲတည်းတွင် ထိုင်နေကြသော လူများလည်ှးရိသည်။ ထိုသူများကား အပြန်ပန်းအားဖြင့် သင်းတို့နှင့်ရာထူးချင်းတူညီကြသည်။ သို့သော် ဤပုဂ္ဂများကား တကဲ့လူ အစစ်များဖြစ်လျက်၊ စာလုံးကြီးကြီးဖြင့် လူဟူ၍ပင်ရေးပြထိုက်ပေသည်။ ဤသူများသည် ထောင်တွင်းအစီအစဉ်များကို အကျဉ်း သမားအတွက် အကျိုးစေမည့်အစီအစဉ်များဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ပေးကြသည်။ ဤသူများသည် နံပါတ်လေးရာတွင် အတွင်။မှအစုအပေါင်းကို ကူညီဖွဲ့စည်း ပေးကြသည်။ ကိုယ်တိုင်လဲ စေတနာအရရော၊ သတ္တိအလိုက်ပါ ဤအစုအပေါင်း ၏ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည်။ ကွန်မြူနစ်များ မဟုတ်ကြသဖြင်းလည်း သူတို့အပေါ်ပို၍ တန်ဘိုးထားသင့်ပေသည်။ ကွန်မြူနစ်များ မဟုတ်ကြသည်သာမက၊ ယခင်ကဆိုလျှင် ချက် ပုလိပ်အဖွဲ့အတွင်း အမှုထမ်းယင်း ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်ငန်း များ လုပ်ခဲ့ဘူးသည်။ သို့သော် နိုင်ငံခြားသားများ၏ အုပ်စိုးမှုကို ကွန်မြူနစ်များက ခံ၍တိုက်ပုံကို မြင်လာကြသော အခါတွင် တမျိုးသားလုံး၏ အရေးတော်ပုံအတွက် ကွန်မြူနစ်တို့၏အရာရောက်ပုံကို သဘော ပေါက်လာကြသည်။ ကွန်မြူနစ်တို့၏အင်အားကို သိမြင်လာကြသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ထောင်ခံတန်းလျားများပေါ် ရောက်သည့်အထိ သစ္စာရှိနေကြသောသူဟူသ၍ကို သစ္စာရှိစွာ ကူညီကြသည်။ အကျိုးဆောင်ပေးကြသည်။ ဂက်စတာပိုလက်တွင်းသို့ ရောက်နှင့်တပြိုင်နက် မည် မျှရုန့်ရင်းစွာ ခံကြရမည်ကိုသိနိုင်ကြလျှင်၊ အပြင်ဘက်တိုက်ပွဲဝင်နေသူအများအပြားပင် နောက်တွန့်သွားပေလိမ့်မည်။ ဤသူတို့ကား ယင်းသို့ရက်စက်မှုတို့ကို နေ့စဉ်နှင့်အမျှ၊ နာရီနှင့် အမျှ၊ မျက်စေ့အောက်တွင် မြင်တွေ့နေကြရသည်။ နေ့မရွေး၊ နာရီမရွေး၊ ၎င်းတို့အား အကျဉ်း သမားများဘေးသို့ ချလိုက်ကြကာ၊ အခြားအကျဉ်းသမားများထက်ပင် ပိုမိုရက်စက်စွာ အစမ်း အသပ်ခံရလိမ့်မည်ကိုလည်း တွက်ထားနိုင်ပေသည်။ သို့စဉ်လျက် သူတို့ကား နောက်မ တွန့်ကြ။ ထောင်ပေါင်းများစွာသော အသက်တို့ကိုကယ်တင်ရန် ၀င်ရောက်ကူညီကြသည်။ သူတို့မကယ်ဆယ်နိုင်သော သူတို့အတွက်လဲ၊ သက်သာမှုရစေရန် ၀င်ရောက်ကူညီကြသည်။ သူရဲကောင်းဟူသော ဘွဲ့နှင့်ထိုက်တန်သော သူများဖြစ်လေသည်။ သူတို့သာမကူညီခဲ့လျှင် နံပါတ်လေးရာကား ရာလိုက်ထောင်လိုက်ချီသောကွန်မြူနစ်များ သိရှိနားလည်ကြသည့် လက်ရှိပုံစံအနေအထားသို့ ရောက်လာမည်မဟုတ်ပေ။ ယခုသော်ကား နံပါတ်လေးရာသည် မှောင်မိုက်သော အိမ်အတွင်းမှလင်းနေသော အခန်းကလေးတခန်း၊ ရန်သူ၏အနောက်သို့ ထိုးဖောက်ထားသော ကတုတ်ရင်တားတခု၊ ၀င်ရောက်ကျူးကျော်နေသူများ၏ သားရဲတွင်း အလည်တည့်တည့်မှ လွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲဆင်ရာ ဌာနတရပ်ဖြစ်ပေသတည်း။
ကြိုးစင်ပေါ်မှမှတ်တမ်းများ … အခဏ်း (၅)
……. ……. ……. ……. …… ……. ……. ……. ……. ……. ……. …….
ဂယ်လေ – အကျဉ်းသမားများ အလုပ်ကြမ်းလုပ်မည့်နေရာကို တင်စား၍ ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဂယ်လေဆိုသည်မှာ ရှေးကာလတွင် ကျွန်များ၊ အကျဉ်းသမားများ ပင် ပန်းစွာ လှော်ခတ်ရသည့် လှေကြီးတမျိုးဖြစ်သည်။
ကောဇာ့က် – ရှေးဇာဘုရင်များလက်ထက်က မြင်းတပ်သားများအဖြစ် အသုံးချခဲ့သော လူစုတစု။ အောက်တိုဘာ တော်လှန်ရေးနှင့် ပြည်တွင်း စစ်ခေတ်များတွင် အမြင်မှန်ရသော ကောဇာ့က်တို့သည် တော်လှန်ရေးတပ်သားများ ဖြစ်လာကြသည်။
“ယေး ပေါဒညတ်ဆယာ စဇဲမလီ ည်ပရီရှလော့စ်” – (ရုရှစကား) မထနိုင်ဘဲ မြေပေါ်တွင် လဲ၍နေတော့သည်။
ဗော့တ် မာယီ ဒရူဈော့က် ဘောထဲဗောယီ။ – (ရုရှစကား) ကြည့်လိုက်စမ်း၊ အဲဒါပဲ ကျုပ်ရဲ့ အချစ်၊ ကျုပ်ရဲ့ ရဲဘော် ရဲဘက်။
ဂုစတီနာလား။ ကြည့်စမ်းပါအုံး … ဟောဒါပဲ ဂုစတီနာ …
“ခင်ဗျားယောက်ျားကို နားချစမ်းပါ” ကျနော်တို့နှစ်ဦးအား မျက်နှာချင်းဆိုင်ပေးရင်း၊ ဌာနအကြီးအကဲလုပ်သူက သူ့အားပြောပါ သည်။ “ဉာဏ်ကိုလွှာသုံးဖို့ နားချစမ်းပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မငဲ့ရင်၊ အနည်းဆုံးခင်ဗျားကိုငဲ့ပါစေ။ ကဲ၊ ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားဖို့အချိန်တနာရီပေးမယ်။ ဒီနောက်တောင် သူခေါင်းမာနေအုံး မယ်ဆိုရင်တော့၊ ဒီနေ့ညနေ ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်စလုံးကို ပစ်သတ်မယ် … နှစ်ယောက်စလုံး …”
အို … လူအပေါင်းတို့ ဒီကွေကွင်းမှုတွေကို ကျော်လွန်ပြီးကြတဲ့နောက် ကျနော်တို့နှစ်ဟာ ပြန်တွေ့ကြမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုများနေကြမယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းနိုင်ကြပါရဲ့လား။ အချုပ်အချယ်ကင်းပြီး ဖန်တီးတည်ထောင်မှုတွေနဲ့ လှပနေမယ့် လွတ်လပ်တဲ့ဘ၀ကြီး မှာ ပြန်တွေ့ကြမယ်ဆိုပါတော့။ ကျနော်တို့ တောင့်တခဲ့ကြတာတွေ၊ မရရအောင် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာတွေ၊ အခုလဲ ဒီရည်မှန်းချက်တွေအတွက် အသက်ပေးကြတော့မယ်။ အဲဒီဟာတွေအားလုံး တကယ်ပေါ်ထွန်းလာတဲ့အခါမှာ ပြန်တွေ့ကြမယ်ဆိုပါတော့။ အမှန်အားဖြင့်ဆိုသော် သေပြီး သည့်တိုင်အောင်လဲ ကျနော်တို့သည် ခင်ဗျားတို့၏ ကြီးမားသော ပျော်ရွှင်မှု၏ တနေရာ တစိတ်တပိုင်းကလေးတွင် ဆက်လက်၍ နေထိုင်မြဲ နေထိုင်ကြမည်သာဖြစ်လေသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကျနော်တို့သည် ဤပျော်ရွှင်မှုကြီးအတွင်းသို့ ကျနော်တို့၏အသက်များကို ပေး သွင်းခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုအချက်ကြောင့်လည်း၊ ခွဲခွါသည့်အခိုက်တွင် ၀မ်းနည်းစရာ ဖြစ်နေသော်လည်း ကျနော်တို့အတွက် ၀မ်း သာအားရစိတ်ပေါ်နေခဲ့ပါသည်။
ကိုယ်တို့ တယောက်နဲ့တယောက် ပြန်မတွေ့ကြဖို့က များတယ်ဆိုတာ မင်းလဲသိတယ်၊ ဂုစတီနာ၊ ကိုယ်လဲသိတယ်။ ဒါနဲ့တောင် မင်းအဝေးကနေပြီး လှမ်းပြောနေတာကို ကိုယ်ကြားနေသေးတယ်။ ပြန်ပြီးတွေ့ကြအုံးစို့ … အချစ်ရေ … တဲ့။
ပြန်တွေ့ကြသေးတာပေါ့ … မောင့် ဂုစတီနာရေ။
ကမဲန်။ ပရာမဲန်။ ပရောလဲတကုလ်တ်။ ဒေါဘာ။ ဆောစီယဲလိစတာ၊ အဗန့်တဂါရ်ဒ် – ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်မဖြစ်မီက ထုတ်ဝေခဲ့သော ဂျာနယ်မဂ္ဂဇင်းများ။
ဘောဇဲနာ၊ ညဲမစောဗား – ညဲမစောဗား (၁၈၂၀ – ၁၈၆၂) ချက်အမျိုးသမီး စာရေးဆရာ။ ဇဲယဲရ် (၁၈၄၁ – ၁၉၀၁) ချက်ကဗျာဆရာ။ ဆာဘီနာ (၁၈၁၃ – ၁၈၇၇) ချက်သတင်းစာဆရာ၊ စာရေးဆရာ။
“တေလေဂျပိုးတယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်” – နဲရုဒါက မိမိ၏ကလေးဘ၀ကို ဖော်ပြရေးသားခဲ့သော ၀တ္ထုတိုတပုဒ်၏အမည်။
ရှာလဒါ – ရှာလဒါ (၁၈၆၇ – ၁၉၃၇) ချက်စာပေဝေဖန်ရေးဆရာ။
သို့သော် ထိုအယူအဆကား လုံးဝအခြေအမြစ်မရှိ။ သတင်းစာဆရာဖြစ်၍သာလျှင် နဲရုဒါသည် “ရှေးပုံပြင်များနှင့် ဒဏ္ဍာရီများ” ကဲ့သို့ ကောင်းမွန်ခံ့ညားလှသည့် လက်ရာကိုလည်းကောင်း၊ သို့မဟုတ် “သောကြာနေ့သီချင်းများ” ကိုလည်းကောင်း၊ “အကြောင်းအရာရိုးရိုး ကလေးများ” ဟူသော ကဗျာများမှ အများစုကိုလည်းကောင်း၊ ရေးသားနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။ သတင်းစာဂျာနယ်လုပ်ငန်းသည် လူတယောက် တွင်ရှိသော အင်အားဟူသ၍တို့ကို စုပ်ယူတတ်သည်။ စိတ်လေလွင့်ကောင်းပင် လွင့်စေသည်ထင်သည်။ သို့သော်လဲထိုအလုပ်သည် သတင်း စာဆရာအား စာဖတ်သူနှင့်ဆက်စပ်ပေးသည်၊ ကဗျာစပ်ရာတွင်ပင် ဖန်တီးမှုကိုသင်ပေးသည် သို့သော်၊ သတင်းစာဆရာ ဘက်ကလဲနဲရုဒါ ကဲ့သို့ ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်ရန် လိုပေလိမ့်မည်။ ခေတ်နှင့်ဆက်စပ်နေသော သတင်းစာများနှင့် သာမ ပေါင်းဖက်လျှင်၊ နဲရုဒါသည် ကဗျာစာ အုပ် အမြောက်အများရေးကောင်း ရေးခဲ့မည်။ သို့သော် ထိုစာအုပ်များကား ယခုလက်ရှိ နဲရုဒါ၏ စာများ ကဲ့သို့၊ ရာစုနှစ်အဟောင်းမှ လက်ငင်း အချိန်အထိ သက်ဆိုးရှည်ကြ မည်မဟုတ်ပေ။
ဖေဖေနှင့်မေမေတို့အနေဖြင့် ကျနော်တို့မိသားစုအတွင်း ဟာသွားသောအကွက်ကို မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ်နေရန် မိမိတို့၏ သီချင်းသံများဖြင့် ဖြည့် တင်းပေးကြပါမည့်အကြောင်း၊ နှမဖြစ်သူ လီဘာနှင့်ဗြဲရကာ တို့အား မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ပါသည်။ သူတို့နှစ်ယောက်သည် ပက်ချက်နန်းတော်အတွင်းသို့ ထောင်ဝင်စာ ခံလျက် ကျနော်တို့အား လာ၍တွေ့ရာတွင်၊ မျက်ရည်များကို အနိုင်နိုင်မြိုသိပ်ခဲ့ကြရရှာသည်။ သို့သော်လဲသူတို့၏ ကိုယ်တွင်း၌ကား ရွှင်လန်းမှုသည် ရှင်၍နေ သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့်လဲ သူတို့အား ကျနော်ချစ်သည်။ ထို့အတွက် ကြောင့်လဲ ကျနော်တို့တယောက်နှင့်တယောက် ချစ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ကား ရွှင်လန်း မှုသည် ပျိုးကြဲသူများဖြစ်ကြသည် – ဤသဘာဝ သည် သူတို့၌ အမြဲမပြတ် တည်မြဲနေပါစေသတည်း။
ရိုခ် – အင်ပါယာ။ ဟစ်တလာလက်ထက်က ဂျာမဏီပြည်ကို ရိုခ် ဟု ခေါ်ကြသည်။
ဤသည်ကား မျှော်လင့်ချက်နှင့် စစ်တို့၏ အပြေးပြိုင်ပွဲဖြစ်လေသည်။ သေခြင်းနှင့် သေခြင်းတို့၏ အပြေးပြိုင်ပွဲဖြစ်သည်။ မည် သည့်သေခြင်းက အလျင်ရောက်လာမည်နည်း။ ဖက်ဆစ်ဝါဒီတို့၏ သေပွဲလော၊ ကျနော်၏သေပွဲလော။ ဤမေးခွန်းကို မေးနေသည်မှာ ကျနော်တယောက်တည်းသာလော။ ကျနော် တယောက်တည်းကား မဟုတ်၊ သောင်းနှင့်ချီသော အကျဉ်းသမားများကလဲ ဤသို့မေးနေကြ သည်။ ဥရောပတ၀ှမ်းလုံး၊ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းလုံးရှိ ကုဋေနှင့်ချီသော လူအ ပေါင်းတို့သည်လည်း ဤသို့မေးနေကြသည်။ အချို့တွင် မျှော်လင့်ချက်ပို ၍ကြီးသည်၊ အချို့တွင် ပို၍ငယ်သည်၊ သို့သော်လဲ ဤသည်ကား ထင်ကြေးမျှသာဖြစ်သည်။ ပုပ်ဆွေးပြိုဆင်းနေသော အရင်းရှင်စနစ်က တ ကမ္ဘာလုံးကို လွှမ်းခြုံလိုက်သည့် အန္တရာယ်ကြီးများသည် လူတိုင်းလူတိုင်းအား ဒင်ပြည့်ကျပ်ပြည့် ခြိမ်းခြောက်လျက် ရှိသည်။ နောက်ထပ် လူ ပေါင်းသိန်းချီ၍ ကျဆုံးကြဦးမည် – ဘယ်လောက် တန်ဘိုးရှိတဲ့လူတွေလဲ – ထို့နောက်ပိုင်းတွင်မှ ကျန်ရစ်သောသူများသည် ကျုပ်တော့ ဖက်ဆစ်ခေတ်ကို ကျော်လွန်နိုင်ခဲ့ပြီဟု ဖြေနိုင် ဆိုနိုင်ကြပေလိမ့်မည်။
ကျနော်သည် ဤလူရုပ်သွင်များကို ရေးသားဖော်ပြရာ၌ ယဲလီနက်တို့ ဇနီးမောင်နှံနှင့်အစပြုခဲ့သည်။ သူတို့ကား ရိုးရိုးတန်းတန်း လူများဖြစ်ကြသည်။ သာမန် အခြေ အနေများတွင် ခင်ဗျားအနေနှင့် သူတို့နှစ်ဦးအားသူရဲကောင်းများအဖြစ် မြင်တတ်မည်မဟုတ်ပေ။ အဖမ်းခံရ သောအချိန်က သူတို့သည် လက်များကို ခေါင်းပေါ်အထိ မြှောက်ထားယင်း နှစ်ယောက်သားယှဉ်၍ ရပ်နေခဲ့ကြသည်။ သူကား ဖြူပတ်ဖြူရော်၊ သူမကား နားထင်အောက်တွင် တီဘီရောဂါသွေးများ လျှမ်း နေသည်။ သူမ၏ စံပြုလောက်အောင် သန့်ရှင်းသောအိမ်ခန်းကို ဂက်စတာပိုက ငါးမိနစ်အတွင်း ဇောက်ထိုးမိုးမြှော် လုပ်ပစ်လိုက်ကြသည်ကို မြင်ရသောအခါတွင် မျက်လုံးများ၌ ထိတ်လန့်သော အရိပ်အရောင်များ ပေါ်လာ သည်။ နောက်မိမိ၏ ယောက်ျားဘက်သို့ ခေါင်းကိုဖြည်းညှင်းစွာ လှည့်၍မေးလိုက်သည်။
– ပဲပါ ….. ဘာတွေများဖြစ်အုံးမှာလဲဟင် …..
– သွားပြီး သေကြရတော့မှာပေါ့၊ မားညာ။
သူမသည် အော်လဲမအော်၊ ဣနြေ္ဒလဲမပျက်။ သူတို့အား အစဉ်သဖြင့် ချိန်ထားသော ပစ္စတိုပြောင်းဝများရှေ့တွင်ပင် သူမ၏လက်ကိုညွှတ်၍ သူ့ထံသို့ လှမ်းပေးလိုက်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်သည့်အတွက် သူရောသူပါပထမဆုံးအကြိမ် ပါးအရိုက်ခံကြရလေသည်။ သူမသည်ပါးကိုပွတ်ယင်း ၀င်ရောက်ကျူးကျော်သော သူများအား အနည်းငယ်အံ့အားသင့်စွာ ကြည့်နေခဲ့သည်။ ပြီးလျှင် လှောင်သလို ပြောင်သလို နီးနီးအသံနေအသံထားနှင့် …..
– ရုပ်ရည်ကလေးတွေက သနားကမားနဲ့ – ဟုပြောလိုက်သည်။ နောက်သူမ၏အသံမှာပို၍ ကျယ်လာသည် – ရုပ်ရည်ကလေးတွေ က သနားကမားနဲ့၊ ဒါပေမဲ့ မိုက်ကန်းလိုက်တဲ့ အကောင်တွေ။
မားညာ။ – ချက်ကိုယ်ပိုင်အမည်များကိုရင်းနှီးသည့်သဘော။ ချစ်စနိုးသည့်သဘောဖြင့် တမျိုးပြင်၍ခေါ်လေ့ရှိကြရာတွင် ယိုးဇက်အစား ပဲပါ။ မာရိယယ်အစား မား ညာ ဟုခေါ်ကြသည်။
သူမကား ထိလွယ် နာလွယ်ခဲ့သည်၊ ၀မ်းနည်းစိတ် ကြီးခဲ့ဖူးသည်။ အဖမ်းမခံရမီက ဤသို့လျှင် သူမ၏သဘာဝကို အကဲခတ်မိ သည်။ သို့သော် ဂက်စတာပို၏ လက်တွင်းရှိနေသမျှတချိန်လုံးတွင် သူမ၏ မျက်စိများ၌ မျက်ရည်ကလေးတပေါက်တလေမျှပင် မမြင်မတွေ့ ခဲ့ရ။ သူမသည် မိမိတို့၏အိမ်ခန်းအပေါ် သံယောဇဉ်ကြီး သည်။ သို့သော် အိမ်ထောင်ပရိဘောဂများကို မည်သူခိုးယူသည်ကို သိကြောင်း၊ ထိုသူ အား စောင့်ကြည့်နေကြကြောင်းဖြင့် အပြင်မှရဲဘော်များက သူမစိတ် သက်သာ စေရန် သတင်းပေးကြသည့်အခါတွင် ဤသို့ ဖြေခဲ့သည်။
အိမ်ထောင်ပရိဘောဂတွေ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ပစေ၊ ဒါတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးအချိန်ကုန် ခံမနေကြပါစေနဲ့။ ဒီထက်ပိုပြီး အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတွေရှိနေကြတဲ့ ကြားထဲမှာ အခုလဲ ကျမတို့ကိုယ်စား ပိုပြီးအလုပ်လုပ်ကြမယ်မဟုတ်လား။ အောက်ခြေသိမ်းကနေပြီး ဆေးကြောပစ်ဖို့က ပထမ။ ဒီအတောအတွင်းမသေဘူးဆိုရင် နောက်တော့မှ ကျမအိမ်ကို ကျမကိုယ်တိုင်ရှင်းမယ်။
လာကယ်ဒါအိမောန် – ခရစ်မတိုင်မီ သက္ကရာဇ် ၄၈၀ ပြည့်၌ ကြီးမားသောပါရှားစ်စစ်တပ်များကို ခုခံရင်း အသေခံသွားကြသော စပါရတန်စစ် သည်တော်များအား ဂုဏ်ပြုသည့်ကျောက်တိုင်မှ စာတမ်း။
သူတို့ လင်မယားသည် ယဲလီနက်တို့နှင့် တတိုက်တည်းကပ်လျက်သားအိမ်ခန်းတွင် နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ နာမည်များမှာလဲ ယိုးဇက် နှင့် မာရိယယ်ပင် ဖြစ်သည်။ အောက်တန်းစာရေး၏ အိမ်ထောင်ကလေးဖြစ်၍၊ ယဲလီနက်တို့ထက် အနည်းငယ်ပို၍အသက်ကြီးသည်။ ဆယ့် ခုနှစ်နှစ်သားအရွယ်က ဤနုစလယ် အရပ်သား ဒေါင်ရှည်ရှည်ကို၊ စစ်ထဲသို့ ဆွဲသွင်းကြ၍ ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးထဲသို့ ထိုးထည့်လိုက်ကြသည်။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း၌ပင် ဒူးတဖက်ကြေလျက် ပြန်ခေါ်လာကြသည်။ ဒူးမှအနာကား ပြန်၍ကျက်မလာတော့ချေ။ သူမမှာ ဘာရနောမြို့ စစ်တပ်ဆေးရုံတွင် သူနာပြုဆရာမအဖြစ် အလုပ်လုပ်နေခဲ့ရာ၊ ဆေးရုံတွင်ပင် နဖူးစာဆုံကြသည်။ သူမက သူ့ထက်ရှစ်နှစ်မျှ ပို၍ ကြီးသည်။ စည်း၊၀ါး မကိုက်သော အိမ်ထောင်ဟောင်းမှ ဖျက်ထွက်လာသူဖြစ်သည်။
စစ်ပြီးသောအခါ ပဲပီက်နှင့် အိမ်ထောင်ကျသည်။ သူမက သူ့အပေါ်ဆက်ဆံပုံမှာ သူနာပြုဆရာသဘော၊ မိခင်သဘောမပျောက်ဘဲ ကျန်နေလေသည်။ ပစ္စည်းမဲ့ အိမ်ထောင်များမှ ဆင်းသက်လာ ကြသူများ မဟုတ်သည်သာမက၊ ကိုယ်တိုင်လဲ ပစ္စည်းမဲ့အိမ်ထောင်ကဲ့သို့ မနေကြ။ ပါတီတွင်းသို့ သူတို့ရောက်လာသောလမ်းမှာ ပို၍ရှုပ်ထွေး သည်၊ ပို၍ ခက်ခဲ သည် – သို့သော် ထိုလမ်းကို ရှာ၍တွေ့ကြလေသည်။ ထိုလမ်းကား – အခြားအခြားသောသူများလဲ အသုံးချခဲ့သလို – ဆိုဗီယက် ယူနီယံမှတဆင့် ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့် ဆက်စပ်နေသောလမ်းဖြစ်လေသည်။ နိုင်ငံတော်ကို ရန်သူများဝင်ရောက်မစီးနင်းမီ ခပ်စောစောပိုင်းကပင် မိမိတို့လိုလားသော အချက်ကို မိမိတို့သဘောပေါက်ခဲ့ကြ၍ ဂျာမန်ရဲဘော်များကို မိမိတို့၏အိမ်ခန်း၌ ၀ှက်ထားခဲ့ဘူး ကြသည်။
ပဲပီက် – ယိုးဇက်။
သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ ကျနော်အဖမ်းခံရပြီး များမကြာမီပင် သူလည်းအဖမ်းခံရလေတော့သည်။ သူ့အားမြင်လျှင်မြင်ချင်း ကျနော့်မှာ အထူးတုန်လှုပ်သွားမိ သည်။ သူ့ဆီကများ ပေါက်ကြားသွားမယ်ဆိုရင် ဘယ့်လောက်များဆိုးလိမ့်မလဲလို့။ သို့သော် သူကား ရေငုံ၍နေခဲ့သည်။ သူသည် မိတ်ဆွေတယောက်အား လျှို့ဝှက်စာတမ်းတချို့ကို ဖတ်ရန်ပေးခဲ့သည်။ ထိုစာတမ်းများကြောင့် ဤနေရာသို့ ရောက်လာသည် – ဂက်စတာပိုကလည်း ထိုစာတမ်းကိစ္စထက်လွန်၍ ဘာမျှမသိရ။
မောဟိကန် – ပြုတ်ပြုတ်ပြုန်းလုပြီဖြစ်သော အမေရိကန်လူနီမျိုးတမျိုးမှ နောက်ဆုံးကျန်ရစ်သောသူဟု တင်စားရေးသားခြင်းဖြစ်သည်။
– ဘူးလို့သာ ခေါင်းကခါလိုက်ရင်၊ ပါးစပ်ပေါက်ကပြောဖို့နေနေသာသာ စအိုကတောင် မတွန်ဘူး။
ဤလင်မယားကို ကျနော်ကောင်းစွာသိကျွမ်းခဲ့ပါသည်။ သူတို့တယောက်နှင့်တယောက် မည်မျှတွယ်တာကြသည်ကိုလဲ သိသည်။ တရက်လေး နှစ် ရက်ကလေး ခွဲခွါနေကြရလျှင်ပင် မည်မျှမနေတတ်မထိုင်တတ် ဖြစ်ကြသည်ကို ကျနော်သိပါသည်။ ယခုသော် လပေါင်းများ စွာရွေ့ခဲ့ပြီ – မိခလယ် အရပ်ရှိ ဖေါ်ရွေ လှသော အိမ်အတွင်းမှ အမျိုးသမီးအတွက် မည်မျှစိတ်မချမ်းသာစရာ ကောင်းနေလိမ့်မည်နည်း။ ယခုလိုအရွယ်တွင် အဖော်ကင်းမဲ့ခြင်းသည် သေခြင်းထက် သုံးပြန်ပို၍ အခံရခက်လေသည်။ တယောက်နှင့်တယောက် ဖေဖေလေး၊ မေမေ လေးဟု ကလေးသလို၊ကလားသလို ခေါ်ဝေါ်နေခဲ့ကြသော အေးရိပ်သာကိုပြန်လည် တည်ထောင်ရန်၊ မိမိ၏ယောက်ျားအား မည်သို့အကူ အညီပေးရန် စသည်များကိုအကြိမ်ပေါင်းမည်မျှ အိပ်မက်မက်ခဲ့ရှာပြီနည်း။ သည်တချိန်တွင်လည်း သူမသည် တစ်ခုထီးတည်း ကျန်ရစ်သော လမ်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ ခဲ့ပြန်သည်။ ထိုလမ်းကား အလုပ်ကိုဆက်လုပ်ရမည်ဟူသည့် လမ်းဖြစ်လေသည်။ ကိုယ့်အတွက်သာမက ခင်ပွန်း သည်၏ ကိုယ်စားပါ နှစ်ယောက်စာ အလုပ်လုပ်ရန်ဖြစ်လေသည်။
– စဉ်းစားကြည့်စမ်း၊ ဟိုမှာနေရထိုင်ရတာက အတော်ကြမ်းတာ။ ကျန်းမာတဲ့လူတွေအတွက်တောင် ခပ်ခက်ခက်။ ခင်ဗျား ယောက်ျားက ခြေကျိုးရယ်၊ ဘယ်နည်းနဲ့မှခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ တနေနေရာမှာ ပျက်စီးသွားမှာပဲ၊ ခင်ဗျားလည်း သူ့ကိုဘယ်တော့မှမြင်ရ တော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ခင်ဗျားကကော၊ ခင်ဗျားအရွယ် ရောက်မှ ဘယ့်နဲ့လုပ်ပြီး နောက်တယောက်ရှာနိုင်အုံးမှာလဲ။ ဒီတော့ဉာဏ်ကိုလွှာ သုံးပေါ့။ ခင်ဗျား ဘာတွေသိတယ်ဆိုတာ ကျုပ်တို့ကိုပြော၊ ကျုပ်တို့ကသူ့ကိုခင်ဗျားဆီ အရောက် ပြန်ခေါ်လာခဲ့မယ်။
တနေနေရာမှာ ပျက်စီးသွားမှာပဲတဲ့။ သနားစရာကောင်းလိုက်တဲ့ ပဲပီက် ကလေးရယ်။ ဘယ်လိုအသေဆိုးနဲ့ သေရမှာပါလိမ့်။ ကျမ ရဲ့ ညီမကိုလည်း သတ်ပစ်ခဲ့ကြပြီ၊ ကျမယောက်ျားကိုလည်း သတ်ဖြတ်နေကြပြီ။ ကျမတယောက်တည်းပဲ ကျန်ရစ်တော့မယ်။ တယောက် တည်းမှ တယောက်တည်းရယ်။ ဟုတ်တယ်လေ … ဒီလိုအရွယ်ကြီးမှာ … ဘယ်မှာသွားပြီးတော့ နောက်တပင် ထူနိုင်ပါ့မလဲ။ … တယောက် တည်း … အိုမင်းပြီးသေတဲ့အထိ အဖော်မပါဘဲနဲ့ နေရတော့မှာ … ကျမ သူ့ကို ကယ်နိုင်တယ်။ ကျမဆီအရောက် သူ့ကိုပြန်ခေါ်လာကြ လိမ့်မယ် … ဟုတ်တယ် … ဒါပေမဲ့ ဒါလောက်ကြီးတဲ့တန်ဖိုးကို ပေးရမှာလား။ ဒီလိုလုပ်လိုက်ရင် ကျမဟာ ကျမ မဟုတ်တော့ဘူး။ သူလည်းပဲ ကျမရဲ့ဖေဖေလေး ဟုတ်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး …
အိမ်တွင်း၌ ခြောက်လမျှ အောင်းနေပြီးသည့်နောက် ကျနော့်အနေနှင့် ပထမဆုံးအကြိမ် အပြင်သို့လမ်းလျှောက် ထွက်သည့်အခါ ၀ယ် သူသည်ကျနော်၏အဖော်အဖြစ် လိုက်ပါလာခဲ့သည်။ ခြေထော့ကျိုးနှင့် အဘိုးကြီးတယောက်၊ တယောက်တည်း လမ်းသွားသည်ထက် ဘေးတွင်အမျိုးသမီးတယောက် ပါလာက လူများ၏ အာရုံစိုက် ခြင်းမှ ပို၍ သက်သာသည်။ လူတိုင်းသည် အဘိုးကြီးကို ကြည့်မည့်အစား မိန်းကလေးကို ပို၍ကြည့်ကြသည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် ဒုတိယအကြိမ် လမ်းလျှောက် ထွက်ရာ၌လဲ သူပါလာခဲ့ပြန်သည်။ ထိုအကြောင်း ကြောင့်လဲ လျှို့ဝှက်စွာချိန်းဆိုထားသော နေရာတနေရာသို့ ပထမဆုံးအကြိမ်သွားရသည့်အခါတွင် ကျနော်နှင့် လိုက်လာ ခဲ့သည်။ ထို့အကြောင်းကြောင့်ပင် မြေအောက်ဂိုဏ်းဝင် အိမ်တအိမ်သို့အသွား၌ သူပါလာခဲ့ပြန်သည်။ သို့နှင့် ယခုစွဲချက်ထဲတွင်ပါ သည့်အတိုင်း ဒုတ်စက် သလို ဆက်သွား၍ သူလဲ ကျနော်၏ ဆက်သား ဖြစ်လာခဲ့လေသည်။
သို့သော် လီဒါကား လုပ်သက်ရင့်လာသည်။ လီဒါကား ယဲလီနက်တို့အိမ်သို့ မှာလိုက်သောစကားကလေးတခွန်းကိုဝင်၍ ပြောပေး ရုံသာမက၊ ထို့ထက်ကြီးမားသော တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိလာသည်။ သို့သော် ထိုအချိန်အခါတွင်မူ ဘာလုပ်၍ ဘာကိုင်နေမှန်း သဘောပေါက်ရန်လိုလာလေပြီ။ ကျနော်ကလဲ အစပျိုးပါတော့သည်။ သို့နှင့်သင်တန်း … တကယ့်ကျောင်းသင်တန်းတရပ်ကို ဖွင့်ရတော့သည်။ လီဒါလည်း ကြိုးစားပမ်းစားနှင့် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ကြီး လေ့လာလေသည်။ အပေါ်ရံကြောအရကား လီဒါသည်ယခင်အတိုင်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်၊ ပေါ့တီးပေါ့ဆနှင့် နေတတ်သော ဂျပမိုးမကလေး ကဲ့သို့ပင် ဆက်လက်နေထိုင်လေသည်။ အတွင်း၌ကား တမူကွဲပြား ခြားနားခဲ့လေပြီ။ တွေးတောလေပြီ။ ကြီးပြင်းလာလေပြီ။
– ကျမတသက်မှာ ဒီနေ့ဟာအရေးအကြီးဆုံးနေ့ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သိပါတယ်။ အခု ကျမကိုယ်ကို ကျမမပိုင်တော့ဘူး။ ရဲဘော်တို့ကို ကတိပေးပါ တယ်။ ရဲဘော်တို့မျှော်လင့်သမျှကို ဘယ်တော့မှ ယောင်းမမြင်းစီး မဖျက်ဆီးပါဘူး။ ဘာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ် …
လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်က ဗီနောဟရာဒီ ရပ်ကွက်၊ ဖလောရာ ကဖီးတွင် ခင်ဗျားသည် အိတ်တွင်းတွင်မှ အကြွေများကို လှုပ်လိုလျှင် လည်းကောင်း၊ သို့မဟုတ် “ဒီမှာဆရာ … စာရင်းရှင်းကြစို့” ဟူ၍ ခေါ်လိုသောအခါ၌လည်းကောင်း၊ အ၀တ်စုံအနက်ကိုဝတ်ထားသည့် လူပိန်ပိန်ရှည်ရှည်တယောက်သည် ကုလားထိုင်များအကြားဝယ် ရေငုတ်သင်္ဘောပြောင်းတိုင်ကဲ့သို့ အသံမမြည်ဘဲ လျင်မြန်စွာဖြတ်သန်း လာလျက်၊ ခင်ဗျား၏ ဘီလ်စာရွက်ကို ထိုးပေးပေလိမ့်မည်။ သူ့တွင် သားရဲတိရိစ္ဆာန်ကဲ့သို့ လျင်မြန်လျက်နှင့်တိတ်ဆိတ်သော လှုပ်ရှားမှုလဲရှိ သည်။ အစစအရာရာကို မြင်တတ်သော သားရဲတိရိစ္ဆာန်၏ စူးရှသော မျက်လုံးများလဲ ရှိသည်။ ခင်ဗျားလိုသမျှကို မှာနေရန်ပင် မလို။ သူကိုယ်တိုင်ကပင် လက်အောက်ခံစားပွဲထိုးများအား လှမ်း၍ခန့်ခွဲနှင့်သည်။ “တတိယစားပွဲ၊ နို့နဲ့ကာဖီအကြီးစားတခွက်၊ မလိုင်မထည့်နဲ့”၊ “ဘယ်ဘက်ပြူတင်းပေါက်၊ ကိတ်မုန့်နဲ့ပြည်သူ့သတင်းစာ”။ သူကား ဖောက်သည်များအတွက်လဲ ကောင်းမွန်သောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တ ယောက်ဖြစ်သည်။
ထိုအချိန်အခါက သူ့အားကျနော်မသိသေးခဲ့။ နောက်အတော်ကြီးကြာတော့မှ ယဲလီနက်တို့၏အိမ်တွင် သူနှင့်သိကျွမ်းလာရသည်။ ဤအခါတွင်ကား သူသည်လက်ထဲ၌ခဲတံကို မကိုင်ဘဲ ပစ္စတိုတလက်ကို ကိုင်ထားသည်။ ကျနော့်အား ညွှန်ပြရင်းလဲ …
– ဒီလူ့ကို ငါစိတ်အ၀င်စားဆုံးပဲဟေ့ ဟု ပြောခဲ့လေသည်။ အမှန်ကိုဆိုရလျှင် ကျနော်နှင့်သူကား တဦးနှင့်တဦး အပြန်အလှန်စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြပါသည်။
“ကျနော်၏အရာရှိ”ထံတွင် ခင်ဗျားရှာကြည့်မည်ဆိုပါက၊ ခိုင်မြဲသောယုံကြည်ချက်ဟူ၍ တွေ့ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အခြားသူများ ထံတွင် တွေ့နိုင်သော ယုံကြည်ချက်မျိုးကို သူ့ထံ၌တွေ့ရမည်မဟုတ်ပေ။ သို့သော် အခြားသူတယောက်ယောက်ထံတွင် ဤသို့သောယုံကြည် ချက်မျိုးရှိသည်ဟုဆိုပြန်က ထိုယုံကြည်ချက်သည် ဖျင်းအထုံထိုင်းမှုတို့နှင့်သာ ရောယှက်နေလေသည်။ လိမ်မာပါးနပ်ခြင်း၊သဘောတရား များတွင် ကျွမ်းကျင်ခြင်း၊ လူ့သဘာဝကို နားလည်ခြင်းစသော အရည်အချင်းများဖြင့် ပူးပေါင်းနေလေ့မရှိပေ။ ခြုံကြည့်လိုက်သည့်အခါ သူတို့ ဘက်တွင် အောင်မြင်မှုများ တလေးသာနေသည်ဆိုပါက ထိုသို့ ဖြစ်ရခြင်းမှာ ကျနော်တို့သည် အခြားအခြားသော မြေအောက်လှုပ်ရှားမှုများနှင့် မနှိုင်းသာလောက်အောင် ခက်ခဲသောအခြေအနေ၀ယ် ကျဉ်းမြောင်းသော ဒေသတွင်း၌ အလွန်ကြာမြင့်စွာ တိုက်ပွဲဝင်နေရသောကြောင့်ဖြစ် သည်။ မြေအောက်လုပ်ငန်းတွင် နှစ်နှစ်ကြာ ခံနိုင်သောသူသည် လူတော်တယောက်ဖြစ်သည်ဟု ရုရှဘော်လ်ရှီဗစ်များက ဆိုခဲ့ကြသည်။
သို့သော် ၎င်းတို့အနေနှင့်ဆိုလျှင် မော်စကိုမြို့တွင် မီးများဝိုင်းလာက ပဲတရောဂရဒ် မြို့သို့ကူးသွားနိုင်သည်။ ပဲတရောဂရဒ်မြို့မှတဖန် သြဂျက် ဆာမြို့သို့ပြောင်း၊ လူသန်းပေါင်းများစွာရှိသော မြို့များတွင် မည်သူကမျှလဲ သူတို့အားမသိစေဘဲ ခြေဖျောက်၍နေနိုင်ကြသည်။ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်တွင်ကား ပရာဟာ၊ ပရာဟာနှင့် ပရာဟာ တမြို့တည်းသာ ရှိသည်။ မြို့ပေါ်ရှိ လူတ၀က်ကလဲ ခင်ဗျားကိုသိနေကြသည်။ ရန်သူက လဲ သူလျှိုများကို တအုပ်ကြီးပြုံ၍ ချထားနိုင်သည်။ သို့စဉ်လျက် ကျနော်တို့သည် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြံ့ကြံ့ခံနေခဲ့ကြသည်။ အချို့ရဲဘော်များဆို လျှင် ဂက်စတာပိုက ဖော်မထုတ်နိုင်ဘဲ ငါးနှစ်ကြာသည်အထိ မြေအောက်လျှိုနေခဲ့ကြသည်။ ယင်းသို့နေနိုင်သည်မှာ ကျနော်တို့အနေနှင့် နည်းနာနိသျှအမြောက်အများတို့ကို သင်ကြားခံယူခဲ့ရသောကြောင့်လဲဖြစ်သည်။ ဟုတ်သည်။ တချိန်တည်းတွင်လဲ ရန်သူသည် အင်အားကြီး မားကြမ်းကြုတ်လှသည့်တိုင်အောင်၊ ဖျက်ဆီးခြင်းမှလွဲ၍ အခြားဘာတခုကိုမျှ မလုပ်တတ်သောကြောင့်လဲ ကျနော်တို့ ဤသို့နေနိုင်ကြခြင်း ဖြစ်လေသည်။
ဌာနခွဲ၊ ဒုတိယ – (က) – ၁ – တွင် ကွန်မြူနစ်ဝါဒ အမြစ်ကစ၍ နှုတ်ပစ်ရေးတွင် ထိပ်ထိပ်ကျဲဖြစ်သည်ဟူ၍ လူသုံးယောက် နာမည် ကြီးကြသည်။ ပြည်တွင်းရန်သူအား တိုက်ခိုက်သည့် စစ်မျက်နှာတွင် ရဲရင့်မှုအတွက်ဟူ၍ အနက်၊ အဖြူ၊ အနီရောင်ဖဲပြားကို တင်ဆင်နိုင်ကြ သည်။ ထိုသူတို့ကား ဖရိဒရစ်။ ဇန်ဒဲရ် နှင့်“ကျနော်၏အရာရှိ” ယိုးဇက်၊ ဘဲမ်းတို့ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့သည် ဟစ်တလာ ၏ ဓနရှင်ဆိုရှယ်လစ် ၀ါဒအကြောင်းကို များစွာပြောလေ့ပြောမရှိ။ ထိုဝါဒအကြောင်း သူတို့သိသမျှမှာလဲ ထမင်းစားရေသောက်လောက်သာ ဖြစ်သည်။ သူတို့ကား နိုင်ငံရေးသဘောတရားတခုအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေသူများ မဟုတ်ပေ။ ကိုယ်ကျိုးကိုသာ ကိုယ်ရှာနေကြသည်။ ကိုယ်တတ်သလို ကိုယ်လုပ် နေကြသည်။
ဖရီးဒရစ်ကား ပိန်ပိန်ရှည်ရှည်၊ အသားညိုညို၊ မျက်လုံးများက ခပ်ဆိုးဆိုး၊ ပြုံးလျှင်လဲ ခပ်ဆိုးဆိုးပြုံးတတ်သည်။ ၁၉၃၇ ခုလောက် ကတည်းက ချက်ကိုစလိုဗားကီးယားပြည်သို့ ဂက်စတာပိုသလျှိုအဖြစ် ရောက်လာကာ၊ တကျွန်းတမြေသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင် လာကြသော ဂျာမန်ရဲဘော်များကို လုပ်ကြံသုတ်သင်ရေး၌ အကူအညီပေးခဲ့သည်။ ထိုသို့လုပ်သည်မှာ အဆန်းမဟုတ်၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် လူသေ များကား သူ၏ မက်မောရာ ဖြစ်သောကြောင့်တည်း။ သူ့အနေနှင့်ဆိုလျှင် အပြစ်မရှိသူဟူ၍ မည်သူမျှမရှိ။ သူ့ရုံးခန်း၏ ခါးပန်းကိုကျော်လိုက်မိ သူတိုင်းကား အပြစ်ရှိသူများ ဖြစ်သွားကြလေတော့သည်။ မိန်းမများအား ၎င်းတို့၏ခင်ပွန်းသည်များသည် အကျဉ်းစခန်း များ၌သေဆုံးသွားကြပြီ၊ သို့မဟုတ် အသတ်ခံကြရပြီဟု ပြောရမည်ဆိုလျှင် အထူး အရသာ တွေ့နေတတ်သည်။ သူနှစ်ခြိုက်စွာ လုပ်လေ့ရှိသော ကိစ္စတရပ်မှာလဲ အံဆွဲထဲမှ ပြာအိုးကလေး ခုနှစ်အိုးကို ထုတ်၍အချုပ်ခံထားရသူများအား ပြသခြင်းပင် ဖြစ်လေသည်။
– ဟောဒီ ခုနှစ်ယောက်ဟာ ငါကိုယ်တိုင် ငါ့လက်နဲ့ရိုက်သတ်ပစ်လိုက်တာကွ။ မင်း နံပါတ်ရှစ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။
သူသည် စည်းစိမ်ကိုမက်သည်။ ထိုတပ်မက်မှုသည်ကား သူ၏ပုလိပ်လုပ်ငန်းကို ဘေးပန်းမှကူညီပေးနေသော စက်ကလေးတလုံး ကဲ့သို့ပင် ဖြစ်နေလေသည်။ ခင်ဗျား၏အိမ်သည် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ပြင်ဆင်မွမ်းမံထားသော အိမ်ဖြစ်က၊ သို့မဟုတ် ခင်ဗျားသည်အထည် ဆိုင်တဆိုင်ကိုပိုင်က – ခင်ဗျား မြန်မြန်သေရမည်။ ဤသည်မှလွဲ၍ အခြားဘာမျှမရှိ။
ဘဲမ်းဆိုသော ကျနော်တို့၏အရာရှိကား ငွေကို အငန်းမရတပ်မက်လှသည် မဟုတ်၊ လူသေများကိုလဲ မမက်မောလှ။ စာရင်းတွက် ၍ကြည့်လျှင်မူ ဤနေရာများတွင် အထက်ပါလူနှစ်ယောက်ထက် များစွာညံ့ဖျင်းလိမ့်မည် – မဟုတ်ပေ။ သူကား လူကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တ ယောက် ဖြစ်လာလိုသောဆန္ဒနှင့် စွန့်စွန့်စားစားကျဲနေသော သူတယောက်ဖြစ်လေသည်။ သူလည်း ဂက်စတာပိုတွင် လုပ်သက်ရှည်လှပြီ ဖြစ်သည်။ နပိုလီယံရိပ်သာတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ဘဲရန် ၏ လျှို့ဝှက်ဆွေးနွေးပွဲများတွင် စားပွဲထိုးအဖြစ် အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ဟစ်တလာကို ဘဲရန်က မပြောဘဲကျန်နေသော အချက်ဟူသ၍ ဘဲမ်းက ဖြည့်စွက်ပြောဆိုခဲ့လေသည်။ သို့သော် ဤကိစ္စမျိုးကား သေးနုပ်နေသေးသည်။ သူတပါးကို အမဲလိုက်သလို လိုက်၍ဖမ်းရခြင်း၊ ၎င်းတို့၏ သေရေးရှင်ရေးတည်းဟူသော ပြဿနာတွင် သက်ဦးဆံပိုင်ဖြစ်ရခြင်း၊ အိမ်ထောင် များ၏ကံကြမ္မာကို သူကသာ အဆုံးအဖြတ်ပေးရခြင်း၊ ဤသို့သော ကိစ္စများသာလျှင် ကျေနပ်ဖွယ်ရာ ကောင်းလေသည်။
ဘဲရန် – ရူးဒေါလ်ဖ်၊ ဘဲရန်။ ဖောက်ပြန်သော ချက်ဓနရှင်များ၏ကိုယ်စားလည်။ အမျိုးသားသစ္စာဖောက်။ ဂျာမန်များဝင်ရောက်အုပ်စိုးစက ရုပ်သေးအစိုးရ ၀န်ကြီးချုပ်အဖြစ် တိုင်းပြည်အကျိုးယုတ်စေခဲ့သည်။
သူ၏ စိတ်ကျေနပ်မှုရရန်အတွက် နေရာတကာတွင် မချိမဆန့်ဇာတ်သိမ်းနေရန်မလိုပေ။ သို့သော် သူ့ဘက်က တနည်းနှင့်မဟုတ် တနည်းနည်းနှင့် လက်မထောင် နိုင်လျှင်၊ အခြေအနေများမှာ ထို့ထက်ပင် ပို၍ဆိုးဝါးသွားနိုင်သည်။ ဟဲရောစတရာတောစ် လို့သာ နာမည်ကြီး ရမည်ဆိုရင်၊ ဘာလဲဟဲ့ အလှ၊ ဘာလဲဟဲ့ အသက်။ ဟဲရောစတရာတောစ် – ရှေးဟောင်းဂရိပြည်တွင်၊ ဟဲရောစတရာတောစ်ဆိုသူသည် နာမည်ကျော်ကြားလိုသောကြောင့် အလှပဆုံးဝတ်သော ၀တ်ကျောင်း ကြီး တစ်ကျောင်းကို မီးတိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့လေသည်။
“ငါ့အမှုတွေထဲမှာ မင်းကိစ္စဟာအကြီးဆုံးပဲ” သူသည်ကျနော့်အား မကြာခဏ၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကြီးပြောလေ့ရှိသည်။ ကျနော့်ကိစ္စကို အမှုရှိသမျှအ နက်အကြီးဆုံးဟူ၍ အထက်မှစာရင်းသွင်းလိုက်ကြသောအခါ သူ့အနေနှင့်သွေးကြွသွားခဲ့လေသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့် ပင် ကျနော့်အနေနှင့် သက်ဆိုးရှည် နေရသည် ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်ပေမည်။
ကြိမ်လုံးနှင့် သံဒုတ်တို့မှာ အမှုစစ်ဆေးရာ၌ အသုံးပြုရမည့်တခုတည်းသော နည်းလမ်းများဖြစ်သည်ဟု သူကမယူဆပေ။ သူသည် “မိမိ၏” လူတ ယောက်အပေါ် မည်သို့တန်ဘိုးဖြတ်သနည်း၊ တန်ဘိုးဖြတ်သည့်အတိုင်းလဲ ဖြောင်းဖျသည့်နေရာတွင် ဖြောင်းဖျသည်၊ ခြိမ်းခြောက်သည့်အခါ ခြိမ်းခြောက်သည်။ ဘယ်သောအခါကမျှ ကျနော့်ကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပမ်းခြင်းမပြုခဲ့ – အဖမ်းခံရသည့် ပထမညတုန်းကမူ သူပါကောင်းပါမည်။ သို့သော် လိုအပ်သည်ဟု ယူဆလာသောအခါ၌မူ ကျနော့်အား အခြားတယောက်ယောက်ထံ ခေတ္တထုတ်၍ ချေးငှား တတ်လေသည်။
– မင်းကို ငါတို့ကဖမ်းချုပ်လိုက်တယ် – သူသည် လူများကိုကြည့်ယင်း ဤသို့ဆန်းစစ်ပြလေသည် – ဒါပေမဲ့ ကြည့်စမ်း ဘာတွေများ ပြောင်းလဲသွားသ လဲ။ လူတွေဟာအရင်ကလိုပဲ သွားကြလာကြ ရယ်ကြ မောကြ။ အယင်ကလိုပဲ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်လဲရှိရဲ့။ လောကကြီး ဟာ ဆက်ပြီးရွေ့လျှားနေလိုက်တာ၊ မင်းလိုလူမျိုးတယောက် ကမ္ဘာပေါ်ကိုမရောက်ခဲ့ဘူးသလိုပဲ။ ဒီလူတွေကြားထဲမှာ မင်းရဲ့စာဖတ်ပရိတ် သတ်တချို့တောင် ပါမှာပဲ – မင်းအတွက်ကြောင့် ဒီလူတွေမှာ ပါးရည်ကလေးတချက်ပိုပြီးတွန့်သွားတယ် ထင်သလား။
– မင်း ပရာဟာကိုချစ်တယ်ဆိုတာ ငါသိပါတယ်။ ကြည့်စမ်း ဒီမြို့ထဲကို တခါတလေတော့ ပြန်မသွားချင်ဘူးလား၊ ဘယ့်လောက် လှတဲ့မြို့လဲ။ လှတာမှ မင်းမရှိပြီးတဲ့ နောက်တောင်မှ ဒီမြို့ဟာ လှမြဲလှနေမှာ …
သူသည် အကုသိုလ်ဘက်သို့ဆွဲသော နတ်မိစ္ဆာ၏အခန်းကို ကောင်းစွာကပြတတ်သည်။ နွေရာသီ၏ညနေခင်းသည် ဆောင်းဦး ရာသီ၏ ရှေ့တော်ပြေး အငွေ့အသက်များဖြင့် မြို့တော်ကိုပက်ဖြန်းထားသည်။ မြို့တော်မှာ မှည့်နေသောသပျစ်ညိုသီးကဲ့သို့ ပြာလဲ့လဲ့အရောင် ဖြင့် မှိုင်းနေသည်။ အရက်ကဲ့သို့ ယစ်မူးစေသည်။ ကျနော်ကား ထိုအလှများကို ကမ္ဘာဆုံးသည့်အထိ ငေးကြည့်နေလိုလှသော်လည်း … သူက စကားကို ကြားကဖြတ်၍ ပြောလိုက်သည်။
– ခင်ဗျားတို့မရှိတော့တဲ့နောက်ဆို၊ ဒီထက်တောင်ပိုပြီးလှလာလိမ့်အုံးမယ်။
– မင်းက အပျက်ကချည်း လိုက်ကြည့်နေတဲ့အကောင်ပဲ။ ဟု ပြောလေသည်။
– ဒို့ဒီမှာ မရှိတော့တဲ့နောက် … ဟုတ်လား … ဒီလိုဆိုရင် ဒို့နိုင်မယ်ဆိုတာ မင်းမယုံဘူးပေါ့။
သူက ဤကဲ့သို့မေးသည်။ သူကိုယ်တိုင်လဲ မယုံတော့သောကြောင့် ဤသို့မေးခြင်း ဖြစ်လေသည်။ နောက် ကျနော်က ဆိုဗီယက် ယူနီယံ၏ အင်အား၊ ဆိုဗီယက် ယူနီယံကို မည်သူကမျှ မချေမှုန်းနိုင်ပုံ စသည်တို့ကိုပြောပြသောအခါ သူသည် အာရုံစိုက်၍နားထောင်နေခဲ့ သည်။ စကားစပ်မိ၍ပြောရဦးမည်။ ဤသည် ကား ကျနော်၏ နောက်ဆုံး “အစစ်ခံချက်” တချို့တ၀က်ပင် ဖြစ်လေသည်။
– ချက် ကွန်မြူနစ်တယောက်ကို သတ်တိုင်း သတ်တိုင်း၊ ခင်ဗျားတို့ဟာ ဂျာမန်လူမျိုးရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တစိတ်တပိုင်းကို သုတ်သင် ပစ်နေကြတာပဲ ဟု ကျနော်ကသူ့အား ပြောပြခဲ့ပါသည် – ဂျာမန်လူမျိုးရဲ့ရှေ့ရေးကို ကယ်တင်နိုင်တာ ကွန်မြူနစ်ဝါဒ တခုတည်းပဲရှိတယ်။
– ဒို့ ရှုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ဒို့ကိုဒီဝါဒက ကယ်တင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူးကွာ – ဟု ပြောယင်း အိတ်ထဲမှ ပစ္စတိုကိုထုတ်၍ ပြပါသည်။
– မြင်လား၊ နောက် ဆုံး ကျည်ဆံသုံးတောင့်ကို ကိုယ့်အတွက် ကိုယ်ချန် ထားတယ်။
… သို့သော် ဤသည်ကား ရုပ်တုကလေးတခုကိုသာ ကိုယ်စားပြနေခြင်း မဟုတ်တော့။ ဤသည်ကား အရွယ်နှောင်း၍ ဟောင်းနေ ပြီဖြစ်သော ခေတ်တခုကို သရုပ် ဖော်ခြင်း ဖြစ်လေသည်။
(ပခုံးသိုင်းကြိုးတစုံ – ကြားဖြတ်တူရိယာသံ)
ဂုစတီနာ၏ ကံကြမ္မအကြောင်းကို ကြားရသောနေ့၌ပင် ပခုံးသိုင်းကြိုးတစုံသည် ကျနော်တို့နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင် အကျဉ်းခန်းရှေ့ တွင် ပေါ်ပေါက်လာသည်။ မျက်နှာချင်းဆိုင်အကျဉ်းခန်းမှ မိတ်ဆွေတယောက်သည် သူမနှင့်တသုတ်တည်း အလုပ်ကြမ်းလုပ်ရာသို့ ထွက်ခွာ သွားရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုလူသိုက်ကား ယခုထက်ထိ ခရီးမထွက်ရသေး။ ဗြုံးကနဲရက်ရွေ့လိုက်ကြသည်။ သူတို့သွားရမည့်အလုပ်ရုံမှာ ဗုံးကြဲ ခံရသဖြင့် ပျက်စီးကုန်သည်ဟု ကြားရသည်။ (ဤသည်ကား တွက်ကိန်းကိုက်သော အဖြစ်အပျက်တရပ်။) မည်သည့်အချိန်တွင် ခရီးထွက်ရ မည်ကို မည်သူမျှမသိ။ ယနေ့ညနေ သို့မဟုတ် မနက်ဖြန်၊ နောက်အပတ် သို့မဟုတ် ဆယ့်လေးရက်အကြာတွင် သွားကောင်းသွားကြရမည်။ ပခုံးသိုင်းကြိုးများကား တွဲလောင်းခိုမြဲခိုနေကြလေသည်။
သို့နှင့်ကျနော်လည်း သိနေရသည်။ ထိုပစ္စည်းကို မြင်နေရသမျှကာလပတ်လုံး ဂုစတီနာတယောက်ဖြင့် ပရာဟာမြို့တွင် ရှိနေပေလိမ့်ဦးမည်။ ထို့ကြောင့် ထိုပုခုံးသိုင်းကြိုးများသည် သူ့အားကူညီနေသာ ပုဂ္ဂိုလ် တယောက် ဖြစ်ဘိသည့်အလား ၎င်းတို့အား ၀မ်းသာမြတ်နိုးစွာ ကြည့်ရှုနေခဲ့ပါသည်။ သူ့အနေနှင့် တရက်မျှ အချိန်ရလာမည်၊ နှစ်ရက် … သုံးရက် … ဒီအ ချိန်ဟာ ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မယ်ဆိုတာ ဘယ်သူသိနိုင်ပါ့မလဲ။ ဒီလိုရလိုက်တဲ့ ရက်ကလေးတရက်ကပဲ သူ့အသက်ကိုကယ်ဆယ် ကောင်း ကယ်ဆယ်မိမှာ …
ကျနော်တို့အားလုံးသည် ဤသို့သာ နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ယနေ့လဲ ဤသို့ပင် နေကြသည်။ ယခင်လ၊ ယခင်နှစ်ကလဲ ဤသို့ပင်။ မြှော်လင့်ချက်တည်ရှိ ရာ မနက်ဖြန်သို့ အမြဲတန်းမျက်နှာမူနေကြသည်။ ခင်ဗျား၏ ကံကြမ္မာကိုကား ချိတ်တံဆိပ်ခပ်နှိပ်လိုက်ပြီ။ ခင်ဗျားအား သဘက်ခါတွင် သေနတ်နှင့်ပစ်သတ်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီ – အမယ် ဒါပေမဲ့ မနက်ဖြန်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ ဘယ်သူပြောနိုင်ပါ့မလဲ။ နက်ဖြန် ခါအထိသာ အသက်ရှင်နေဦးမည်ဆိုလျှင် … နက်ဖြန်ကျလျှင် အစစအရာရာ ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်။ အစစအရာရာကား မခိုင်မကျည်ရှိ လှစွာသည်။ မှန်သည်၊ နက်ဖြန်ဘာဖြစ်မည်ကို မည်သူသိသနည်း။ သို့နှင့် နက်ဖြန်ပေါင်း များစွာလဲ ရွေ့လျားသွားသည်။ ထောင်ပေါင်းများစွာ သော လူတို့အတွက်ကား မနက်ဖြန်ဟူ၍မရှိတော့။ သို့ရာတွင် ဆက်လက်၍ နေထိုင်နေကြသည် – နက်ဖြန်ခါ၊ နက်ဖြန်ခါ ဘာဖြစ်တော့မယ် ဆိုတာ ဘယ်သူ သိနိုင်ပါ့မလဲ။
ဤသို့သော တွက်ကိန်းမျိုးမှ အကြောင်ဆုံးသော ကောလာဟလသတင်းများ ပေါက်ဖွားလာခဲ့သည်။ အပတ်တိုင်း အပတ်တိုင်း ဘယ်တော့စစ်ပြီး တော့မည်ဟူသော နှင်းဆီရောင်သတင်းများပေါ်လာတတ်သည်။ ထိုသတင်းများကို လူတိုင်းသည်ပါးစပ်ကို နားနှစ်ဘက် ထိလုနီးနီးဖြဲရင်း အငန်းမရနားထောင်လေ့ ရှိကြသည်။ အပတ်တိုင်း အပတ်တိုင်း ပန်းကရာ့စ်ထောင်သည် ထူးခြားသော ၀မ်းသာစရာသတင်း တရပ်ကို တိုးတိုးကလေး ဖွင့်ပြောတတ်သည်။ ထိုသတင်းမျိုးကို လူတိုင်းကပင် အားတက်သရောလက်ခံလိုကြသည်။ ခင်ဗျားက ဤကိစ္စမျိုးကို တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်သည်။ လွဲမှားသော မြှော်လင့်ချက်များကို ခင်ဗျားကတိုက်ဖျက်သည်။ ဤကိစ္စမျိုးကား လူ၏စရိုက်ကို မကြံ့ခိုင်စေသည် သာမက ပျော့ညံ့စေသည်။ အဆုံးသတ်၌ အစစအရာရာသည် ချောချောမောမော ဖြစ်သွားလိမ့်မည်ဟူသော သဘောထားကို လိမ်လည်ချက် ဖြင့် အစာခွန့်ရန် လိုလဲမလို၊ သင့်လဲမသင့်။ ထိုအကောင်းမျှော် စိတ်ဓာတ်သဘောထားကို အမှန်စကားဖြင့်လည်းကောင်း၊ မြေကြီး လက်ခတ် မလွဲ ရရှိမည့်အောင်ပွဲကို ပြတ်ပြတ်သားသား မြင်တတ်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ ယင်းသို့သာ အားဖြည့်ထားရပေမည် – သို့သော်လည်း အခြေခံ သဘာဝကား ခင်ဗျား၏ ကိုယ်တွင်း၌လည်း ရှိနေသည်။ သည်ရက်ကလေး တရက်သည်ပင် အဆုံးအဖြတ်ပေးမည့်နေ့ ဖြစ်နိုင်သည်။ ခင်ဗျား အချိန်ရလိုက်သော ရက်ကလေးတရက်သည်ပင် ခင်ဗျားအား ခြိမ်းချောက်နေသော သေဘေး၏နယ်စပ်မှ ခင်ဗျားမစွန့်လွှတ်လိုသော ဘ၀၏ နယ်တွင်းသို့ ဖြတ်ကူးမိရန်ကူညီကောင်း ကူညီနိုင်လိမ့်မည်။
ကြိုးစင်ပေါ်မှမှတ်တမ်းများ … အခဏ်း (၆)
အခန်း – ၆
၁၉၄၂ – ခုနှစ်၊ မာရှယ်လော
စင်္ကြံထဲတွင် ကျနော်တို့သည် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အဲလိယာရှ် ကိုတွေ့ကြသည်။ သူ၏ မျက်လုံးများတွင် တုန်လှုပ်မှုများပေါ်နေသည်။ ကျနော့်ကို မြင်သောအခါ ထောင်စောင့် တအုပ်ကြီး၏ အလည်၌ပင် တီးတိုး၍ ပြောဖြစ်အောင် ပြောလိုက်သည်။
အဲလိယာရှ် – ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အလောအိစ်၊ အဲလိယာ့ရှ် ဆိုသူမှာ ဂျာမန်များ ထူထောင်သော ရုပ်သေးအစိုးရတဖွဲ့တွင် ၀န်ကြီးချုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ တော်လှန်ရေးသမား များနှင့် ပူးပေါင်း လုပ်ကိုင်ခဲ့သောကြောင့် ၁၉၄၁ ခုနှစ်တွင် အဖမ်းခံရသည်။ နောက် အသတ်ခံရသည်။
မာရှယ်လော – စစ်အုပ်ချုပ်ရေး။ မာရှယ်လောကြေငြာထားသော အချိန်တွင် သေးငယ်သောအပြစ်များအတွက်ပင် ကြီးမားသော အပြစ်ဒဏ်များခတ်လေ့ရှိသည်။
ပန်းကရာ့စ်ရှိ ထောင်စောင့်များကား အချိန်မကျမီ ကျနော်တို့ပြန်လာကြသဖြင့် အံ့အားသင့်နေကြသည်။ ကျနော့်အား အကျဉ်းခန်းအတွင်းသို့ ပြန် ခေါ်သွားသည့် ထောင်စောင့်သည် ယုံကြည်စိတ်ချစေလောက်သော အမူအရာကိုပြသည်။ သူ မည်သူမည်ဝါဖြစ်မှန်း ယခုထက်ထိမသိသေး။ သို့သော်ကျနော် ကြားခဲ့ရသောသတင်းကို သူ့အားပြောပြလိုက်သည်။ သူက ခေါင်းခါပြသည်။ ဘာမျှမသိ။ ကျနော် နားကြားလွဲသည် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပေမည်။ ဟုတ်သည်၊ နာကြား လွဲကောင်း လွဲခဲ့မည်။ ဤအယူအဆကား လူကိုစိတ်သက်သာခွင့် ရစေလေသည်။ သို့သော် ထိုနေ့ညနေပိုင်းတွင်ပင် အထက်ပါထောင်စောင့်သည် အကျဉ်းခန်းတွင်း သို့ ပေါက်လာသည်။
ဟိုင်းဒရစ် – ရိုင်းဟာ့ရ်တ်၊ ဟိုင်းဒရစ်ခ်။ ထင်ရှားသော နာဇီခေါင်းဆောင်တယောက်။ ချက်ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ် အထူးဖိနှိပ်ညှဉ်းပမ်းခဲ့သူဖြစ်သည်။ မျိုးချစ်များက ၁၉၄၂ ခုနှစ်၊ မေလတွင် ၎င်းအား လုပ်ကြံသုတ်သင်လိုက်ကြသည်။
“အဲန်တလာဇွန်းဂ်ဂဘဲ့ဖဲလ်” – (ဂျာမန်စကား) လွှတ်မိန့်။
“ဟေ့၊ ဂျူးအကောင်၊ ဒီမှာတွေ့လား။ အချိန်တန်တော့ နွားပိန်ကန်ပြီလေ။ လွှတ်မိန့်တဲ့ကွ…ဖစ်…”
မောင်ထောင်ဇင် – သြစတြီးယားပြည်ရှိ နာဇီများ၏ အကျဉ်းစခန်း။
ပန်းကရာ့စ်မှ ပက်ချက်နန်းတော်သို့ သွားကြပြန်ရာ လမ်းတလမ်းလုံးကား ထောင်ပေါင်းများစွာသော အကျဉ်းသမားတို့အတွက် နေ့စဉ်အမျှ ကားစင် တင်၊ လှံချွန်နှင့် ထိုးရာဖြစ်လာသည်။ လော်လီကားများပေါ်တွင် တာဝန်ကျနေကြသော အက်ဆက်စ်တို့သည် “ ဟိုင်းဒရစ်အတွက်လက်စားချေ” နေကြလေသည်။ အကျဉ်းထောင် မော်တော်ကား တမိုင်မျှမောင်းမသွားရသေးမီပင်၊ အကျဉ်းသမား အများအပြားမှာ အထိုးခံသောပါးစပ်များမှ၎င်း၊ ခြောက်လုံးပြူးဒင်များဖြင့် အဆောင့်ခံရသဖြင့် ကွဲသွားသောခေါင်းများမှ၎င်း၊ သွေးများယိုစီး၍ လာကြရတော့သည်။ လော်လီထဲတွင် ကျနော်ပါလာက အခြားအကျဉ်းသားများ အနေဖြင့် သက်သာခွင့်ရကြသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကျနော်၏မေးမှမုတ်ဆိတ်များသည် အက်ဆက်စ်တို့၏ အာရုံစူးစိုက်ရာများ ဖြစ်လာသည်။
ကြံကြီးစီရာ နောက်ကြ ပြောင်ကြ စရာကြီးဖြစ်လာသည်။ သူတို့ အကြိုက်ဆုံး ပျော်ပွဲတခုကား တဂျုံးဂျုံး တဂျိုင်းဂျိုင်းနှင့် ဆောင့်နေသော လော်လီကားထဲတွင် ကိုယ်ကိုထိန်းသည့် ကြိုးကွင်းကဲ့သို့ ကျနော်၏ မုတ်ဆိတ်ကို အသုံးချကြခြင်းပင် ဖြစ်လေသည်။ ဤသည်ကား ကျနော့်အတွက်လည်း အသုံးကျသည်။ အစစ်ဆေး မခံရမီ ပြင်ဆင်ထား သကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။ စစ်ဆေးခဏ်းများမှာလည်း “ နက်ဖြန်မှ မလိမ္မာသေးဘူးဆိုရင်တော့ မင်းကို သတ်ပစ်မယ်” ဟူသောစကားများဖြင့် မှန်မှန်ကြီး အဆုံးသတ် တတ်လေသည်။ ညနေတိုင်းညနေတိုင်း အောက်ဆုံးအထပ်ရှိ စင်္ကြံများထဲတွင် နာမည်များ ဟစ်အော်ခေါ်ထုတ်နေသည်ကို ခင်ဗျား ဆက်တိုက်ကြီး ကြားနေရသည်။ လူငါးဆယ်၊ တရာ၊ နှစ်ရာ၊ တခဏချင်းတွင်ပင် နွားသတ်ရုံသို့ ပို့ရမည့် ကျွဲ,နွားများပမာ၊ ၎င်းတို့အား ကြိုးများဖြင့် တုပ်နှောင်ကြသည်။
နောက်လော်လီကား များဖြင့် တင်ဆောင်ကာ၊ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ပစ်ရန် ကောဘီလီဆီ သို့ခေါ်သွားကြသည်။ ၎င်းတို့၏ အပြစ်ကား အဘယ်နည်း။ ၎င်းတို့၏ အပြစ်ကား အပြစ် မရှိခြင်းတည်း ဟူသော အပြစ်ပင်ဖြစ်လေသည်။ သူတို့ကား အဖမ်းခံထားရသောသူများ ဖြစ်သည်။ ကြီးမားသော အမှုအခင်းတခုနှင့်မျှ မပတ်သတ်။ သူတို့ အားစစ်ဆေးနေရန် လုံးဝမလို။ ထို့ကြောင့်လည်း သူတို့အား သတ်ပစ်ရန် သင့်တော်လာလေတော့သည်။ ရဲဘော်တစ်ယောက်သည် အခြားလူကိုးယောက်အား ကဗျာပြောင်တပုဒ်ကို ဖတ်ပြသည်။ ထို့ကြောင့် ဆယ်ယောက် စလုံးအဖမ်းခံကြရသည်။ ဤအဖြစ်အပျက်ကား ဟိုင်းဒရစ်ကို မလုပ်ကြံမီ နှစ်လကဖြစ်လေသည်။ ယခုသူတို့အား လုပ်ကြံမှုကိုထောက်ခံသောသူများဟု သေဒဏ်ပေးရန် ခေါ်သွားကြလေသည်။ လွန်ခဲ့သော ခြောက်လက ဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်သော စာတမ်းများကို ဝေငှသည်ဟု သင်္ကာမကင်း ရှိသောကြောင့် အမျိုးသမီး တဦးအဖမ်းခံခဲ့ရသည်။ သူကမဟုတ်ကြောင်း ငြင်းဆိုနေ ခဲ့သည်။ ယခုသူ၏ညီမများ၊ သူ၏မောင်များ၊ သူ့ညီမများ၏ ယောက်ျားများနှင့် သူ့မောင်များ၏ မိန်းမများပါ ဖမ်းဆီး၍ အကုန်သတ်ပစ် လိုက်ကြသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် မိသားစုအလိုက် မျိုးရိုးအလိုက် အမျိုးဖြုတ်ခြင်းကား ဤမာရှယ်လော၏ ကြွေးကြော်သံ မဟုတ်ပါလော။ မှား၍အဖမ်းခံခဲ့ရသော စာတိုက်မှမင်းစေတယောက်သည် အောက်ထပ်ထရံဘေးတွင်ရပ် လျက်၊ လွှတ်မိန့်ကို စောင့်၍နေသည်။ နောက် အမည်ခေါ်သံကိုကြားသဖြင့် ရှေ့သို့ထွက်လာသည်။ ဤတွင် သူ့အား သေဒဏ်ပေးမည့်သူများ တန်းစီထားရာသို့ သွတ်သွင်းလိုက်သည်။ နောက်အပြင်သို့ ခေါ်ထုတ်သွားကာ ပစ်သတ်လိုက်လေသည်။ နောက်တနေ့ကျတော့မှ သေဒဏ်ခံရမည့်သူမှာ နာမည်ဆင်တူနှင့် အခြား သူတယောက်ဖြစ်ကြောင်း သိလာကြလေသည်။ ထို့အတွက် ကျန်နေသေးသော သူကိုလည်း ကွပ်မျက် လိုက်ကြလေသည်။ သည်တော့မှ အစစအရာရာမှာ နေသားတကျ ဖြစ်သွာလေသည်။ အသတ်ခံရမည့် သူတို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်အမှတ်အသားများကို သေချာစေ့ငုစွာ စစ်ဆေးရန် ဒါမျိုးတွေနဲ့ ဘယ်သူကသွားပြီး အချိန်ဖြုန်း နေနိုင်ပါ့မလဲ။ တမျိုးသားလုံးရဲ့ အသက်တွေကို နှုတ်ယူ ပစ်တော့မဲ့အတူတူ၊ ဒီလိုကိစ္စတွေဟာ အပိုတွေပဲ မဟုတ်လား။
ကောဘီလီဆီ – ပရာဟာမြို့ရှိ ရပ်ကွက်တခု။ ၁၉၄၂ ခုနှစ်၊ မာရှယ်လောအချိန်အတွင်းဝယ် နာဇီတို့သည် ဤနေရာ၌ ချက်အမျိုးသားများအများအပြားကို သတ် ဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
ညနေခင်း အတော်မှောင်နေမှကျနော်သည် အစစ်ခံရာမှ ပြန်လာသည်။ အောက်ဘက်ထရံဘေးတွင် ဗလာဂျီစလာ့ဗ်၊ ဗန်ချူးရား သည် သူ့ပစ္စည်း ကလေးများပါသော အထုပ်တထုပ်ကို ခြေထောက်များ အနားတွင်ချထားကာ မတ်တတ်ရပ်နေသည်။ အဓိပ္ပါယ်ကို ကျနော်ကောင်းစွာနားလည်သည်။ သူလည်း နားလည်သည်။ ကျနော်တို့ လက်ချင်းဆွဲ၍ နှုတ်ဆက်ကြသည်။ အပေါ်ထပ်စင်္ကြံပေါ်သို့ရောက်သည်အထိ သူ့အားမြင်နေနိုင်သေးသည်။ သူကား ခေါင်းကိုအနည်း ငယ်ညွှတ်လျက်၊ ဘဝတခုလုံး၏အလွန်၊ အဝေး…အဝေးသို့ အာရုံစိုက်နေလေသည်။ နာရီဝက်မျှကြာသော် သူ၏အမည်ကို ခေါ်ထုတ်လိုက်ကြလေသည်။
“ ဒီလိုလုပ်လို့ မင်းတို့မှာ ဘာကလေးတခုမှ သက်သာသွားမှာမဟုတ်ဖူး။ ဒို့တတွေထဲကလည်း လူတွေအများကြီး ကျကြလိမ့်အုံးမယ်၊ ဒါပေမယ့်စစ်ရှုံး ကြရမှာကမင်းတို့…” တဖန်၊ မွန်းတည့်ပိုင်းအချိန်။ ပက်ချက်နန်းတော်အောက်ထပ်တွင် ကျနော်တို့သည် နေ့လည်စာစားရန် ရပ်စောင့်နေကြသည်။ အဲလိယာ့ရှ် အားခေါ် သွင်းလာကြသည်။ သူ၏ချိုင်းအောက်တွင် သတင်းစာတစောင်ပါလာသည်။ သူကပြုံး၍ သတင်းစာကိုညွှန်ပြသည်။ သတင်းစာထဲတွင် ဟိုင်းဒရစ်ကို လုပ်ကြံသူ များနှင့် သူနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိကြောင်းကို ယခုပင်ဖတ်ရှုခဲ့ရလေသည်။
– ဖြီးနေတာချည့်ပဲ – သူသည် တိုတိုပဲပြောကာ အစားအသောက်ဘက်သို့ အာရုံစိုက်လေတော့သည်။
ဤမျှလောက် တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသော အချိန်ကြီးတွင် လူဟူသည်ကား …..
မာရှယ်လောကျေညာထားသော အချိန်အတွင်းက၊ အရာရှိတယောက်သည် ကျနော့်အား ဘရားညစ်အရပ်သို့ ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ လှပသော ဇွန်လသည် သမ္ဘာရာပင်အနံ့များ၊ အချိန်နှောင်းသော နန်းလုံးကြိုင်ပန်းရနံ့များဖြင့် ကြိုင်နေလေသည်။ အချိန်ကား တနင်္ဂနွေနေ့ညနေဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံး ဓာတ် ရထားဘူတာရုံအနီးရှိ လမ်းမကြီးမှာ၊ ပျော်ပွဲစားထွက်ရာမှ ပြန်လာကြသော ပျာယီးပျာယာလူအုပ်ကြီးဖြင့် ပြည့်ကြပ်၍နေလေသည်။ နေ၏အကြည်အဖြူ၊ ရေ၏ အယုအယ၊ ချစ်သူတို့၏အပွေ့အပိုက်တို့ကို ခံထားရသူများဖြစ်သည်။ ဆူဆူညံညံ၊ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နှင့် ကြေနပ်စွာပင်၊ ပင်ပန်းနေကြသည် – သူတို့အကြားတွင် လှည့်လည်ကာ သူတို့အတွင်းမှ လူများကိုလဲ ချိန်ရွယ်နေသည့် သေမင်း၊ ထိုသေမင်းကိုသာ သူတို့၏ မျက်နှာများပေါ်တွင် မတွေ့ရ။ သူတို့သည် ယုန်ကလေးများ ကဲ့သို့ ချစ်စဖွယ်တိုးဝှေ့ခုန်ပေါက်နေကြသည်။ ယုန်ကလေးတွေလိုပဲ။ သူတို့တအုပ်ကြီးထဲကို လက်လှမ်းလိုက်ပြီး တကောင်ကို ဟင်းချက်စားဘို့ ဆွဲထုတ်လိုက်စမ်း – သူတို့ဟာ ထောင့်တထောင့်ကို ကပ်သွားလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ တအောင့်လောက် ကြာရင်တော့ သူတို့ရဲ့သောကတွေ၊ ပျော်စရာတွေနဲ့ ဆက်လက်တိုးဝှေ့ယင်း၊ ဘ၀ရဲ့အရသာကို ခံနေကြဦးမှာပါပဲ။
ဤမျှသာ မကသေး။ တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာများ၏ ဗဟိုတည့်တည့်၊ အကျဉ်းခန်းအတွင်း၌ နေထိုင်ကြရသော ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင်လဲ ပြန်၍ကြည့်ကြဦး လော့ – ဒီအသားနဲ့မလုပ်လို့ ဘယ်အသားနဲ့လုပ်ထားတာမို့လို့လဲ။
ကျနော်သည် အကျဉ်းခန်းသို့ အမြဲတမ်းနောက်ကျ၍ ပြန်ရသည်။ ဘ, ပက်ရှက်ကား ပြန်မှပြန်လာပါ့မလားဟူ၍ အမြဲတစေ စိတ်ပူနေတတ်သည်။ ကျနော်ပြန်လာလျှင် ကျနော့်အား ဆီးဖက်၍နှုတ်ဆက်တတ်သည်။ ကျနော်ကလဲ ဘာသတင်းထူးသည်၊ ကောဘီလိဆီတွင် ဘယ်သူဖြင့် ကျဆုံးပြန်ပြီ စသည်တို့ ကို တိုတိုတုပ်တုပ်ပြောပြသည် – နောက်အံချင့်စဖွယ် ဟင်းရွက်ချောက်များကို လွေးကြမြိုကြ၍၊ လန်းဆန်းသော သီချင်းများကို ဆိုသည့်အခါ ဆိုကြသည်။ သို့မ ဟုတ် ဉာဏ်တုန်းလှသော အံစာလှိမ့်ကစားခြင်းတွင် စိတ်တိုစွာဖြင့်ကစားယင်း စိတ်ဝင်စားသွားကြသည်။ ထိုသို့ပင် ညဉ့်ဦးအချိန်တိုင်း လုပ်နေကိုင်နေတတ်ကြ သည်။ သို့သော် ထိုသို့သောအခါ၌ပင် အကျဉ်းခန်းတံခါးလဲ အချိန်မရွေး ပွင့်ထွက်လာနိုင်ကာ၊ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်အနက် တယောက်ယောက်အတွက် သေမင်း ခေါ်သံကြီး ပေါ်လာနိုင်ပေသည်။
– မင်း … ဒါမှမဟုတ် … မင်း၊ အောက်ကို ဆင်းရမယ်၊ ရှိသမျှပစ္စည်းတွေအကုန်ယူခဲ့။ မြန်မြန်လုပ် …
ကျနော်တို့၏ ကိုယ်၊ ကျနော်တို့၏ စိတ်အတွင်းတနေနေရာ၌ကား ဤအချိန်များသည် နက်ရှိုင်းသော အမှတ်အသားများကို ချန်မထားဘဲ နေမည်မ ဟုတ်ပေ။ ဦးဏှောက်ထဲတွင် ဖလင်လိပ်တလိပ်သဖွယ် ခိုအောင်း၍နေကောင်း နေလိမ့်မည်။ တကယ့် ဘ၀၊ အကယ်၍ ကျနော်တို့သာ တကယ့်ဘ၀သို့ ပြန်ရောက် ကြမည်ဆိုလျှင် တနေ့သောအခါတွင် ဖလင်လိပ်သည် ပြန့်ထွက်လာနိုင်သည်။ လူကို ရူးသွပ်သွားလောက်အောင် ပြန့်ထွက်လာနိုင်သည်။ သို့တည်းမဟုတ်၊ ကျနော်တို့သည် ထိုကာလကြီးကို ကြီးမားသော သုဿန်ကြီးအဖြစ်ဖြင့်သာ မြင်ကောင်း မြင်နေကြပေတာ့မည်။ ထိုသုဿန်ကြီးကား စိမ်းလန်းသော ဥယျာဉ်ကြီး ဖြစ်သည်။ ထိုဥယျာဉ်ထဲတွင် အဖိုးမဖြတ်နိုင်သော မျိုးစေ့များကို ပျိုးကျဲ၍ထားသည်။ ထိုအဘိုးမဖြတ်နိုင်သော ထိုမျိုးစေ့များကား အညွန့်အတက်များ ပေါက်လာမည့် မျိုးစေ့များ ဖြစ်ပေသည်။
၀တ္ထု	Leaveacomment